ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံမှု)၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအလေ့အကျင့်များနှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများနှင့်ကိုက်ညီသောတွေ့ရှိချက်များကိုလေ့လာခြင်း - Your Brain On Porn
တွေ့ရှိချက်များကိုညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှု (သည်းခံမှု)၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများနှင့်ကိုက်ညီသောလေ့လာမှုများကိုလေ့လာခြင်း
compulsive porn အသုံးပြုသူများသည် မကြာခဏသူတို့ရဲ့ porn အသုံးပြုမှုအတွက်တင်းမာမှုကိုဖော်ပြရန် ကြောင်း porn သစ်အမျိုးအစားများကြည့်ရှုသို့မဟုတ်ထုတ်ရှာကြံ သာ. ကြီးမြတ်အချိန်ပုံစံကြာပါသည်။ ထိတ်လန့်, အံ့သြစရာ, မျှော်လင့်ချက်ချိုးဖောက်သို့မဟုတ်ပင်စိုးရိမ်စိတ်သွေးဆောင်ကြောင်းနယူးအမျိုးအစားများလိင်စိတ်နိုးထတိုးမြှင့်ဖို့အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး, အဘယ်သူ၏တုံ့ပြန်မှုလှုံ့ဆော်မှုကြောင့်သုံးရင်ဖို့ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေကြီးထွားလာသည်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်အတွက်, ဒီဖြစ်စဉ်အလွန်ဘုံဖြစ်ပါတယ်။
-Norman Doidge MD ကသူ့ 2007 စာအုပ်၌ဤအကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည် ကိုယ်နှိုက်ကလည်းပြောင်းလဲဒါကဦးနှောက်:
လက်ရှိ porn ကပ်ရောဂါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာဝယ်ယူရနိုင်မယ့်ဂရပ်ဖစ်သရုပ်ပြပေးသည်။ မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုဖြင့်ဖြန့်ဝေသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်အာရုံကြောဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုအတွက်လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုကျေနပ်အားရစေသည်။ ညစ်ညမ်းဓာတ်ပုံဆရာများသည်စာအိတ်အသစ်ကိုပိုမိုတင်းကျပ်စွာမိတ်ဆက်ပေးခြင်းအားဖြင့်မိမိတို့၏စာအိတ်ကိုတွန်းအားပေးနေသည်ဟုဝါကြွားကြသောအခါသူတို့ဖောက်သည်များကအကြောင်းအရာအပေါ်သည်းခံနိုင်မှုကိုတည်ဆောက်ပေးသောကြောင့်သူတို့မဖြစ်မနေပြောရမည်ဖြစ်သည်။
အမျိုးသားစွန့်စားခန်းမဂ္ဂဇင်းများနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏နောက်ကျောစာမျက်နှာများသည် Viagra အမျိုးအစားဆေးဝါးများဖြစ်သည်။ လိင်တံတွင်အိုမင်းခြင်းနှင့်သွေးကြောပိတ်ဆို့ခြင်းများနှင့်ပတ်သက်သောစိုက်ထူသည့်ပြproblemsနာများရှိသက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်ဆေးဝါးကိုကြော်ငြာများဖြင့်ဖြည့်ထားသည်။ ဒီကနေ့ညစ်ညမ်းတဲ့လူငယ်လေးများသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရခေါ်ဝေါ်ကြသည့်အတိုင်းခွန်အားမရှိခြင်း (သို့) erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုလွန်စွာကြောက်နေကြသည်။ အထင်မြင်မှားစေသောအသုံးအနှုန်းကဤအမျိုးသားများသည်သူတို့၏လိင်တံတွင်ပြaနာရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။ သို့သော်ပြproblemနာကသူတို့၏ ဦး နှောက်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဦး နှောက်မြေပုံတွင်ဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုကြည့်တဲ့အခါလိင်တံကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်။ ၎င်းတို့သည်သူတို့သုံးစွဲနေသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်သူတို့၏အားနည်းချက်များအကြားဆက်နွယ်မှုရှိနိုင်သည်ကိုသူတို့တွေ့ခဲသည်။
2012 အတွက် reddit / nofap တစ်ဦးကိုထုတ်လုပ် အဖွဲ့ဝင်စစ်တမ်း, အရာသည်၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များက '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာ၏ 60 ကျော်% မျိုးစုံ porn အမျိုးအစားများအားဖြင့်သိသာထင်ရှားသောတင်းမာမှုကြုံတွေ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အကြှနျုပျ၏အရသာသိသိသာသာမပြောင်းခဲ့ပါဘူး - 29%
အကြှနျုပျ၏အရသာ ပို. ပို. လွန်ကဲသို့မဟုတ် deviant ဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်ဤငါ့ကိုအရှက်ကွဲခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုခံစားရစေ - 36%
နှင့် ... ငါ၏အရသာပို။ ပို။ သို့မဟုတ် deviant ဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်ဤပြု၏ မဟုတ် ငါ့ကိုအရှက်ကွဲခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုခံစားရစေ - 27%
ထိုအဒီမှာ 2017 င် PornHub ထံမှသက်သေအထောက်အထား လိင်မှုကိစ္စဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူတွေအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းတော့ဘူး။ Porn သည်လူတို့အားသူတို့၏“ အရသာ” အရသာကိုရှာဖွေနိုင်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ အဲဒါတွေကိုသူတို့ကိုပုံမှန်ထက်လွန်ကဲစွာဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်“ မမှန်ရာ” အမျိုးအစားများသို့ပို့ဆောင်ပေးသည် -
ဒါဟာလမ်းကြောင်းသစ်အဖြစ်မှန်ထက်စိတ်ကူးယဉ်ဆီသို့ပိုပြီးရွေ့လျားပုံရသည်။ 'Generic' porn သည်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း (သို့) သီးခြားမြင်ကွင်းများနှင့်အစားထိုးခြင်းဖြစ်သည်။ ပျင်းခြင်းသို့မဟုတ်သိချင်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသလား။ တစ်ခုမှာသေချာသည် ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှာဖွေနေကြသည့်သာမန် 'ဝင်ထွက်၊ ထွက်ပေါက်' သည်လူအများအားကျေနပ်မှုမရှိတော့ပါ” ဟုဒေါက်တာလော်ရီဘက်တီတိုကမှတ်ချက်ချသည်။
Ogas နှင့် Gaddam တို့က porn အသုံးပြုသူများအရှိန်မတက်စေသည့် meme အတွက်တစ်ခုတည်းသောအထောက်အပံ့ဖြစ်သည် အလွန်အမင်းဝေဖန် စာအုပ် "တစ်ဦးကဘီလီယံဆိုး Thoughts" နှင့်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်းအရသာသည်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတည်ငြိမ်နေဆဲဖြစ်သည်။ Ogas & Gaddam သည် AOL ရှာဖွေမှုများကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ ၃ လတာကာလအတွင်းလေ့လာခဲ့သည်။ Ogi Ogas ဘလော့ဂ်ပို့စ်မှကောက်နုတ်ချက်ပါ စိတ်ပညာယနေ့တွင်:
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းသည်အာရုံကြောဆိုင်ရာယန္တရားတစ်ခုခုကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်ဟူသောအထောက်အထားမရှိချေ။ ထို့အပြင်ပိုလျှံသောပစ္စည်းများကိုရှာဖွေခြင်းကိုချောသောလျှောစောက်အောက်သို့ဆွဲ တင်၍ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသားများ၏လိင်စိတ်ကုသမှုများသည်တည်ငြိမ်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများစွာရှိသည်။
YBOP နှစ်ခုဝေဖန်မှု (ထဲကထောက်ပြအဖြစ်1, 2):
porn အသုံးပြုသူများကိုခြေရာခံရမည်ဖြစ်သည် နှစ်ပေါင်း ယောက်ျားသတင်းပို့ကြသည်ပြောင်းလဲနေတဲ့အရသာများအမျိုးမျိုးကောက်ရန်။ သုံးလမလုံလောက်သောဖြစ်ပါတယ်။
အများစုမှာပုံမှန် porn အသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းရှာရန် Google အသုံးမကြဘူး။ အဲဒီအစား, သူတို့အနှစ်သက်ဆုံးပြွန် site ကိုတိုက်ရိုက်ဦး။ အသုံးပြုသူ masturbating နေစဉ် (Sidebar မှာတည်ရှိပါတယ်) အသစ်တခုအမျိုးအစားပေါ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလေ့လာမှုများသည်မလုံလောက်ပါက၊ ဤ ၂၀၁၇ လေ့လာမှုသည်ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများ၏လိင်မှုဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားတည်ငြိမ်နေမှုကိုမှတ်သားထားသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ဂေးတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ခြင်း, ရိုးရိုးနှင့်လိင်ကွဲအမျိုးသားများ: လိင်အကဲဆတ်သောမီဒီယာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အထားအားဖြင့်အသုံးပြုခြင်း။ ဒီမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုကနေကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
အဆိုပါတွေ့ရှိချက်ကိုလည်းညွှန်ပြ များစွာသောလူတို့သညျမိမိတို့အဖော်ပြထားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာနှင့်အတူ SEM အကြောင်းအရာကိုက်ညီမှုကြည့်ရှုအားပေးသညျ။ Iလိင်ကွဲ-ဖော်ထုတ်ယောက်ျား SEM အထီးလိင်တူချင်းအပြုအမူ (20.7%) ်နှင့်လိင်တူချစ်သူ-ဖော်ထုတ်ယောက်ျား SEM (55.0%) အတွက်လိင်ကွဲအပြုအမူကြည့်ရှုအစီရင်ခံရန်အဘို့အကြည့်ရှုအစီရင်ခံရန်အဘို့အ t ကိုအဆန်းမဟုတ်ခဲ့ပေ။ လိင်တူချစ်သူအမျိုးသားတွေသူတို့ကအတိတ်ကာလ 13.9 လအတွင်း (22.7%) နှင့်ကွန်ဒုံး (6%) မပါဘဲအင်္ဂါဇာတ်လိင်ကြည့်ရှုအားပေးကြောင်းအစီရင်ခံရန်အဘို့အဒါဟာအစအဆန်းမဟုတ်ခဲ့ပေ။
2019 တစ်ဦးအတွက် စပိန်လေ့လာမှု ယောက်ျားနှင့်မိန်းမ ၅၀၀ တွင် (ပျမ်းမျှအသက် ၂၁ နှစ်) ကလူအများစုသည်လိင်တူချစ်သူသို့မဟုတ်လိင်တူချစ်သူလိင်တူချစ်သူများအားလုံးကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြပြီးအများစုမှာဖြောင့်သော်လည်း၊
ထို့အပြင်တွေ့ ဤဆောင်းပါးတွင် ဖြောင့်ယောက်ျားအချိန်လိင်တူချစ်သူ porn 2018% စောင့်ကြည့်အစီရင်ခံသော 23 YOUPorn စစ်တမ်းအကြောင်း။ ဒါ့အပြင်သူတို့ရဲ့ porn အရသာအတိတ် 40 နှစ်များတွင်ပြောင်းလဲသွားပြီဟုလွှမ်းမိုးသောအမျိုးသမီးတွေအများစု (လူ 5%) အစီရင်ခံစာကြောင်းသတိပြုပါ။ စစ်တမ်းမှ:
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအခြားသူများနှင့်အတူတကွလေ့လာခဲ့သည့်ဤလေ့လာမှုသည်ယနေ့ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများအားနောက်ဆုံးတွင်မှတ်သားထားခြင်းသူတို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့လိင်ရှာဖွေတွေ့ရှိ"ပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များကိုဝင်တိုက်ခြင်း, ပြီးတော့ကျန်အချိန်များအတွက်သာလျှင်တစ်порပုံအမျိုးအစားကပ်ပါ။ သက်သေအထောက်အထားများမြင့်တက်နေခြင်းကြောင့်ဒီဂျစ်တယ်ညစ်ညမ်းမှုကိုစီးဆင်းခြင်းသည်အချို့သောအသုံးပြုသူများတွင်လိင်အရသာကိုပြောင်းလဲစေပြီး၎င်းသည်လေ့ကျင့်ခန်း (သို့) desensitization ဟုခေါ်သောစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။
အမျိုးမျိုးသောနည်းစနစ်များနှင့်ချဉ်းကပ်နည်းများကို အသုံးပြု၍ အောက်ပါကွဲပြားခြားနားသောလေ့လာမှုအုပ်စုများသည်“ ပုံမှန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ” ကိုလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်အတူအစွန်းရောက်ခြင်းနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအမျိုးအစားများသို့တိုးပွားလာခြင်းများကိုဖော်ပြသည်။ အတော်များများကလည်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအတွက်ရုပ်သိမ်းရေးလက္ခဏာတွေသတင်းပို့သည်။
ပါ FIRST ဆန်းစစ်ချက်: ဤသည်တင်းမာမှုနှင့် ပတ်သက်. တိုက်ရိုက် porn အသုံးပြုသူများကိုမေးမြန်းဖို့ပထမဦးဆုံးလေ့လာခဲ့လို့: အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ: ယောက်ျားတစ်နမူနာအတွက်ပြဿနာနှင့် Non-ပြဿနာအသုံးပြုမှုပုံစံများတစ်ခုကရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးလေ့လာမှု (2016)။ လူ 49% ယခင်ကသူတို့ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့တစ်ချိန်ကစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်းမဟုတျကွောငျး porn ကြည့်ရှုသတင်းပေးပို့အဖြစ်လေ့လာမှု, တင်းမာမှုကတင်ပြထားပါတယ်။ တစ်ဦးကောက်နုတ်ချက်:
ဒီဘယ်လ်ဂျီယံလေ့လာမှုမှာပြpornနာရှိတဲ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းဟာ erectile လုပ်ဆောင်မှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ယေဘူယျအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုလျော့နည်းစေခြင်းနဲ့ဆက်စပ်နေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်းပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများသည်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်ခံစားမှုများကိုခံစားခဲ့ရသည်။ (OSA's = အွန်လိုင်းလိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှု၊ အကြောင်းအရာသည် ၉၉% အတွက် porn ဖြစ်သည်။ ) စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်မှာပါဝင်သူ ၂၀.၃% ကသူတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ“ ငါ့အဖော်နှင့်နှိုးဆွရန်” ဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ကောက်နှုတ်ချက် -
ဤလေ့လာမှုသည်လိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် OSAs တွင်ပြproblemနာပါ ၀ င်မှုအကြားဆက်နွယ်မှုကိုတိုက်ရိုက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ပထမဆုံးဖြစ်သည်။ ရလဒ်များအရပိုမိုမြင့်မားသောလိင်ဆန္ဒ၊ ယေဘုယျအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်နိမ့်သော erectile လုပ်ဆောင်ချက်သည်ပြproblemနာရှိသော OSAs (အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ) နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဤရလဒ်သည်လိင်စွဲလမ်းမှုလက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်မှုမြင့်မားသောနှိုးဆွနိုင်သည့်အဆင့်ကိုအစီရင်ခံခဲ့သည့်ယခင်လေ့လာမှုများနှင့်ဆက်စပ်နိုင်သည် (Bancroft & Vukadinovic, 2004; Laier et al, 2013; Muise et al ။ , 2013) ။
စက္ကန့်ဆန်းစစ်ချက်: Dual Control Model - လိင်မှုကိစ္စနှိမ်နင်းခြင်းနှင့်အပြုအမူများတွင်လိင်ဆိုင်ရာတားမြစ်ခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း၏အခန်းကဏ္ ((၂၀၀၇). အင်ဒီယားနားတက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း, အယ်ဒီတာ: အဲ Janssen, pp.197-222 ။ ဗွီဒီယိုညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုသည့်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုတွင်လူငယ် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ပျမ်းမျှအားဖြင့်အသက် ၂၉ နှစ်ရှိကြသည်။ အမျိုးသားများက erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဟာတုန်လှုပ်သွားစေတဲ့သုတေသီများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါဘာသာရပ်များနှင့်အတူစကားစမြည်ထိုသူအချို့အတွက် erotica တစ်ဦးမြင့်မားသောထိတွေ့မှုအလွန်တိကျတဲ့များအတွက်လိုအပ်ချက်နဲ့ပေါင်းစပ်အချို့ကိစ္စများတွင်, "vanilla လိင်" erotica နှင့်အသစ်အဆန်းများနှင့်အပြောင်းအလဲတစ်ခုတိုးလာလိုအပ်ချက်တစ်ခုအောက်ပိုင်း Response အတွက်ရလဒ်ကြသလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကူးအားဖြည့် နှိုးဆော်ခြင်းရနိုင်ရန်အတွက်လှုံ့ဆော်မှုအမျိုးအစားများ.
တတိယ & စတုတ္ထလေ့လာမှု - နှစ်ဦးစလုံးကိုတွေ့ရှိခဲ့ deviant (ဆိုလိုသည်မှာ bestiality သို့မဟုတ်အသေးစား) ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတစ်သိသိသာသာအငယ်စတင်ခြင်းအစီရင်ခံကြောင်း။ ဒီလေ့လာမှုတွေကပိုပြီးအစွန်းရောက်ပစ္စည်းမှတင်းမာမှုလျှော့ချဖို့ porn အသုံးပြုမှုအစောပိုင်းကစတင်ခြင်းလင့်ထားသည်။
1) deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦး Guttman ကဲ့သို့သောတိုးတက်မှုအတိုင်းလိုက်နာပါသလား (2013) ။ တစ်ဦးကောက်နုတ်ချက်:
လက်ရှိလေ့လာမှုများ၏တွေ့ရှိချက်များကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦး Guttman ကဲ့သို့သောတိုးတက်မှုအတိုင်းလိုက်နာစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်ကလေးညစ်ညမ်းလောင်တဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီကိုလည်း nondeviant နှင့် deviant နှစ်ဦးစလုံးညစ်ညမ်း၏အခြားပုံစံများ, စားသုံးကြသည်။ ဒီဆက်ဆံရေးဟာတစ်ဦး Guttman ကဲ့သို့သောတိုးတက်မှုဖြစ်ဘို့, ကလေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကအခြားပုံစံများအပြီးပေါ်ပေါက်ဖို့ပိုပြီးဖြစ်ရပါမည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက် "စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်" deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမှအရွယ်ရောက်ပြီးသူသာကနေအကူးအပြောင်း facilitated လျှင်။ လက်ရှိလေ့လာမှုတိုင်းတာခြင်းအားဖြင့်ဒီတိုးတက်မှုအကဲဖြတ်ရန်ရန်ကြိုးစားခဲ့
ရလဒ်အပေါ်အခြေခံပြီး, deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဤတိုးတက်မှုအရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်းမြားတှငျပါဝငျခွငျးအတှကျတစ်ဦးချင်းစီ "စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်" ကြောင့်ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ Quayle နှင့်တေလာ (2003) ကအကြံပြုထားသကဲ့သို့, ကလေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုပြစ်မှုကျူးလွန်သူကပိုလွန်ကဲခြင်းနှင့် deviant ညစ်ညမ်းစုဆောင်းစတင်ရာမှ desensitization သို့မဟုတ်အစာစားချင်စိတ် satiation နှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါသည်။ လက်ရှိလေ့လာမှုတစ်ခုအငယ်အသက်အရွယ်မှာအရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံသူကိုတစ်ဦးချင်းစီညစ်ညမ်း၏အခြား deviant ပုံစံများမြားတှငျပါဝငျခွငျးအဘို့အ သာ. ကြီးမြတ်အန္တရာယ်မှာဖြစ်နိုင်ပါသည်အကြံပြုထားသည်။
2) Deviant ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု: အဆိုပါအစောပိုင်း-စတင်ခြင်းအရွယ်ရောက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုအခန်းကဏ္ဍနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ (2016). ကောက်နှုတ်ချက်:
သိသိသာသာအရွယ်ရောက်ပြီးသူသာအရွယ်ရောက်ပြီးသူ + deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု vs. ဟောကိန်းထုတ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်းများအတွက်စတင်ခြင်း၏နောက်ဆုံးဖြေဆိုသူ '' Self-အစီရင်ခံအသက်အရွယ်။ ထိုနေ့ရက်သည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ + deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအရွယ်ရောက်ပြီးသူသာညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကိုနှိုင်းယှဉ် nondeviant များအတွက်စတင်ခြင်းတစ်ဦးနုပျိုအသက် (အရွယ်ရောက်ပြီးသူ-သာ) ညစ်ညမ်း selfreported ။ ယေဘုယျအားဤတွေ့ရှိချက်များကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကြောင့်တစ်ဦး Guttman ကဲ့သို့သောတိုးတက်မှုအတိုင်းလိုက်နာစေခြင်းငှါ Seigfried-Spellar နှင့်ရော်ဂျာ (2013) ကရေးဆွဲနိဂုံးကိုထောကျပံ့ deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု nondeviant အရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုအပြီးပေါ်ပေါက်ဖို့ပိုဖွယ်ရှိသည်။
ပဉ္စမဆန်းစစ်ချက်: ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်အတူ Functional ဆက်သွယ်မှု Associated: Porn အပေါ်ဦးနှောက် (ကူနှင့်ဂယ်လိုင်းနတ်၊ ၂၀၁၄) - မက်စ်ပန့်ခ်ျအင်စတီကျု၏ fMRI လေ့လာမှုသည်ဆုလာဘ်စနစ် (dorsal striatum) တွင်ညစ်ညမ်းသည့်ပမာဏနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်မီးခိုးရောင်ကိစ္စကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင်လိင်မှုဆိုင်ရာဓါတ်ပုံများကိုခေတ္တကြည့်ရှုစဉ်ညစ်ညမ်းမှုကိုပိုမိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဆုလာဘ် circuit activation နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရသည်။ သုတေသီများကသူတို့၏တွေ့ရှိချက်များကတူညီသောနှိုးဆွမှုအဆင့်ကိုရရှိရန်ပိုမိုနှိုးဆွမှုအတွက်လိုအပ်ချက်ဖြစ်သော desensitization နှင့်သည်းခံမှုဖြစ်နိုင်သည်ဟုပြခဲ့သည်။ ခေါင်းဆောင်စာရေးသူ ဆီမှKühnအောက်ပါအချက်များကိုကပြောပါတယ် သူမ၏လေ့လာမှုမှာ about:
ဆိုလိုသည်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများပုံမှန်သုံးစွဲခြင်းကဆုလာဘ်စနစ်ကိုမှေးမှိန်သွားစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်တိုက်စားသုံးမှုမြင့်မားသောဘာသာရပ်များသည်ဆုတူအဆင့်တူရရန်ပိုမိုအားကောင်းသည့်လှုံ့ဆော်မှုများလိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆသည်။ ဤသည် striatum ၏အခြား ဦး နှောက်toရိယာများနှင့်အလုပ်လုပ်သောဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုသည်ဆုလာဘ်andရိယာနှင့် prefrontal cortex အကြားဆက်သွယ်မှုလျော့နည်းလာခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုတွေ့ရှိရသည်။ အဆိုပါ prefrontal cortex, striatum နှင့်အတူ, လှုံ့ဆျောမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းနှင့်ဆုလာဒ်ရှာကြံ drive ကိုထိန်းချုပ်ပုံရသည်။
ထို့ပြင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မေလတွင် Kuhn & Gallinat မှဤသုံးသပ်ချက်ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည် - Hypersexuality ၏ Neurobiological အခြေခံ။ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင် Kuhn & Gallinat တို့၏ ၂၀၁၄ fMRI လေ့လာမှုကိုဖော်ပြပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့မှမကြာသေးမီကပြုလုပ်သောလေ့လာမှုတစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျန်းမာသောအထီးကျန်ပါဝင်သူများကိုစုဆောင်းခဲ့ပြီးလိင်မှုဆိုင်ရာရုပ်ပုံများအပေါ် fMRI ၏တုန့်ပြန်မှုနှင့်သူတို့၏ ဦး နှောက်ပုံသဏ္ologyာန်နှင့်အတူညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်အတူတကွလေ့လာခဲ့သည့်အချိန်များနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် (Kuhn & Gallinat, 2014) ။ သင်တန်းသားများကိုနာရီများများကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာရွက်များစားသုံးခြင်းကိုသတင်းပို့ကြလေလေ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းကိုကြည့်ရှုခြင်းအတွက်နာရီပေါင်းများစွာသည် striatum ရှိမီးခိုးရောင်အမှုန်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုတွေ့ရှိရပြီး၊ မှန်မှန်ကန်ကန် ventral putamen သို့ရောက်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ဦးနှောက်တည်ဆောက်ပုံအသံအတိုးအကျယ်လိုငွေပြမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ desensitization ပြီးနောက်သည်းခံစိတ်၏ရလဒ်များကိုရောင်ပြန်ဟပ်စေခြင်းငှါသုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆဋ္ဌမဆန်းစစ်ချက်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်မှအသစ်အဆန်း, အေးစက်နှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု (2015) ။ compulsive porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုပိုမိုလေ့သတင်းပို့ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်က fMRI လေ့လာမှု။ တစ်ဦးကောက်နုတ်ချက်:
အွန်လိုင်းရှင်းလင်းပြတ်သားစွာသောလှုံ့ဆော်မှုများသည်ကျယ်ပြန့်စွာကျယ်ပြန့်စွာကျယ်ပြန့်စွာရောက်ရှိနေပြီး၊ ဤအင်္ဂါရပ်သည်လူတစ် ဦး ချင်းစီတွင်အသုံးပြုမှုပိုမိုမြင့်မားလာစေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်တူညီသောရှင်းလင်းပြတ်သားသောရုပ်ရှင်ကိုထပ်ခါတလဲလဲကြည့်ရှုနေသောကျန်းမာနေသည့်အထီးများသည်လှုံ့ဆော်မှုကိုလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနည်းပါးခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုနည်းခြင်းနှင့်စုပ်ယူမှုနည်းခြင်းတို့ကိုတွေ့ရသည် (Koukounas and Over, 2000) ။ … ကျနော်တို့ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူယောက်ျားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့အသစ်အဆန်း-ရှာ, အေးစက်နှင့်လေ့ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကြောင်းဆေးပညာရှုလေ့လာဖြစ်ပါတယ်စမ်းသပ်မှုတွေအဘယ်အရာကိုပြသပါ။
ဆက်ဆံရေးသတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း FROM မှ
ဤအချိန်၌သုတေသီများကလိင်စွဲလမ်းသူများသည်လိင်နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ဆက်စပ်သည့် (ဥပမာအားဖြင့်စိတ္တဇပုံစံများ) ရွေးချယ်မှုများပိုမိုပြုလုပ်နိုင်သည့်နေရာတွင်ပြသခဲ့သည်။ ဤအချက်သည်စွဲလမ်းသူတစ် ဦး ၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အပြစ်မဲ့ပုံများသည်လိင်ဆိုင်ရာပုံရိပ်များကိုရှာဖွေရန် 'လှုံ့ဆော်' နိုင်သည်ဟူသောအယူအဆကိုထောက်ခံသည်။
လိင်အကျင့်စွဲသူများသည်တူညီသောလိင်ဆိုင်ရာပုံရိပ်ကိုအကြိမ်ကြိမ်ကြည့်သောအခါကျန်းမာသောစေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ဦး နှောက်၏ dorsal anterior cingulate cortex ဟုခေါ်သောလှုပ်ရှားမှုမှာအကျိုးကျေးဇူးများစွာလျော့နည်းကျဆင်းသွားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဖြစ်ရပ်အသစ်များ ဤအရာသည် 'လေ့ကျင့်ခြင်း' နှင့်ကိုက်ညီသည် ဥပမာအားဖြင့်၊ ကော်ဖီသောက်သူတစ် ဦး သည်သူတို့၏ပထမခွက်မှကဖိန်းဓာတ်တစ်မျိုးရနိုင်သည်။ သို့သော်အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှကော်ဖီသောက်လေလေ၊
ဒေါက်တာ Voon က“ အင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များသည်အထူးသဖြင့်သင့်လျော်သည်။ “ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုကဘာကိုအစပျိုးပေးသလဲဆိုတာမသေချာမရေရာပါဘူး။ အချို့သောသူများကအခြားသူများထက်စွဲလမ်းမှုကိုပိုမိုစွဲလမ်းစေနိုင်သော်လည်း၊ ပုံရိပ်တွေ အွန်လိုင်းပေါ်မှာရရှိနိုင်တာကသူတို့ရဲ့စွဲလမ်းမှုကိုကူညီပေးတယ်။ [အလေးပေးထည့်သွင်း]
သတ္တမဆန်းစစ်ချက်: လိင်ယုံကြည်ချက်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၏သက်ရောက်မှု Exploring, နားလည်မှုနှင့်လူပျို၏အလေ့အထများ: တစ်ဦးကအရည်အသွေး surve (2016). တစ်ဦးကောက်နုတ်ချက်:
အစွန်းရောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုတင်းမာမှုအပါအဝင် SEM ၏ရရှိမှု၏တိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်: တွေ့ရှိချက်သော့ချက် themes များဖြစ်ကြောင်းအကြံပြု ဤလေ့လာမှုတွင်လူငယ်များကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူများအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်သည်ဟုရှုမြင်သော (နေရာတိုင်းကြည့်ပါ) (မကောင်းသည်) ။ မိသားစုသို့မဟုတ်လိင်ပညာရေးသည် SEM တွင်လူငယ်များလိုက်နာသည့်စံနှုန်းများကို 'ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း' (Buffers) အချို့ပေးနိုင်သည်။ အချက်အလက်များအရဆယ်ကျော်သက်များ၏ကျန်းမာသောလိင်ဘဝ (Healthy Sex Life) နှင့်သင့်လျော်သောယုံကြည်မှုများနှင့်အပြုအမူများ (Knowing Right from Wrong) မှရှုပ်ထွေးသောအမြင်များ (စိတ်ကူးယဉ်စစ်မှန်သောကျမ်းပိုဒ်) သည်ဆယ်ကျော်သက်များ၏မျှော်လင့်ချက်အပေါ်ရှုပ်ထွေးသောအမြင်များကိုအကြံပြုထားသည်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကြောင်းကျိုးဆက်စပ်လမ်းကြောင်းကိုဖော်ပြထားပြီး ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်သည့်နေရာများကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။
အဋ္ဌမဆန်းစစ်ချက်: "porn စွဲ" နဲ့ကိုက်ညီမှုပြဿနာအသုံးပြုသူများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေအားဖြင့်နှောင်းပိုင်းကအပြုသဘောအလားအလာများ Modulation (Prause et al ။, 2015 ။ )
ကနေတစ်ဦးကစက္ကန့် EEG လေ့လာမှု နီကိုးလ် Prause ရဲ့အဖွဲ့။ ဒီလေ့လာမှုကမှအ 2013 ဘာသာရပ်များနှိုင်းယှဉ်လျှင် သံမဏိ et al။ , 2013 (သေးပါကအထက်အမည်ရှိတူညီသောအတိုင်းအတာများအားနည်းချက်တွေကိုခံစားခဲ့ရ) အနေနဲ့အမှန်တကယ်ထိန်းချုပ်အုပ်စု။ ရလဒ်: ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် "သူတို့ porn ကြည့်ထိန်းညှိပြဿနာများကြုံနေရတစ်ဦးချင်းစီ" vanilla ညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံများကိုတစက္ကန့်ထိတွေ့မှုမှနိမ့်ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ခဲစာရေးသူက "ဒီရလဒ်တွေကိုမလုပ်ပဲporn စွဲ debunk။" ဘာ တရားဝင်သိပ္ပံပညာရှင် သူတို့ရဲ့တည်းသောပုံမှန်မဟုတ်လေ့လာမှုတစ်ခု debunked မူကြောင်းကိုတောင်းဆိုမယ်လို့ လေ့လာမှုကောင်းစွာထူထောင်လယ်ပြင်?
၏အဖြစ်မှန်မှာတော့တွေ့ရှိချက် Prause et al ။ 2015 နှင့်အတူဿုံ align Kühn & Gallinat ကို (2014)ပိုမိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကို vanilla porn ၏ရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်လျော့နည်းဦးနှောက်ကို Activation ဆက်နွယ်နေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရာ။ Prause et al။ တွေ့ရှိချက်များကိုလည်းနှင့်အတူ align BANCA et al ။ 2015။ ထိုမှတပါး, အခြား EEG လေ့လာမှု အမြိုးသမီးမြားတှငျပိုမို porn အသုံးပြုမှုကို porn မှ ဦး နှောက် activation နှင့်ဆက်နွယ်သောတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ EEG နိမ့်ဖတ်ခြင်းကဘာသာရပ်များသည်ရုပ်ပုံများကိုအာရုံစိုက်မှုနည်းသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများသည် vanilla porn ၏ငြိမ်သက်သောပုံရိပ်များကိုအထင်မသေးပါ။ သူတို့က (လေ့သို့မဟုတ် desensitized) ပျင်းခဲ့ကြသည်။ ဒီကိုကြည့်ပါ ကျယ်ပြန့် YBOP ဝေဖန်မှု. ကိုး peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများဒီလေ့လာမှုအမှန်တကယ်မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများကို (စွဲလမ်းနှင့်ကိုက်ညီ) တွင် desensitization / လေ့တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသဘောတူ: ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု Prause et al။ , 2015
နဝမဆန်းစစ်ချက်: လုလင်တို့သည် (2014) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ရောဂါနှင့်ကုသမှုတစ်ခု etiological အချက်အဖြစ်ပုံမှန်မဟုတ်သော masturbatory အလေ့အကျင့်. ဤစာတမ်းပါဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာချက် (၄) ခုအနက်မှလိင်မှုဆိုင်ရာပြpornနာများ (လိင်စိတ်နည်းခြင်း၊ လိင်စိတ်နည်းခြင်း၊ ညစ်ညမ်းဝတ်စုံများ၊ anorgasmia) ရှိသူနှင့် ပတ်သက်၍ တင်ပြသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုသည်အပတ်စဉ်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများမှရှောင်ကြဉ်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ၈ လအကြာတွင်အမျိုးသားသည်လိင်ဆန္ဒပြင်းပြမှု၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်ကိုအောင်မြင်စွာရရှိခြင်း၊ လူနာ၏အကျင့်စရိုက်နှင့်အရှိန်အဟုန်မြှင့်မှုကိုမှတ်တမ်းတင်သည့်စာရွက်မှကောက်နုတ်ချက်များကိုသူကပိုမိုအစွန်းရောက်သောလိင်အမျိုးအစားများအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။
masturbatory အလေ့အကျင့်နှင့်ပတ်သက်ပြီးမေးတဲ့အခါသူကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကတည်းကညစ်ညမ်းကြည့်နေစဉ်လွန်ခဲ့သည့်အတွက်သူပြင်းပြင်းထန်ထန်နှင့်လျှင်မြန်စွာ masturbating ခဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါညစ်ညမ်းမူလကအဓိကအား zoophilia, ကျွန်ခံ, လွှမ်းမိုးမှုကို, sadism နှင့် masochism ပါဝင်သည်, ဒါပေမယ့်သူကနောက်ဆုံးမှာသည်ဤပစ္စည်းများမှ habituated နှင့်လိင်လိင်, orgies နှင့်အကြမ်းဖက်လိင်အပါအဝင်ပိုပြီးအမာခံညစ်ညမ်းမြင်ကွင်းများ, လိုအပ်တယ်။ သူကအကြမ်းမဖက်လိင်အပြုအမူများနှင့်အဓမ္မပြုကျင့်မှုအပေါ်တရားမဝင်ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်တွေကိုဝယ်ဖို့အသုံးပြုနှငျ့အမြိုးသမီးနှင့်အတူလိင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအားမိမိစိတ်ကူးစိတ်သန်းရှိသူတို့မြင်ကွင်းများမြင်။ သူတဖြည်းဖြည်းမိမိအလိုဆန္ဒနှင့်အ fantasize ရန်သူ၏စွမ်းရည်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရနှင့်သူ၏တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအကြိမ်ရေလျော့သွားသည်။
လိင်ကုထုံးနှင့်အတူအပတ်စဉ်အစည်းအဝေးများနှင့် တွဲဖက်. မှာတော့လူနာဗီဒီယိုများ, သတင်းစာတွေ, စာအုပ်တွေနဲ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအပါအဝင်လိင်ကရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်းမှမဆိုထိတွေ့မှု, ရှောင်ရှားရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ 8 လအတွင်းပြီးနောက်လူနာအောင်မြင်သောအော်ဂဇင်နှင့်သုတ်ရည်လွှတ်ကြုံနေရသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သူမိန်းမနှင့်သူ၏ဆကျဆံရေးသက်တမ်းတိုး, သူတို့တဖြည်းဖြည်းကောင်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ခံစားနိုင်ခဲ့သည်။
ဆယ်ဘို့တဘို့ဆန်းစစ်ချက်: အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများ (2016) နဲ့တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်စာပေများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ ယူအက်စ်ရေတပ်ဆရာဝန်များမှ ဦး ဆောင်ပြီးပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင်လူငယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများမြင့်တက်လာကြောင်းဖော်ပြသည့်နောက်ဆုံးပေါ်အချက်အလက်များဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုမှတစ်ဆင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောအာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှုများကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ ညစ်ညမ်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖော်ထုတ်သောစစ်မှုထမ်း ၃ ဦး ၏ဆရာ ၀ န်များတွင်ဆရာ ၀ န်များပါ ၀ င်သည်။ ၀ န်ထမ်းသုံး ဦး အနက်မှနှစ် ဦး သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဖျက်သိမ်းခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများကိုကုသပေးခဲ့ပြီးတတိယမြောက်သူသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ရှားနိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့်တိုးတက်မှုအနည်းငယ်သာတွေ့ကြုံခဲ့ရသည်။ စစ်မှုထမ်းသုံး ဦး အနက်မှနှစ် ဦး သည်လက်ရှိညစ်ညမ်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုပိုမိုအသုံးပြုခြင်း ပထမဆုံးစစ်မှုထမ်းများသည်သူ၏အလေ့အကျင့်ကို“ နူးညံ့သောညစ်ညမ်းမှု” နှင့်ဖော်ပြပြီးပိုမိုဂရပ်ဖစ်နှင့် fetish porn သို့တိုးပွားလာခြင်းကိုဖော်ပြသည်။
တစ်ဦးက 20 နှစ်အရွယ်တက်ကြွတာဝန်ယခင်ခြောက်လလိင်ဆက်ဆံမှုစဉ်အတွင်းအော်ဂဇင်ရရှိအခက်အခဲများနှင့်အတူတင်ပြကော့ကေးဆပ်စစ်မှုထမ်းဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ သူကရေခြားမြေခြားတပ်ဖြန့်နေတုန်းဒါဟာပထမဦးဆုံးဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ သူကတစ်ဦးအော်ဂဇင်မပါဘဲတစ်နာရီခန့်အဘို့အ masturbating ခဲ့ပါတယ်, သူ၏လိင်တံ flaccid သွားလေ၏။ မိမိအအခက်အခဲများစိုက်ထူထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်ရရှိသည်မိမိဖြန့်ကျက်လျှောက်လုံးဆက်ပြောသည်။ မိမိအပြန်လာကတည်းကသူသည်မိမိစေ့စပ်နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်း ejaculate နိုင်ခဲ့ဘူး။ သူကတစ်ဦးစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်ပေမယ့်အော်ဂဇင်မရနိုင်နှင့် 10-15 MIN ပြီးနောက်သူကြိုတင်သည်သူ၏ရှိခြင်း ED ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များမှအမှုမဟုတ်ခဲ့တော်မူသောစိုက်ထူ, ဆုံးရှုံးမယ်လို့နိုင်ဘူး။
လူနာနှစ်ပေါင်း၏အတိတ်စုံတွဲတို့အတွက်နီးပါးနေ့စဉ်တကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ် "နှစ်ပေါင်း" အတွက်မကြာခဏ masturbating နှင့်ထောက်ခံ။ သူကဆွဘို့အအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းကြည့်ရှုထောက်ခံ။ သူကမြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက် access ကိုရရှိခဲ့ချိန် မှစ. သူတစ်ခုတည်းကိုသာအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအပေါ်မှီခို။ အစပိုင်းမှာအကြောင်းအရာသေချာပေါက်အမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံမှုပါဝင်ပါဘူးရှိရာ "အပျော့ porn" "ဟုအဆိုပါလှည့်ကွက်ခဲ့တယျ" ။ သို့သော်တဖြည်းဖြည်းသူအော်ဂဇင်ကိုပိုမိုဂရပ်ဖစ်သို့မဟုတ် fetish ပစ္စည်းလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူကတစ်ပြိုင်နက်တည်းမျိုးစုံဗီဒီယိုများဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အများဆုံးလှုံ့ဆော်အစိတ်အပိုင်းများကိုစောင့်ကြည့်အစီရင်ခံခဲ့သည်။ [အလေးပေးထည့်သွင်း]
ဒုတိယစစ်မှုထမ်းကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပိုမိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ရုပ်ပုံများကိုပိုမိုဂရပ်ဖစ်ညစ်ညမ်းမှုသို့တိုးပွားစေခြင်းအကြောင်းဖော်ပြသည်။ ထို့နောက်မကြာမီသူ၏ဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို“ အရင်ကဲ့သို့မပြုလုပ်နိုင်ပါ” -
တစ်ဦးက 40 နှစ်အရွယ်အာဖရိကန်အမေရိကန်အခက်အခဲယခင်သုံးလစိုက်ထူရရှိအတူတင်ပြစဉ်ဆက်မပြတ်တက်ကြွတာဝန်၏ 17 နှစ်ပေါင်းနဲ့အတူစစ်မှုထမ်းဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ သူဟာသူ့ဇနီးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံရှိသည်ဖို့ကြိုးစားခဲ့သောအခါ, ထိုအခက်အခဲတစ်ခုစိုက်ထူခြင်းနှင့်အခက်အခဲအော်ဂဇင်ဖို့လုံလောက်တဲ့ရှည်လျားသောကြောင့်ထိန်းသိမ်းရရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့အငယ်ဆုံးကလေးကခြောက်လအစောပိုင်းက, ကောလိပ်များအတွက် left အစဉ်အဆက်ကတည်းက သူက privacy တိုးမြှင့်ခြင်းကြောင့်ပိုပြီးမကြာခဏတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်
သူသည်ယခင်ကအခြားရက်သတ္တပတ်များအားတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခဲ့သော်လည်းတစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ်မှသုံးကြိမ်အထိတိုးများခဲ့သည်။ သူသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအမြဲသုံးလေ့ရှိသည်၊ သို့သော်၎င်းကိုသူမကြာခဏအသုံးပြုလေလေ၊ ဒါကြောင့်သူ့ကိုဂရပ်ဖစ်ပစ္စည်းတွေပိုသုံးခဲ့တယ်။ မကြာမီတွင်သူ၏ဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်ယခင်ကကဲ့သို့“ လှုံ့ဆော်မှုကင်းမဲ့” ပြီးတစ်ခါတစ်ရံသူ၏ဇနီးသည်ကို“ ဆွဲဆောင်မှုမရှိ” ဟုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူကသူတို့အိမ်ထောင်ရေး၏ခုနစ်နှစ်အစောပိုင်းကဤကိစ္စများရှိခြင်းအစဉ်အဆက်ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ သူ့ဇနီးကသူ adamantly ငြင်းပယ်သည့်ကိစ္စ, ရှိခြင်းခံခဲ့ရသံသယဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအိမ်ထောင်ရေးကိစ္စများရှိခြင်းခဲ့သည်။ [အလေးပေးထည့်သွင်း]
ဒသမဆန်းစစ်ချက်: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု (1986) ခုနှစ်တွင်ပြောင်းလဲ Preferences ကို - အကြမ်းမဖက်သောညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုခြောက်ပတ်ကြာထိတွေ့ခံစားခဲ့ရမှုကြောင့် vanilla porn ကိုစိတ်မ ၀ င်စားဘဲ“ အဆန်းမဟုတ်သောညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ” (အနှောင်အဖွဲ့၊ sadomasochism, bestiality) ကိုနီးကပ်စွာစောင့်ကြည့်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ကောက်နှုတ်ချက် -
ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကျောင်းသားများနှင့် nonstudents ဘုံ, အကြမ်းမဖက်ညစ်ညမ်း၏တစ်နာရီဖို့ဒါမှမဟုတ်ခြောက်လဆက်တိုက်ရက်သတ္တပတ်၏အသီးအသီးအတွက်လိင်နှင့်မှထုတ်ပြန်သောဗလာပစ္စည်းများနှင့်ထိတွေ့ခဲ့သည်။ နှစ်ပတ်ဒီကုသမှုပြီးနောက်, သူတို့တစ်တွေပုဂ္ဂလိကအခြေအနေမှာဗီဒီယိုတိပ်ခွေကိုကြည့်ဖို့အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူပေးအပ်ခဲ့ကြသည်။ R-rated G-rated, နဲ့ X-rated အစီအစဉ်များကိုရရှိနိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဘုံ, အကြမ်းမဖက်ညစ်ညမ်းဖို့စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာကြိုတင်ထိတွေ့မှုနှင့်အတူဘာသာရပ်များအစားဆန်းညစ်ညမ်း (ကျွန်ခံ, sadomasochism, bestiality) စောင့်ကြည့်ဖို့ရွေးကောက်တင်မြှောက်, ဘုံ, အကြမ်းမဖက်ညစ်ညမ်းအတွက်နည်းနည်းအတိုးပြသခဲ့သည်။ ဘုံမှကြိုတင်ထိတွေ့မှုနှင့်အတူအထီး nonstudents, အကြမ်းမဖက်ညစ်ညမ်းနီးပါးသီးသန့်ဆန်းညစ်ညမ်းလောင်လေ၏။ အတန်ငယ်လျော့နည်းအစွန်းရောက်ပေမယ့်အထီးကျောင်းသားများ, တူညီသောပုံစံပြ။ ဤသည်စားသုံးမှု preference ကိုအမျိုးသမီးများတွင်သက်သေအထောက်အထားလည်းဖြစ်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးကျောင်းသားများအကြား, ဝေးလျော့နည်းသိသာခဲ့ပါတယ်။ [အလေးပေးထည့်သွင်း]
ဒွါဒသမဆန်းစစ်ချက်: တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ (2016) တွေထဲမှာပြဿနာကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုဆန်းစစ်ပါဆက်စပ်မှု - ဆင်းရဲသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုလည်ပတ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းအသုံးပြုခြင်းသည်လူများအိုင်ပီကိုနေ့စဉ်စတင်သုံးစွဲသည့်အခါပေါ်ထွက်လာသည်။
IP ကိုမှပထမဦးဆုံးထိတွေ့မှု၏ခေတ် (စားပွဲတင်2ကိုကြည့်ပါ) သိသိသာသာမကြာခဏနှင့်စွဲလမ်း IP ကိုအသုံးပြုမှုကိုဆက်နွယ်နေကြောင်းခံရဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ပိုပြီးမကြာခဏ IP ကိုသုံးစွဲဖို့ကပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်အနေနဲ့အစောပိုင်းကအသက်အရွယ်မှာ IP ကိုထိတွေ့သူသင်တန်းသားများကို, ကြာကြာအိုင်ပီအစည်းအဝေးများရှိသည်, Adapted DSM-5 အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲလိုအပ်ချက်အပေါ်ပိုမိုမြင့်မားဂိုးသွင်းဖို့ပိုဖွယ်ရှိ နှင့် CPUI-comp အစီအမံ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့စုစုပေါင်း IP ကိုထိတွေ့မှုသိသိသာသာ IP ကိုအသုံးပြုမှုပိုမိုမြင့်မားအကြိမ်ရေဆက်နွယ်နေကြောင်းခံရဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ကြာကြာ IP ကိုမှစုစုပေါင်းထိတွေ့ခဲ့သူကိုသင်တန်းသားများကိုလည်းတစ်လလျှင်ပိုပြီးအိုင်ပီအစည်းအဝေးများရှိသည်ဖို့ကပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်။
ဆယ်သုံးဆန်းစစ်ချက်: မကြာခဏညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု, အပြုအမူများနှင့်ဆွီဒင်အမျိုးသားပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း (2017) အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်အဆက်မပြတ်အကြားဆက်ဆံရေး - ၁၈ နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးများတွင်ညစ်ညမ်းသောအသားကိုအသုံးပြုခြင်းသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မကြာခဏညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများသည် Hard-core porn ကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။ ယင်းကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကိုတိုးပွားစေသည်ကိုညွှန်ပြသလား။
စာရေးသူမကြာခဏ porn နောက်ဆုံးမှာခက်ခဲ-Core သို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းများအတွက် preference ကိုဦးတည်သွားစေခြင်းအလိုငှါအကြံပြု:
ဒါဟာကစာရင်းအင်းသိသိသာသာဆက်ဆံရေးဟာညစ်ညမ်းအကြောင်းကိုကူးယဉျအကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ပါတ်နဲ့ Hard core ကိုညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်အကြားတွေ့သောလည်းမှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ နှုတ်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ညစ်ညမ်းအတွက်ဒါအမြားအတစ်ခုဖြစ်သည်ကတည်းကအများဆုံးမြီးကောင်ပေါက်ခက်ခဲစဉ်းစားဘာ core ကိုညစ်ညမ်းဖွယ်ရှိအကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအမှုဖြစ်လျှင်, နှင့် ပေတရုနှင့် Valkenburg အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံစိုကျလှနျး၏အကြံပြုသိသိသဘာဝတရား၏အလငျး၌, ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘဲဖြင့် manifest လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်, ခက် core ကိုညစ်ညမ်းသူတို့ကိုမှုတွေကိုဖြစ်စေစောင့်ကြည့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်သူတို့၏စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်စိတျ၏တစ်ဦးချင်းစီ '' purging '' ထက်ကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
တဆယ်လေးဆန်းစစ်ချက်: အဆိုပါပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုစကေး (PPCS) (2017) ၏ဖွံ့ဖြိုးရေး - ဤစာတမ်းသည်မူးယစ်ဆေးစွဲစွဲလမ်းမှုမေးခွန်းပုံစံများအပြီးလုပ်သောပြpornနာရှိသောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှုမေးခွန်းလွှာကိုတီထွင်ပြီးစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ယခင်ညစ်ညမ်းဆေးစွဲသူများနှင့်မတူဘဲဤမေးခွန်း ၁၈ ခုပါသောမေးခွန်းလွှာသည်အောက်ပါမေးခွန်း ၆ ခုနှင့်သည်းခံမှုနှင့်ရုပ်သိမ်းမှုကိုအကဲဖြတ်သည်။
မေးခွန်းတစ်ခုစီကိုတစ်လုံးမှခုနစ်ခုမှရမှတ်အတိုင်းအတာဖြင့်ရရှိသည် - ၁ - ဘယ်တော့မှ၊ ၂- ရံဖန်ရံခါ၊ ၃။ ရံဖန်ရံခါ၊ ၄။ တစ်ခါတစ်ရံ၊ ၅ - မကြာခဏ၊ ၆။ မကြာခဏ၊ အောက်ပါဇယားသည်ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများကို“ အကြမ်းမဖက်သော၊ ”“ အန risk တရာယ်မရှိသော” နှင့်“ အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်မှု” အပေါ် အခြေခံ၍ အမျိုးအစားသုံးမျိုးခွဲထားသည်။ အဝါရောင်လိုင်းသည်ပြproblemsနာမရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများသည်“ အနိမ့်ဆုံးစွန့်စားမှု” နှင့်“ စွန့်စားရသည့်အချိန်တွင်” သည်းခံမှုနှင့်ရုပ်သိမ်းမှုနှစ်ခုလုံးကိုဖော်ပြသည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလေ့လာမှုကတွန်းအား (သည်းခံမှု) နဲ့ရုပ်သိမ်းခြင်းကိုတကယ်မေးခဲ့တယ်။ နှစ်ခုလုံးကညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူတွေဆီကပါ။ အငြင်းအခုန်အဆုံး။
ဆန်းစစ်ချက်ငါး: အမူအကျင့်စွဲအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အင်တာနက် Out-of ထိန်းချုပ်မှုအသုံးပြုမှု? - လာမည့်လေ့လာမှုကို (ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ မှ ၂၂ ရက်အထိအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုဆိုင်ရာ ၄ ကြိမ်မြောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံတွင်တင်ပြခဲ့သည်) သည်းခံမှုနှင့်ရုပ်သိမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခဲ့သည်။ ဒါဟာနှစ် ဦး စလုံး "porn စွဲ" ၌တွေ့။
အန္နŠevčíková1, လောနိတျမွို့ Blinka1 နှင့်အခါတွင်Soukalová1
1Masaryk တက္ကသိုလ်, Brno, ချက်သမ္မတနိုင်ငံ
အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအမူအကျင့်စွဲနေတဲ့ပုံစံအဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်ထားရမည်ရှိမရှိအနေနဲ့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆွေးနွေးငြင်းခုံရှိပါတယ် (Karila, Wéry, Weistein et al ။ , 2014) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက် (OUISP) အတွက်အင်တာနက် Out-of-ထိန်းချုပ်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းသောအတိုင်းအတာကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာရည်ရွယ်ပစ္စုပ္ပန်အရည်အသွေးလေ့လာမှုကိုကုသရာတွင်၎င်းတို့၏ OUISP ကြောင့်ဖြစ်နှင့်သောသူတို့တစ်ဦးချင်းစီအကြားအပြုအမူစွဲများ၏အယူအဆအားဖြင့်ရှုမြင်သုံးသပ်ကြနိုင်ပါသည်။
ကျနော်တို့ 21-22 နှစ်ပေါင်း (မာဂုပညာရှိ = 54 နှစ်) အသက် 34.24 သင်တန်းသားများနှင့်အတူ In-depth အင်တာဗျူးများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးအကြောင်းအရာအလိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအသုံးပြုခြင်း, OUISP ၏လက်တွေ့ရောဂါလက္ခဏာတွေသည်းခံစိတ်နဲ့ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေပေါ်အထူးအာရုံစိုက်နှင့်အတူ, အမူအကျင့်စွဲ၏စံသတ်မှတ်ချက်နှင့်အတူဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည် (Griffiths က, 2001) ။
အဆိုပါကြီးစိုးပြဿနာအပြုအမူ Out-of-ထိန်းချုပ်မှုအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု (OOPU) ဖြစ်ခဲ့သည်။ OOPU မှသည်းခံစိတ်တည်ဆောက်ခြင်းညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်သုံးစွဲအချိန်တစ်ခုတိုးပွားလာငွေပမာဏသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ် non-deviant ရောင်စဉ်အတွင်းအသစ်နှင့်ပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုရှာဖွေနေသူ့ဟာသူထင်ရှား။ ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေဟာ psychosomatic အဆင့်တွင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုထင်ရှားခြင်းနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုရှာဖွေနေ၏ပုံစံကိုယူ။ တဆယ်သင်တန်းသားများကိုစွဲသတ်မှတ်ချက်အပေါငျးတို့သမပြည့်စုံ။
ဆန်းစစ်ချက်ခွော: (ဗြိတိန်စိတ်ရောဂါနေဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်): အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် pedophilia (2013) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
ဆန်းစစ်ချက်ခုနစျ: ကရေတိုရေရှည် psychosexual မော်ဒယ်အတွင်းနှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်ဆက်ဆံဖို့ကိုဘယ်လိုခက်ခဲပါသလဲ တစ်ဦးကအမှုလေ့လာမှုနှိုင်းယှဉ် (2017) - နှောင့်နှေးသုတ်သင်ပယ်ရှင်းခြင်း (anorgasmia) အတွက်အကြောင်းရင်းများနှင့်ကုသမှုများကိုသရုပ်ဖော်ထားသော "ပေါင်းစပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု" နှစ်ခုပါသည့်အစီရင်ခံစာ။ “ လူနာ B” သည်ကုထုံးဖြင့်ကုသသောလူငယ်များကိုကိုယ်စားပြုသည်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်မှာစာရွက်ကလူနာ B ၏ဖော်ပြသည် “ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုသည်ခက်ခဲသောပစ္စည်းအဖြစ်သို့ရောက်သွားသည်။ စာတမ်းကညစ်ညမ်းနှေးကွေးသောသုတ်ရည်လွှတ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောနှောင့်နှေးကြန့်ကြာခြင်းမှာအဆန်းမဟုတ်၊ လိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှု၏ညစ်ညမ်းမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပိုမိုလေ့လာရန်စာရေးသူမှတောင်းဆိုထားသည်။ ၁၀ ပတ်ကြာ porn မပါသောလူနာ B ၏နှောင့်နှေးနေသောသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းကိုကုသခဲ့သည်။ တင်းမာမှုနှင့်ဆက်စပ်သောကောက်နုတ်ချက်များ။
အဆိုပါရောဂါဖြစ်ပွားမှု Croydon တက္ကသိုလ်ဆေးရုံ, လန်ဒန်မှာရှိတဲ့အမျိုးသားကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအတွင်းငါ၏အမှုကနေယူပေါင်းစပ်အမှုပေါင်းဖြစ်ကြသည်။ (အဆုံးစွန်သောအမှုနှင့်အတူလူနာ B), ကတင်ဆက်မှုအလားတူရောဂါနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ထှထှေကေုအားဖြင့်ရည်ညွှန်းခဲ့ကြသူငယ်ရွယ်ယောက်ျားတစ်ဦးအရေအတွက်ကိုထင်ဟပ်သတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ လူနာ B ကိုသူထိုးဖောက်မှုမှတဆင့် ejaculate နိုင်ခြင်းကြောင့်တင်ဆက်သူတစ်ဦး 19 နှစ်အရွယ်ဖြစ်ပါသည်။ သူ 13 ခဲ့သောအခါသူမှန်မှန်အင်တာနက်ရှာဖွေမှုများကိုမှတဆင့်မိမိပေါ်တွင်သို့မဟုတ်သူ၏အဆွေခင်ပွန်းသူ့ကိုစေလွှတ်သောလင့်များမှတဆင့်ဖြစ်စေညစ်ညမ်းဆိုဒ်များအားဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ သူက image ကိုသူ့ဖုန်းကိုရှာဖွေနေစဉ်ညတိုင်း masturbating စတင် ... သူအိပ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ masturbate မပြုခဲ့ပါ။ ခက်ခဲပစ္စည်း (တရားမဝင်ဘာမျှ) သို့, (Hudson-Allez, 2010 ကိုကြည့်ပါ) ကိုမကြာခဏကိစ္စဖြစ်သကဲ့သို့သူကို အသုံးပြု. ခဲ့ညစ်ညမ်း, ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ခဲ့ ...
ကျနော်တို့ကသူမရှိတော့ masturbate မှညစ်ညမ်းအသုံးပြုနိုင်သည်မယ်လို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ ဤသည်ညဥ့်အခါတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားတဲ့အခန်း၌မိမိဖုန်းကိုထွက်ခွာဆိုလိုသညျ။ ကျနော်တို့သူတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားလမ်းအတွက် masturbate မယ်လို့သဘောတူညီခဲ့ ... ။အဆိုပါဆောင်းပါးတွင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုသို့သုတေသနနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်လိင်အင်္ဂါ desensitisation အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုဘို့ရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်။
သငျတနျးတဆယ်ရှစ်: Emotion မသိနှင့် Non-သတိဆောင်ရွက်ချက်များ: သူတို့ဟာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုကြိမ်နှုန်းနှင့်အတူပြောင်းသလား? (2017) erotica အပါအဝင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်စေသောရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူ၏တုန့်ပြန်မှု (EEG ဖတ်ခြင်းနှင့်စတင်ခြင်းတုံ့ပြန်မှု) ကိုလေ့လာမှုကလေ့လာခဲ့သည်။ တွေ့ရှိချက်နှစ်ခုကညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကိုလေ့ကျင့်လေ့ရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။
4.1 ။ အကဲဆတ်သော Ratings အဖွဲ့
စိတ်ဝင်စားစရာမြင့် porn ကိုအသုံးပြုခြင်းအဖွဲ့အလတ်စားအသုံးပြုမှုအုပ်စုတစ်စုထက်ပိုမနှစ်မြို့ဖွယ်အဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်တွေသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစာရေးဆရာကဒီတစ်သူတို့များသောအားဖြင့်အထဲကရှာအံ့သောငှါစခွေငျးငှါနှိုးဆွမှုအဆင့်အတန်းပေးမ IAPS database ထဲတွင်ပါရှိသော "ခေါ်ဆောင်သွား" ပုံရိပ်တွေ၏အတော်လေး "ပျော့-Core" သဘောသဘာဝကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်အကြံပြုက [Harper ကိုနှင့် Hodgins အားဖြင့်ပြသထားသည့်58] ညစ်ညမ်းပစ္စည်းမကြာခဏကြည့်ရှုနဲ့အတူများစွာသောတစ်ဦးချင်းစီကိုမကြာခဏဇီဝကမ္မ arousal ၏တူညီသောအဆင့်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကပိုပြင်းထန်သောပစ္စည်းကြည့်ရှုသို့မြင့်လာကြောင်း။ အဆိုပါ "သာယာသော" စိတ်လှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစားအဖြစ်အနည်းငယ်ပိုပြီးမနှစ်မြို့ဖွယ်ပျမ်းမျှအခြားအုပ်စုများထက်ပုံရိပ်တွေ rating မြင့်အသုံးပြုမှုအုပ်စုတစ်စုနှင့်အတူအတော်လေးဆင်တူဖြစ်ဖို့အားလုံးကိုသုံးအုပ်စုများက valence ratings ကိုမြင်တော်မူ၏။
ဤသည်နောက်တဖန်ကြောင့် "သာယာသော" ရုပ်ပုံများကိုမြင့်မားအသုံးပြုမှုအုပ်စုတစ်စုအတွက်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်လုံလောက်သောလှုံ့ဆော်မှုမပေးအပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်သည်။ လေ့လာရေးတသမတ်တည်း [မကြာခဏညစ်ညမ်းပစ္စည်းထုတ်ရှာသောသူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လေ့သက်ရောက်မှုကြောင့်အစာစားချင်စိတ်အကြောင်းအရာအပြောင်းအလဲနဲ့တစ်ဦးဇီဝကမ္မ downregulation ပြခဲ့ကြ3,7,8] ။ ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုလေ့လာတွေ့ရှိရလာဒ်များအတွက်အကောင့်စေခြင်းငှါစာရေးသူ '' ရန်တွေ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
4.3 ။ ထိတ်လန့် reflex Module (SRM)
သူတို့ကအတော်လေးပိုပြီးမနှစ်မြို့ဖွယ်ဖြစ်ရှာတွေ့စေခြင်းငှါအဖြစ်အနိမ့်နှင့်အလတ်စား porn အသုံးပြုမှုအုပ်စုများတွင်တွေ့မြင်အဆိုပါဆွေမျိုးပိုမိုမြင့်မားလွှဲခွင်ထိတ်လန့်အကျိုးသက်ရောက်မှု, ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုရှောင်ရှားအုပ်စုထဲမှာသေူကရှင်းပြသည်နိုင်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်လည်းရရှိသောရလဒ်များကို [လေ့သက်ရောက်မှုထိတ်လန့်မျက်စိမှိတ်တုံ့ပြန်မှုတိုးမြှင့်ပြသခဲ့ကြသည်အဖြစ်သိရပါအံ့, ဤအုပ်စုများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကိုသူတို့အတိအလင်းကြောင့်အခြားသူတွေအကြားအရှက်၏အကြောင်းပြချက်မှဖြစ်နိုင်သည်ဖော်ပြထားထက်ပိုမိုညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ကြဘူး, ကြောင့်လေ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမှဖြစ်မည်အကြောင်း41,42].
ဆန်းစစ်ချက်ဆယ်ကိုး: လိင် Active ကိုတစ်ဦးချင်း (2017) ၏အလိုက်အတွက်လိင်-Related စကားမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုတို့အကြားဆက်ဆံရေး Exploring - ဤလေ့လာမှုမှတွေ့ရှိချက်များကိုပုံတူပွားသည် ဒီ 2014 ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကလေ့လာမှု ညစ်ညမ်းစွဲစွဲသူများ၏ဘက်လိုက်မှုကိုကျန်းမာရေးထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။ ဤတွင်အသစ်အဆန်းဖြစ်သည်။ လေ့လာမှုက“ လိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှုနှစ်” နှင့် ၁) လိင်စွဲမှုရမှတ်များနှင့် ၂) အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု၏ရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲစွဲလမ်းမှုကိုစွဲလမ်းသူတွေထဲမှာ ပိုနည်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှစ် related ခဲ့ကြသည် သာ. ကြီး အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု။ ဒီတော့ပိုမိုမြင့်မားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုရမှတ်များ + နှစ်နည်းပါးသည့်လိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ = စွဲစွဲလမ်းမှုပိုမိုများပြားသောလက္ခဏာများ (ပိုမိုအာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုသို့မဟုတ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု) ။ သို့သော်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုသည်မလိုမုန်းထားသူများအတွက်သိသိသာသာကျဆင်းသွားပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းလိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအရပျောက်ကွယ်သွားသည်။
"ဤရလဒ်များအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောရှင်းပြချက်တစ်ခုမှာလိင်ဆိုင်ရာအပြုသဘောဆောင်သည့်လူတစ် ဦး သည် ပို၍ အနိုင်ကျင့်သောအပြုအမူတွင်ပါဝင်သောကြောင့်ဆက်စပ်သောနှိုးဆွမှုပုံစံ [36-38] နှင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတူညီသောနှိုးဆွမှုအဆင့်ကိုသဘောပေါက်ရန်လိုအပ်သည် ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်ပိုမိုအပြုသဘောဆောင်သည့်အပြုအမူများပြုလုပ်သည့်အခါအာရုံကြောလမ်းကြောင်းသည် ပို၍ ပုံမှန်ဖြစ်သောလိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံများကိုအာရုံမခံစားနိုင်တော့ဘဲတစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်လိုချင်သောနှိုးဆွမှုကိုပိုမိုသိရှိရန်ပိုမိုအစွန်းရောက်သောလှုံ့ဆော်မှုများသို့ပြောင်းလဲသွားသည်ဟုထပ်မံငြင်းခုံသည်။ ဤအချက်သည် 'ကျန်းမာသော' ယောက်ျားများသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတိကျသောလှုံ့ဆော်မှုများကိုခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်းပြသသည့်အလုပ်နှင့်အညီဖြစ်သည်။
ဤအချက်က ပိုမို၍ တွန်းအားဖြစ်စေသော၊ လိင်ဆိုင်ရာတက်ကြွသောပါဝင်သူများသည်လက်ရှိလေ့လာမှုတွင်အသုံးပြုထားသော“ ပုံမှန်” လိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောစကားလုံးများကို“ ထုံထိုင်းခြင်း” သို့မဟုတ် ပို၍ လျစ်လျူရှုလာခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောပြသမှုသည်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလျော့နည်းစေပြီး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လှုံ့ဆော်မှုကပိုပြီးအာရုံခံစားသိမြင်မှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်လို့ပဲ
ဆန်းစစ်ချက်နှစ်ဆယ်, ဘာပါဝင်သူတစ်ဦးအရည်အသွေးလေ့လာမှု: လိင်ကွဲပြားမှု, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိစ္စရပ်များကိုနှင့်ကုသမှုအတွက်သက်ရောက်မှု (2000) - ကောက်နှုတ်ချက်:
တစ်ယခင်သမိုင်းနှင့်အတူတစ်ဦးက 30 နှစ်အရွယ်လူ "porn, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း, မကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေး," သူ၏ကျဘာအတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ wrote: နှစ်ပေါင်း၏နောက်ဆုံးစုံတွဲငါကြည့်ရှုအားပေးပါတယ်ပိုမိုညစ်ညမ်းမှာလျော့နည်းထိခိုက်မခံတဲ့ငါဖြစ်၏ ငါထိုးစစ်ရှာတွေ့ဖို့အသုံးပြုကြောင်းအချို့ညစ်ညမ်း။ အခုတော့ငါကအချို့ (စအိုလိင်ဆက်ဆံ, အမျိုးသမီးများ peeing, etc) ကဖွင့်ရသည့် Net ကအပေါ်ညစ်ညမ်း၏သက်သက်အရေအတွက်ဤအမှုကိုပြုသောသိရသည်။ ဒါဟာလျော့နည်း sensitized သင်, သင့်အိမ်ရဲ့ privacy ကိုအတွက်သိချင်စိတ်ထဲကအချို့အမှုအရာအပေါ်ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုလွယ်ကူပါတယ်, နှင့်ပိုပြီးသူတို့ကိုသင်ကြည့်ရှုပါ။ ငါသာအမျိုးသမီးပုံစံ၏ဂုဏ်အသရေဖေါ်ပြခြင်း softcore porn သို့ဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ ယခုငါရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအမာခံသို့မိပါတယ်။
ဆန်းစစ်ချက်နှစျဆယျ့ ONE: လိင်စိတ်နိုးထနှင့်လိင်အကဲဆတ်သောမီဒီယာ (SEM): လိင်နှင့်လိင်အရှေ့တိုင်းဆန် (2017) ရဲ့တစ်ဖက်မှာ SEM မှလိင်စိတ်နိုးထ၏ Comparing ပုံစံများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကျေနပ်မှု။ ဒီလေ့လာမှုမှာပါဝင်သူ porn ၏ 27 အမျိုးအစားများ (themes များ) နှင့်ဆက်စပ်သောသူတို့ရဲ့လိင်စိတ်နိုးထအကြောင်းမေးခဲ့ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်သုတေသီများသည်ဤ 27 အထူးသဖြင့်အမျိုးအစားများသာသူတို့ကိုလူသိများသည်ရွေးကောက်ခဲ့သည်။ သူတို့မည်သို့လည်း "Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း" သော "ခေတ်ရေစီးကြောင်း" သူတို့ထင်ရသောကျပန်းအမျိုးအစားပေးထား, နက်နဲသောအရာတခုကိုဖြစ်နေဆဲခဲ့ပြီးသောအမျိုးအစားများဆုံးဖြတ်သည်။ (သုတေသီများ၏မတရားအမျိုးအစားများကိုကြည့်ပါ.)
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ဤလေ့လာမှုသည်ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများသည်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသောအမျိုးအစားများကိုနှစ်သက်သည်ဟုဆိုကြသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတင်းမာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တိုက်ရိုက်မမေးမြန်းသော်လည်းလေ့လာမှုအရ၎င်းတို့သည်အမျိုးအစားမတူသောညစ်ညမ်းကြည့်ရှုသူများဟုအမျိုးအစားခွဲခြားထားသည့်အကြောင်းအရာများသည်အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများကဲ့သို့သောအမျိုးအစားများဖြစ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာကောက်နုတ်ချက်များအနည်းငယ်:
ဆန်းစစ်ချက်နှစျဆယျ့နှစျ: တစ်အကြီးစားအမျိုးသားနမူနာ (2018) နှင့်အတူဘာဂန်-ယေးလ်လိင်စွဲလမ်းစကေး၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အတည်ပြုခြင်း။ ဤစာတမ်းသည်“ စွဲလမ်းမှု” မေးခွန်းများအားပစ္စည်းစွဲစွဲလမ်းမှုမေးခွန်းပုံစံများအပြီးလုပ်ခဲ့သည့်ပုံစံကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ စာရေးသူများရှင်းပြသည့်အတိုင်းယခင်မေးခွန်းများသည်စွဲလမ်းမှု၏အဓိကကျသည့်အချက်များကိုချန်လှပ်ထားသည်။
အများစုမှာယခင်လေ့လာမှုများအသေးလက်တွေ့နမူနာအပေါ်မှီခိုပါပြီ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုဘာဂန်-ယေးလ်လိင်စွဲလမ်းစကေး (BYSAS) ထူထောင်စွဲအစိတ်အပိုင်းများကို (ဆိုလိုသည်မှာ salience / တဏှာ, ခံစားချက်ပြုပြင်မွမ်းမံ, သည်းခံစိတ်, ရုပ်သိမ်းရေး, ပဋိပက္ခ / ပြဿနာများနှင့် relapse / အရှုံးပေါ်နဲ့ပါတ်သက်လိင်-The စွဲအကဲဖြတ်ဘို့အသစ်တစ်ခုနည်းလမ်းတင်ဆက် ထိန်းချုပ်မှု) ။
အဆိုပါ BYSAS အားဖြင့်အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်ခြောက်စွဲသတ်မှတ်ချက်အသုံးချဖို့တီထွင်ခဲ့သည် ဘရောင်း (1993), Griffiths က (2005)နှင့် အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း (2013) လတ်ဆတ်မှု၊ စိတ်နေစိတ်ထားပြုပြင်မှု၊ သည်းခံမှု၊ ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများ၊ ပconflictsိပက္ခများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပြန်လည်စတင်ခြင်း / ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ လိင်စွဲမှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဤရောဂါလက္ခဏာများမှာ - salience / တဏှာလိင်သို့မဟုတ်လိုသောလိင်နှင့်အတူ -over-အတွက်အဆက်မပြတ်, ခံစားချက်ပြုပြင်မွမ်းမံခံစားချက်အတွက်အပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်စေ -excessive လိင်, သည်းခံနေခြင်းအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှလိင်၏ပမာဏ -increasing, ဆုတ်ခွာ-လိင်ဆက်ဆံမဟုတ်သည့်အခါမနှစ်မြို့ဖွယ်စိတ်ခံစားမှု / ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေ, ပဋိပက္ခအလွန်အကျွံလိင်၏တိုက်ရိုက်ရလဒ်အဖြစ် -inter- / intrapersonal ပြဿနာများ, relapseabstinence / ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူကာလအပြီးယခင်ပုံစံများမှ -returning နှင့် ပြဿနာများကျန်းမာရေး -impaired နှင့်ကောင်းစွာခံစွဲလမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမှပေါ်ပေါက်။
ဘာသာရပ်များတွင်အများဆုံးတွေ့ရသော "လိင်စွဲလမ်းမှု" အစိတ်အပိုင်းများသည် salience / တပ်မက်ခြင်းနှင့်သည်းခံစိတ်တို့ဖြစ်သော်လည်းရုပ်သိမ်းခြင်းအပါအ ၀ င်အခြားအစိတ်အပိုင်းများမှာလည်းအနိမ့်ဆုံးအဆင့်အထိပြသခဲ့သည်။
Salience / တဏှာနှင့်သည်းခံစိတ်ကိုပိုမိုမကြာခဏပင်အခြားပစ္စည်းများထက်ပိုမိုမြင့်မားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အမျိုးအစားအတွက်ထောက်ခံနှင့်ဤပစ္စည်းများကိုအမြင့်ဆုံးအချက် Loading ခဲ့ခဲ့ကြသည်။ ဤအ (: လူတွေကိုစိတ်ဓာတ်ကျခံစားအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားဂိုးသွင်း, ထို့နောက်သူတို့သတ်သေကျူးလွန်စီစဉ်စိတ်ကျရောဂါအကြောင်းကိုဥပမာဆိုတဲ့မေးခွန်းကို) လျော့နည်းပြင်းထန်သောရောဂါလက္ခဏာများကိုထင်ဟပ်သကဲ့သို့ဤကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပုံရသည်။ ဤသည်ကိုလည်းပစ္စည်းများရုပ်သိမ်းရေး, relapse နှင့်ပဋိပက္ခကိုပိုမိုအတိုင်းအတာနှိပ်သော်လည်း, salience, တဏှာ, သည်းခံစိတ်များနှင့်ခံစားချက်ပြုပြင်မွမ်းမံအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်နှိပ်ပစ္စည်းများ -where ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုထင်ဟပ်ဖို့စောဒကတက်နေကြသည် (မကြာခဏဂိမ်းစွဲလမ်းလယ်ပြင်တွင်တွေ့မြင်) ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများနှင့်စွဲလမ်းအကြားတွင်ခြားနားချက်များကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါ စွဲလမ်း။ နောက်ထပ်ရှင်းပြချက်ကြောင့် salience, တဏှာနှင့်သည်းခံစိတ်ရုပ်သိမ်းရေးနှင့် relapse ထက်ပိုသက်ဆိုင်ရာများနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်းထဲမှာထင်ရှားတဲ့ဖြစ်နိုင်သည်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလေ့လာမှုက "ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်အတည်ပြုသော 2017 လေ့လာမှုနှင့်အတူပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုစကေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းသူများနှင့်လိင်စွဲလမ်းသူများသည်သည်းခံခြင်းနှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများမခံစားရဟုမကြာခဏထပ်ခါတလဲလဲပြောဆိုခြင်းကိုငြင်းဆိုသည်။
နှစျဆယျ့သုံးလေ့လာဖို့: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ (2018) ကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့် desensitization တွင်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများမှ exposure - porn နှင့်ထိတွေ့မှုသည် desensitization (သို့) လေ့ကျင့်ခြင်းကို ဦး တည်သည့်ရှားပါးသော longitudinal study တစ်ခုဖြစ်သည်။ Abstract:
ဒါဟာကောင်းစွာမြီးကောင်ပေါက်ဥပမာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများကြည့်ရှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသက်အရွယ်နှင့်အတူတိုးပွါးသောအလေ့အကျင့်ကအင်တာနက်အသုံးပြုလူသိများသည်။ မတိုင်မီကသုတေသနတလက်ပေါ်သိမြင်မှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြား link တစ်ခုအကြံပြုနှင့်အခြားပေါ်တွင်အင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများကြည့်ရှုခဲ့သည်။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများမှထိတွေ့မှုနှင့်အချိန်ကျော်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ၏အမြင်အပေါ်တစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှ desensitizing အကျိုးသက်ရောက်မှုလေ့လာစူးစမ်းဖို့ရည်ရွယ်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု။ အဆိုပါလေ့လာမှုဒီဇိုင်းကို longitudinal ရှိ၏ အချက်အလက်များကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ၆ လတာကာလအတွင်းလှိုင်း ၃ ခုဖြင့်စုဆောင်းရရှိခဲ့သည်။ နမူနာတွင်ကျောင်း ၅၅ ကျောင်းမှဖြေကြားသူ ၁၁၃၄ ဦး (မိန်းကလေးများ၊ ၅၈.၈%; ပျမ်းမျှအသက်၊ ၁၃.၈၄ - ၁.၉၄ နှစ်) ပါဝင်သည်။ တစ် ဦး က multivariate တိုးတက်မှုနှုန်းမော်ဒယ်ဒေတာကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
အဆိုပါရလဒ်များဖြေဆိုသူ, အသက်ပေါ် မူတည်. အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအင်တာနက်ပေါ်ရှိထိတွေ့မှု၏ကြိမ်နှုန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းသူတို့ရဲ့အမြင်ပြောင်းလဲထိတွေ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိခဲ့ရှိမရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သူတို့ဟာဒီထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများအားဖြင့်နှောင့်အယှက်ခံနေရ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ desensitized ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ရလဒ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းတစ်ခုပုံမှန်ညွှန်ပြလိမ့်မည်။
ဆန်းစစ်ချက်နှစျဆယျ့လေး: အရည်အသွေးနှင့်အရေအတွက် 10-တစ်ပတ်ကြာဒိုင်ယာရီအကဲဖြတ် (2018): compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေများအတွက်ကုသမှုရှာကြံယောက်ျား၏အဓိကလက္ခဏာအဖြစ်ညစ်ညမ်း Bing - ဤလေ့လာမှုကအသက် ၂၂-၃၇ နှစ်ရှိအမျိုးသား ၉ ဦး နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းနောက်တွင်မေးခွန်းပုံစံနှင့် ၁၀ ပတ်ကြာဒိုင်ယာရီအကဲဖြတ်မှုများပါဝင်သည်။ အောက်ပါကောက်နုတ်ချက်သည်အသုံးပြုမှုတိုးပွားမှုကိုဖော်ပြသည်။
အားလုံးလူနာမှုများထပ်တလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ် / အပြုအမူတွေကနေခံစားခဲ့ရနှင့်၎င်းတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအရေးကြီးသောဘဝတာဝန်များကို၏ mishandling အတွက်ရလဒ်ကဝန်ခံပြောကြားသည်။ အားလုံးလူနာပြဿနာတစ်ခုတဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးတက်မှုသတိပြုမိ နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုဘဝဖြစ်ရပ်များနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို (တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွားအများအားဖြင့်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှု) ကို အသုံးပြု. ဝန်ခံခဲ့သည်။ လူနာတစ်ဦးချင်းစီ CSB ကန့်သတ်ရန်သို့မဟုတ်အဆုံးသတ်ခြင်းမှမျိုးစုံကြိုးစားမှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ အများအားဖြင့်, သက်ရောက်မှုဆင်းရဲသားတွေနဲ့ယာယီခဲ့ကြသည်, သို့သော်အချို့ relapses အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ abstinence ၏ရှည်ကာလ (1 တစ်နှစ်အထိလပေါင်းများစွာ) ကဖော်ပြခဲ့သည်။
ဆန်းစစ်ချက်နှစ်ဆယ့်ငါး: တစ်စုံတွဲအပြင်းအထန်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ (2012) နှင့်အတူဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကုထုံး - သည်းခံခြင်းနှင့်ဆုတ်ခွာခြင်းစသည်တို့ကိုဆွေးနွေးထားသည်
အလားတူပင်သည်းခံစိတ်လည်းညစ်ညမ်းမှဖွံ့ဖြိုးနိုင်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်း၏အချိန်ကြာမြင့်စွာစားသုံးမှုပြီးနောက်, ညစ်ညမ်းလျော့ဖို့ excitatory တုံ့ပြန်မှု; ဘုံညစ်ညမ်းခြင်းဖြင့် evoked ရှံမုနျး်လည်းကြွေတတ်ခြင်းနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာစားသုံးမှု (Zillman, 1989) နဲ့ရှုံးနိမ့်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်အဘယ်အရာကိုစပိုင်းတွင်တစ်ဦး excitatory တုံ့ပြန်မှုမှဦးဆောင်သေချာပေါက်ကတော့မကြာခဏစားသုံးပစ္စည်းခံစား၏တူညီသောအဆင့်အထိဦးတည်သွားစေပါဘူး။ အဲဒီမှာ-Fore ဘယျအရာတစ်ဦးချင်းအစပိုင်းတွင်၎င်းတို့၏စွဲ၏နောက်ပိုင်းတွင်အဆင့်ဆင့်၌သူတို့ကိုနှိုးဆှမည်မဟုတ်ပါနှိုးဆော်ခြင်း။ သူတို့စိတ်ကျေနပ်မှုအောင်မြင်ရန်ဒါမှမဟုတ်သူတို့တစ်ချိန်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ရှံမုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသောကြောင့်, ညစ်ညမ်းစွဲတစ်ဦးချင်းစီကိုယေဘုယျတူညီသော excitatory ရလဒ်အောင်မြင်ရန်ညစ်ညမ်း၏တိုးတ္ထုပုံစံများကိုရှာကြာလော့။
ဥပမာအားဖြင့်, ညစ်ညမ်းစွဲမဟုတ်သောညစ်ညမ်းပေမယ်လိုက်စားပုံရိပ်တွေနှင့်အတူစတင်နိုင်ပါသည်, ပြီးတော့ပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမာဂုပညာရှိမှတိုးနိုင်ပါတယ်။ arousal တစ်ဦးချင်းစီကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူမှေးမှိန်အဖြစ်တစ်ခုစွဲတစ်ဦးချင်းစီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ images နဲ့ erotica ပိုဂရပ်ဖစ်ပုံစံများမှအပေါ်ကိုရွှေ့စေနိုင်သည်။ arousal နောက်တဖန်မှေးမှိန်သကဲ့သို့, ပုံစံ titillating, ပို. ပို. ဂရပ်ဖစ်ထည့်သွင်းရန်ဆက်လက်နှင့်မီဒီယာများ၏အမျိုးမျိုးသောပုံစံများမှတဆင့်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအသေးစိတ်ပုံဖော်ရိုက်ကူးမှု။ Zillman (1989) အချိန်ကြာမြင့်စွာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလိင်၏လျော့နည်းဘုံပုံစံများ featuring ညစ်ညမ်းများအတွက်ဦးစားပေး (ဥပမာ, အကြမ်းဖက်မှု) ဦးတည်ပြီးနိုင်ပြီး, လိင်၏သဘောထားအမြင်ပြောင်းလဲပစ်စေခြင်းငှါဤသို့ဖော်ပြသည်။ ဒီပုံစံကိုတဦးတည်းညစ်ညမ်းစွဲနှင့်အတူကြည့်ဖို့မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်ဟုအဘယျသို့ပုံဆောင်ပါပေမယ့်, အားလုံးမဟုတ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးစွဲသို့ဤအဆငျ့ဆငျ့ခံစားရသည်။
ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကနေဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေစိတ်ကျရောဂါ, ယားယံခြင်း, စိုးရိမ်ပူပန်မှု, စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးအတှေးအများနှင့်ညစ်ညမ်းများအတွက်ပြင်းထန်သောတောပါဝင်နိုင်သည်။ ကြောင့်ထိုအမကြာခဏပြင်းထန်သောဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေမှ, ဒီအားဖြည့်ခြင်းမှရပ်စဲတစ်ဦးချင်းစီနှင့်စုံတွဲရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာနှစ်ခုလုံးအတွက်အလွန်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။
နှစျဆယျ့ခြောက်လေ့လာဖို့: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုအကျိုးဆက်များ (2017) - ဤလေ့လာမှုကအင်တာနက်သုံးစွဲသူများသည်အင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းမပြုနိုင်သည့်အခါစိုးရိမ်ပူပန်မှုကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးပါသလား (ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာ) - ၂၄% သည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုခံစားခဲ့ရသည်။ သင်တန်းသားများကိုသုံးပုံတစ်ပုံဟာသူတို့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဆိုးကျိုးများခံစားခဲ့ရသည်။ ကောက်နုတ်ချက်များ
ဆန်းစစ်ချက်နှစျဆယျ့ခုနစ်: ဒီတော့အဘယ်ကြောင့်သင်ကကလေးညစ်ညမ်းကျူးလွန်သူများ (2013) ကထောက်ပံ့ပေးူးပ ?: လုပျခဲ့ -“ CP Offending for Explanations” အပိုင်းမှ - ဥပဒေရေးရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်ကြာရှည်စွာထိတွေ့မှုနှင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများသည်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုကလေးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ (CP) ကိုအသုံးပြုသည် -
နှစျဆယျ့ရှစျလေ့လာ: 2008 အတွက် Pontianak ၏အငယ်တန်း High School တွင်ဆယ်ကျော်သက် (2009) ရက်နေ့တွင်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ Exposure ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု - အငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းသားများကိုမလေးရှား porn အသုံးပြုမှုလေ့လာ အထူးသဖြင့်ဤလေ့လာမှုသည်ဆယ်ကျော်သက်လူ ဦး ရေတွင်ပိုမိုအစွန်းရောက်သောပစ္စည်းများ၊ (ဤဆယ်ကျော်သက်များကိုဤမေးခွန်းများကိုမေးရန်တစ်ခုတည်းသောလေ့လာမှုဖြစ်သည်။ ) ကောက်နုတ်ချက်များ။
83.3 စုစုပေါင်း Pontianak စီးတီးအတွက်အငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းမြီးကောင်ပေါက်များ၏% ညစ်ညမ်းထိတွေ့နှင့် 79.5 အဖြစ်အများအပြားအဖြစ်ထိတွေ့ခံရခြင်းမှ% ညစ်ညမ်းထိတွေ့၏ဆိုးကျိုးများတွေ့ကြုံခံစားကြပြီ။ 19.8% [အစွဲအကြား], အစွဲဇာတ်စင်ရှိကြ၏အဖြစ်ညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုအဖြစ်အများကြီးတွေ့ကြုံခံစားတဲ့သူဆယ်ကျော်သက် 69.2% 61.1% ကို desensitization ဇာတ်စင်မှာ [ဆိုးရွားလာခဲ့သည်သူတို့တွင်], အတင်းမာမှုဇာတ်စင်မှာဖြစ်ပြီး, [adolescents သူတွေထဲမှာ အဘယ်သူသည် desensitization အစီရင်ခံတင်ပြ] 31.8% လုပ်ရပ်ထွက်၏စင်မြင့်မှာခဲ့ပါတယ်။
ညစ်ညမ်းသတိရှိရှိသို့မဟုတ်မသိစိတ်, အထူးသဖြင့်လိင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌နေ့စဉ်အဖြစ်အဖြစ်အများအပြားကဒီလေ့လာမှုပြပွဲ၏ရလဒ်များကိုသဘောထားအမြင်များနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ဘဝတည်းဟူသောအပြုအမူကိုပြောင်းလဲထားပါတယ်, ပုံသဏ္ဍာန်အမူအကျင့်လုပ်ဖို့ဆယ်ကျော်သက်ထိခိုကျနိုငျ Pontianak စီးတီးအတွက်အငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသား 52 (19.78%) ညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှု၏ဆိုးကျိုးများကြုံတွေ့လျက်ရှိသည်ဇာတ်စင်စွဲအပေါ်ဖြစ်ပါသည်.
သဘောထားကိုသို့မဟုတ်အပြုအမူအတွက်လာမယ့်အပြောင်းအလဲတင်းမာမှုသည်။ အဆိုပါရလဒ်များဇာတ်စင်တင်းမာမှု / တိုးချဲ့လိုအပ်ချက်များကိုစွဲနေသော 36 မြီးကောင်ပေါက်များ၏ 69.2 ကလူ (52%) ပြသ. ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအချိန်ပြီးနောက်ညစ်ညမ်းလောင်, ချိတ်အလိုတော်နေသောဆယ်ကျော်သက်, လေးလံပိုပြီးရှင်းလင်းပြတ်သားစွာယခင်ကလောင်ထက်ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားနှင့်ပိုပြီးပုံမှန်မဟုတ်ဘဲစူးနေတယ်ဖြစ်သောလိင်ပစ္စည်းဘို့လိုအပ်ကြောင်းတစ်ခုတိုးခံစားခဲ့ရသညျ။ ဝယ်လိုအားအတွက်ဒီတိုးအရေအတွက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌မဖြစ်ပေမယ့်ပိုမိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖြစ်သောအထူးသဖြင့်အရည်အသွေး, ထို့နောက်သူကပိုပြီးစိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သူကကိုယ်လုံးတီးအမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ပုံရိပ်ကိုစောင့်ကြည့်အလုံအလောက်ကျေနပ်မှုရှိခဲ့ပါလျှင်မီ, ထို့နောက်လိင်မြင်ကွင်းတစ်ခုပါဝင်သောရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုချင်တယ်။
ပြီးတာနဲ့ပြည့်နှက်သူကလိင်မြင်ကွင်းတစ်ခုတခါတရံသူမြင်ရသောထက်ပိုရိုင်းများနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲစူးနေတယ်ဖြစ်ကြောင်းကွဲပြားခြားနားသောသူတို့ကိုမကြည့်ဖို့လိုသည်။ ရလဒ်တစ်ခုအနေဖြင့် Zillman & Bryant (1982, Thornburgh & Herbert, 2002) တွင်ဖော်ပြထားသည်။ တစ်စုံတစ် ဦး သည်ထပ်ခါတလဲလဲညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်ထိတွေ့မိသောအခါ၎င်းတို့သည်လိင်မှုဆိုင်ရာအမြင်များကိုလွဲမှားစွာမြင်တွေ့နိုင်သည့်အလားအလာရှိကြောင်းပြသနိုင်ပြီး၊ ခဲယဉ်းခြင်းနှင့်ပုံပျက်အမျိုးအစားများ။
နောက်တစ်နေ့ဇာတ်စင် desensitization ၏စင်မြင့်တင်းမာမှုကြုံနေရသူကို 22 လူမြိုးမှ 61.11 ကလူ (36%) ဆယ်ကျော်သက်များကကြုံတွေ့လျက်ရှိသည်. ဒီအဆင့်မှာမညီကြောင်းခဲ့သောလိင်ပစ္စည်း, အကျင့်ပျက်နှင့်တဖြည်းဖြည်းပိုရှည်ကနောက်တဖန်အာရုံမခံစားနိုင်သောဖြစ်လာဆိုလိုတာကပုံမှန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်းအရာတစ်ခုခုဖြစ်စဉ်းစားစော်ကားသော / အရှက်လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို။
နောက်ထပ် desensitization အဆင့်တွင် 22 ကလူကနေရှာတွေ့သည်ဤလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကို7ကလူ (31.8%) actout ဇာတ်စင်၌ရှိကြ၏ကဲ့သို့အများအပြားတည်ရှိနေ။ ဒီအဆင့်မှာထိုကဲ့သို့သောသူအစစ်အမှန်အသက်အဘို့စောင့်ကြည့်လျက်ရှိသည်ညစ်ညမ်းအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့သဘောထားရှိပါတယ်
နှစျဆယျ့ကိုးလေ့လာဖို့: အင်တာနက်ညစ်ညမ်း (2008) နဲ့လက်တွေ့တွေ့ဆုံ - အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသည်သူ၏အထီးလူနာအချို့ကိုအပေါ်ရှိခြင်းခဲ့အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုကိုသတိပြုမိဖွစျလာသူတစ်ဦးစိတ်ရောဂါကရေးသားလေးလက်တွေ့ဖြစ်ပွားမှုနှင့်အတူဘက်စုံစက္ကူ, ။ အောက်ကကောက်နုတ်ချက်တစ် 31 တစ်နှစ်အစွန်းရောက် porn နှင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများသို့ဆိုးရွားလာခဲ့သည်သူကိုလူဟောင်းကိုဖော်ပြသည်။ ဤသည်သည်းခံစိတ်, တင်းမာမှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်မှဦးဆောင် porn အသုံးပြုမှုကိုပုံဖော်ဖို့ပထမဦးဆုံးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်းပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆန်းစစ်ချက်သုံးဆယ်: တစ်ဦးအရည်အသွေးစစ်တမ်း (2018): လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းလုလင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်, နားလည်မှုနှင့်အလေ့အကျင့်အကြောင်းကြားလမ်းကိုစူးစမ်းခြင်း - ၁၈ နှစ်မှ ၂၅ နှစ်အတွင်းယောက်ျားလေးများအတွက်အရည်အသွေးသေးငယ်သည့်လေ့လာမှုသည်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောမိမိကိုယ်ကိုဖော်ပြသည့်လွှမ်းမိုးမှုကိုလေ့လာရန်ဖြစ်သည်။ အများအပြားသည်းခံနိုင်မှုနှင့်ပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောစိုးရိမ်မှုများအပါအ ၀ င်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုအစီရင်ခံခဲ့သည် ကောက်နှုတ်ချက် -
ထို့အပြင်ခုနှစ်, သင်တန်းသားများကို SEM အကြောင်းအရာအွန်လိုင်းအတွင်းစှနျး၏အစဉ်အဆက်ကိုတိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်တွေအကြောင်းပြောခဲ့တယ်။ SEM ထို့ကြောင့်ပိုပြီးအစွန်းရောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးစားပေး၏တန်ဆာတစ်ခုသြဇာအင်အားအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများပိုမိုများပြားလာခြင်းကြောင့်ဗီဒီယိုများသည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းနေဆဲဖြစ်သည့်အတွက်ဝယ်လိုအားကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ရန်အတွက်ဗွီဒီယိုများသည် ပို၍ ပို၍ စွန့်စားခန်းများဖြစ်လာသည်။ - ဂျေး
သုံးဆယ် ONE လေ့လာဖို့: တစ်ဦးကကွန်ယက်ကိုရှုထောင့် (2018): နည်းပညာ-mediated စွဲလမ်းအပြုအမူတွေဆက်စပ်သေးကွဲပြားသောအခြေအနေများတစ်ရောင်စဉ်ဖွဲ့စည်း - အင်တာနက်၊ စမတ်ဖုန်း၊ ဂိမ်း၊ ဆိုက်ဘာဆက်စသည့်နည်းပညာစွဲလမ်းမှု (၄) ခုအကြားထပ်တူကျမှုကိုလေ့လာမှုကလေ့လာဆန်းစစ်ထားသည်။ တစ်ခုချင်းစီတွင်ကွဲပြားသောစွဲလမ်းမှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသော်လည်း ၄ ခုလုံးတွင်ဆိုက်ဘာဆက်ဆံမှုအပါအ ၀ င်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများပါဝင်သည်။ ကောက်နုတ်ချက်များ
ဆက်လက်သုံးစွဲခြင်း, စိတ်ပြုပြင်မွမ်းမံ, ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံး, အဆက်မပြတ်, ရုပ်သိမ်းရေး,: အရောင်စဉ်ယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့နဲ့တစ်ဦးချင်းစီကနည်းပညာ-mediated အပြုအမူများအတွက်နှိုင်းယှဉ်ရောဂါလက္ခဏာတွေရှိသည်ဖို့, ပထမဦးဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးရေးသားခဲ့သူအောက်ပါ "ဂန္ထဝင်" စွဲရောဂါလက္ခဏာနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီစကေးကို item နှင့်ဆက်စပ် နှင့်အကျိုးဆက်များနည်းပညာ-mediated စွဲလမ်းအပြုအမူတွေမှဆင်းသက်လာလက္ခဏာတွေသုံးပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ် (။ 5th ed) နှင့်စွဲလမ်း၏အစိတ်အပိုင်းမော်ဒယ်: အင်တာနက်, စမတ်ဖုန်း, ဂိမ်းနှင့်ကျဘာ။
အကြား-အခြေအနေများအနားမကြာခဏအင်တာနက်စွဲရောဂါလက္ခဏာတွေကတဆင့်အတူတူပါပဲလက္ခဏာတွေချိတ်ဆက်။ ဥပမာ, အင်တာနက်စွဲ ဆုတ်ခွာ ရောဂါလက္ခဏာနှင့်အတူချိတ်ဆက်ခဲ့သည် ဆုတ်ခွာ ရှိသမျှသည်အခြားသောအခြေအနေများ (ဂိမ်းစွဲလမ်း, စမတ်ဖုန်းစွဲနှင့်ကျဘာစွဲ) ၏ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ဆိုးရွားသော အကျိုးဆက်များ အင်တာနက်စွဲလည်းဆိုးရွားသောနှင့်အတူချိတ်ဆက်ခဲ့ကြ အကျိုးဆက်များ ရှိသမျှသည်အခြားသောအခြေအနေများ၏။
ဆန်းစစ်ချက်သုံးဆယ်နှစ်ယောက်: ကလေးသူငယ်လိင်အမြတ်ထုတ်ခြင်းပစ္စည်းများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုများ (CSEM) စားသုံးသူတွေ: ပြင်းထန်မှုကျော်အချိန်လေးပုံစံများ (2018) - လေ့လာမှု 40 ၏ hard drive တွေကနေထုတ်ယူ data တွေကိုတစ်ဦးချင်းစီပြစ်မှုထင်ရှားသုံးပြီး, ကလေးညစ်ညမ်း၏စားသုံးသူများ၏လှုပ်ရှားမှုအချိန်ကျော်ဆင့်ကဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ အများဆုံးပျံ့နှံ့ပုံစံတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်တွေ့ရှိခဲ့ အသက်အရွယ်အတွက် drop အဆိုပါပုံဖော်လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး၏ စှထ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုမူသောအမှု။ အဆိုပါသုတေသီများဆွေးနွေးရန် လေ့ နှင့် တင်းမာမှုလျှော့ချအဖြစ်စာပေ porn စုဆောင်းအဆက်အသွယ်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူထက်ပိုမိုလွန်ကဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားမှဆိုးရွားလာခဲ့သည်ပြီဆန္ဒပြနေသော။ ကောက်နှုတ်ချက်:
ဤလေ့လာမှု၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာကလေးသူငယ်ညစ်ညမ်းစာပေများပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှားသူများ၏ကလေး - ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများစုဆောင်းခြင်း၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ဖြစ်သည်။ ရလဒ်များအရကလေးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏သဘောသဘာဝနှင့်ကွဲလွဲမှုများကိုရှင်းပြချက်လေးခုကိုကျွန်ုပ်တို့အဆိုပြုထားသည်။
... အများဆုံးပျံ့နှံ့မှုပုံစံမှာပုံဖော်ထားသည့်သူ၏လူကြီးဘ ၀ တွင်တိုးတက်မှုနှုန်းကျဆင်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ပြင်းထန်မှုတိုးတက်မှုဖြစ်သည်။ …
ပထမဆုံးရှင်းပြချက်ကတော့ကလေးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစုဆောင်းသူတွေဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားကိုညွှန်ပြတဲ့အရာဖြစ်တယ် (Seto, 2013) ။ ဤရှင်းပြချက်ကစုဆောင်းသူသည်သူနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်လှုံ့ဆော်သောအကြောင်းအရာကိုသာအာရုံစိုက်မည်ဟုဆိုလိုသည်။
လိင်မှုဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာရှင်းပြချက်နှင့်လည်းဆက်နွှယ်သောဒုတိယရှင်းပြချက်မှာစုဆောင်းသူများသည်လက်ရှိလေ့လာမှုပုံစံများ ၁၊ ၂ နှင့် ၃ နှင့်တစ်ထပ်တည်းကျ။ အနိမ့်ဆုံးသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုလေ့ကျင့်ခြင်းဖြစ်သည်။. ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ်ရာပိုမိုဆိုးရွားသည့်အကြောင်းအရာအသစ်များကိုရှာဖွေရန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာစားသုံးသူကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည် (Reifler et al ။ , 1971; ရွိုင်း, 2004; Seto, 2013; တေလာ & Quayle, 2003) ။ အဆိုအရ Laws and Marshall (၁၉၉၀),
ယခင်ကအေးစက်သောလိင်စိတ်ကူးယဉ် (ခြွင်းချက်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၊ CS1) နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း (ခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှု၊ UCS) သည်မြင့်မားသောလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအပြင်အော်ဂဇင်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ မူရင်းစိတ်ကူးယဉ် (CS2) ၏သေးငယ်သောအပြောင်းအလဲများ (ပျင်းခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ဖြစ်နိုင်သည်) နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်တွဲဖက်ပြီးမူရင်းစိတ်ကူးကိုဆက်တိုက်အစားထိုးခြင်းနှင့်အလားတူတုံ့ပြန်မှုကိုရရှိနိုင်သည်။ (စ။ ၂၁၂)
…တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အနေဖြင့် CSEM စုဆောင်းသူများသည်အော့ဖ်လိုင်းလိင်ဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများထက်လိင်မှုဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားများကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာရှာဖွေလေ့လာရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်၎င်းတို့သည်သူတို့၏လိင်ဆိုင်ရာစိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုအာဟာရဖြည့်ဆည်းရန်တရားမ ၀ င်အကြောင်းအရာအသစ်များကိုရှာဖွေရန်လှုံ့ဆော်မှုခံရနိုင်သည်။ ဤရှင်းပြချက်သည် Babchishin et al ။ ၏ (၂၀၁၅) meta-analysis နှင့်သဘောတူညီသည်။ အွန်လိုင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူများသည်အော့ဖ်လိုင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူများထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားပိုမိုများပြားကြောင်းဖော်ပြသည်။
သုံးဆယ်သုံးလေ့လာဖို့: ရိုမန်းတစ် Vs လိင်အကဲဆတ်သောလှုံ့ဆော်မှု (2018) အားအလိုအလျှောက်အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်ကျားကွာခြားချက်များ - ပိုမိုမြင့်မားသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုမှုသည်စမ်းသပ်မှုတစ်ခု၏ရလဒ်ကိုအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့ပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပိုမိုအသုံးပြုခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအလေ့အကျင့်ဖြစ်စေသည်ဟုဖော်ပြသည်။ သက်ဆိုင်ရာကောက်နုတ်ချက်များ
ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအပေါ်ရမှတ်များကြောင့်အလိုအလျောက်အာရုံကိုတာဝန်နှငျ့ပတျသကျသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက် covariate အဖြစ်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည် task ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့လေ့ကလွှမ်းမိုးခဲ့ကြပေမည်.
ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်နှောင့်နှေး, တသမတ်တည်းစာပေအစီရင်ခံခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု-ထို့ကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု-အဖြစ်လှုံ့ဆော်မှုတခြားအမျိုးအစားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ဆီသို့တစ်ခုအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုအချက်ပြထိတွေ့တဲ့အခါမှာတစ်ဦးချင်းစီနှောင့်နှေးတုံ့ပြန်မှုကိုတင်ပြကြောင်းပြသခဲ့ပြီးသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုသွေးဆောင်အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာနှင့်အတူ align ။ သို့သော် covariate အဖြစ်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု၏နိဒါန်း, အရှင်ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုမှအလိုအလျှောက်အာရုံကိုတစ်ဦးလေ့ယန္တရားထုတ်ဖော်, (nonstatistical အရေးပါမှု၏အဆင့်အထိ) ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတ်ပုံများကိုများ၏သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချ။
သုံးဆယ်လေးကိုလေ့လာ: လူငယ်အမျိုးသားများအတွက်များထဲတွင်ညစ်ညမ်းသွေးဆောင် Erectile အလုပ်မဖြစ် (2019) - porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (PIED) နဲ့ယောက်ျားအပေါ်လေ့လာမှုအပေါငျးတို့သဘာသာရပ်များအတွက်သည်းခံစိတ် (ကျဆင်းနေ arousal) နှင့်တင်းမာမှု (နှိုးဆော်ခြင်းခံရဖို့လိုအပ်နေပိုပြီးအစွန်းရောက်ပစ္စည်း) ဖော်ပြသည်။ ယင်းစိတ္တဇမှ:
ဤစာတမ်း၏ဖြစ်ရပ်ဆန်းစူးစမ်း ညစ်ညမ်းသွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (PIED) ဆိုလိုသည်မှာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုကြောင့်အမျိုးသားများတွင်လိင်ဆိုင်ရာအာဟာရပြproblemsနာများဖြစ်သည်။ ဤအခြေအနေမှခံစားနေရသောအမျိုးသားများ၏ပင်ကိုယ်မူလအချက်အလက်များကိုကောက်ယူခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ (များသောအားဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်) ကိုအစောပိုင်းမိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်ဟုသူတို့အစီရင်ခံကြသည် အစွန်းရောက်အကြောင်းအရာ (ဥပမာ, အကြမ်းဖက်မှုဒြပ်စင်ပါဝင်သော) arousal ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်သည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးပွိုင့်ရောက်ရှိသည်အထိနေ့စဉ်စားသုံးမှုအားဖြင့်နောက်သို့လိုက်ကြ၏။ လိင်စိတ်နိုးထသီးသန့် Bland နှင့်စိတ်မဝင်စားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ဆက်ဆံမှု rendering, အစွန်းရောက်ခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီညစ်ညမ်းနှင့်ဆက်စပ်သည့်အခါတစ်ဦးကဝေဖန်ဇာတ်စင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတကယ်-ဘဝလက်တွဲဖော်နဲ့စိုက်ထူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့တစ်ခုနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းအတွက်ရလဒ်များ, အရာအချက်မှာယောက်ျားညစ်ညမ်းတက်ပေးခြင်း,a"ကို Re-Boot တက်" လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်စတင်။ ဒါကတစ်ခုစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်နှင့်ရေရှည်တည်တံ့ဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုပြန်လည်ဖို့ယောက်ျားအချို့ကူညီပေးခဲ့တယ်။
အဆိုပါဒေတာများကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော်မူပြီးမှ, ငါအင်တာဗျူးအပေါငျးတို့သအတွက်အချိန်နဲ့တပြေးညီဇာတ်ကြောင်းအောက်ပါအချို့ပုံစံများနှင့်ထပ်တလဲလဲ themes များသတိပြုမိပါပွီ။ ဤအရာများသည်: နိဒါန္း။ တစ်ခုမှာပထမဦးဆုံးအများအားဖြင့်အပျိုဖော်ဝင်စမှီ, ညစ်ညမ်းစေရန်မိတ်ဆက်သည်။ တစ်ဦးအလေ့အထကိုတည်ဆောက်ခြင်း။ တဦးတည်းပုံမှန်ညစ်ညမ်းလောင်မှစတင်ခဲ့သည်။ စက်လှေကား. တစ်ခုမှာယခင်ညစ်ညမ်းနည်း "အစွန်းရောက်" ပုံစံများမှတဆင့်အောင်မြင်ခဲ့တူညီတဲ့သက်ရောက်မှုအောင်မြင်ရန်အလို့ငှာ, ညစ်ညမ်း, အကြောင်းအရာ-ပညာရှိပိုပြီး "အစွန်းရောက်" ပုံစံများကိုမှပြန်သွားလေ၏။သဘောပေါက်။ တစ်ခုမှာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ခံရဖို့ယုံကြည်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာနိသင်ပြဿနာများသတိပွုမိ။ "Re-Boot တက်" လုပ်ငန်းစဉ်ကို။ တစ်ခုမှာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုထိန်းညှိသို့မဟုတ်တဦးတည်းရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာနိသင်ပြန်လည်နိုင်ရန်အတွက်လုံးဝကပပျောက်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ တွေ့ဆုံမေးမြန်းရာမှအဆိုပါဒေတာကိုအထက်ပါအကြမ်းဖျင်းပေါ်အခြေခံပြီးတင်ပြနေကြပါတယ်။
ဆန်းစစ်ချက်သုံးဆယ်ငါး (peer-ပြန်လည်သုံးသပ်မဟုတ်): ဒစ်ဂျစ်တယ်လိင်, အပိုင်း 1 အပေါ် xHamster အစီရင်ခံစာ: ရိုးရိုး (2019) - Xhamster ၏ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှလေ့လာမှုများအရပြင်းထန်သောညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အသုံးပြုသူများကို၎င်းတို့သည်ရိုးရိုးလိင်ဆန်သူများဟုထင်မြင်စေနိုင်သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်သည်နိုင်ငံရေးအရမမှန်ကန်သော်လည်း YBOP သည်နာတာရှည်ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများကိုသူတို့ကိုယ်သူတို့ရိုးရိုးလိင်ဟုထင်မှတ်သော်လည်းမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ဤစာမျက်နှာများတွင်လိင်အရသာကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်စေသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဖယ်ရှားခြင်းဥပမာများစွာပါရှိသည်။
အဆိုပါ Xhamster ဆောင်းပါးကနေကောက်နှုတ်ချက် (အရာ အတော်ကြာဂရပ်များပါရှိသည်):
သငျသညျလိင်တူချစ်သူလုပ်လွန်း porn ကိုကြည့်ပါသလား? အဘယ်သူမျှမပေမယ့်သင် bi စေပါလိမ့်မယ်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်လိင်အပေါ် xHamster အစီရင်ခံစာ - - ယခုလအစောပိုင်းက xHamster တစ်ခုရည်မှန်းချက်ကြီးပြည်တွင်းရေးလေ့လာမှုစတင်အလေ့အထနှင့်ပိုပြီးကြည့်ရှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ porn အသုံးပြုသူများသည်အသက်အရွယ်, ကျားမ, လိင်, ကြားဆက်ဆံရေးအဆင့်အတန်းအပေါ်ဒေတာ, နိုင်ငံရေးအမြင်များ, ပြုစု, အဘယ်အရာကိုချောင်းမြောင်းရုံသောသူသည်နားလည်သဘောပေါက်ရန်ကြိုးစားရန်နှင့် အဘယ်ကြောင့်။ 11,000 အသုံးပြုသူများကိုကျော်ဒီစစ်တမ်းကိုပြီးစီးခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ရုံဒေတာကို process ကိုစတင်ဖွင့်နေစဉ်, တဦးတည်းအရေအတွက်ကချက်ချင်းကိုထွက်ခုန်တက်။ အားလုံးအမေရိကန်အခြေစိုက် xHamster ဧည့်သည်၏ 22.3 ကျော်% သူတို့ကိုယ်သူတို့ရိုးရိုးစဉ်းစားပါ။ သာ 67% သူတို့ကိုယ်သူတို့လုံးဝဖြစ်စဉ်းစားပါ "ဖြောင့်။ "
အစပိုင်းမှာတော့ဂဏန်းတွေ၊ ဒါမှမဟုတ်လေ့လာမှုပုံစံမှာတစ်ခုခုမှားနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ခဲ့တယ်။ နက်နက်နဲနဲနက်နက်နဲနဲတူးဖော်သည့်အခါနံပါတ်များကိုထောက်ခံသည့်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးအခြေအနေ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ၊ သူတို့နေထိုင်ရာနေရာများအထိသူတို့၏အဖြေများကိုတစ်သမတ်တည်းတွေ့မြင်ခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့သိချင်တစ်ဦးထက်ပိုသောအရည်လိင်၏စိတ်ကူးမှအသုံးပြုသူများကိုတက်ဖွင့်လှစ်ကြောင်း porn ကိုကြည့်အကြောင်းကိုတစ်ခုခုရှိသေး၏။ အဖြေက may ... ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကအကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ရက်စောင့်ကြည့်သတင်းပို့သူကိုအသုံးပြုသူများသည်အတူတစ်ပါတ်တစ်ကြိမ် porn စောင့်ကြည့်သူကိုအသုံးပြုသူများထံမှတုံ့ပြန်မှုနှိုင်းယှဉ်။ တစ်ရက်အကြိမ်ပေါင်းများစွာစောင့်ကြည့်သူကို porn ပရိတ်သတ်တွေခဲ့ကြသည် နှစ်ကြိမ်အဖြစ်ဖွယ်ရှိထက်ပို တစ်ပါတ်တစ်ခါသာ (27% vs 13%) စောင့်ကြည့်သူကိုညစ်ညမ်းပရိတ်သတ်တွေသကဲ့သို့ရိုးရိုးကိုသိရှိနိုင်ဖို့။
သငျသညျမွငျနိုငျသကဲ့သို့, ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်သုံးစွဲအချိန်ပမာဏ, သူတို့သည်အဖြစ်ရိုးရိုးဖော်ထုတ်ဖြစ်စေမအကြားတိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်။ (ကလိင်တူချစ်သူဝိသေသလက္ခဏာအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေရှိသည်ဖို့မထင်ထားဘူး - တစ်တော်တော်ကျဉ်းမြောင်းသောအကွာအဝေးအတွင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာကြောင်း။ )
သောမိန်းမတို့ကိုညစ်ညမ်းပရိသတ်တွေတချို့လမ်းရှိခဲ့ပါလျှင်ငါတို့သည်လည်းအံ့ဩ - ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုအတွက်အဘယ်သူကို၏ 38% ရိုးရိုးအဖြစ်ဖော်ထုတ် - တစ်နည်းနည်းနဲ့ဒေတာ skewing ခံရပေလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်လူတို့သညျအတူတွက်ချက်မှုထပ်ခါတလဲလဲ။ ရလဒ် ပို. ပင်အံ့သြဖွယ်ရှိကြ၏။
တစ်ချိန်ကရိုးရိုးအဖြစ်ဖော်ထုတ်တစ်ပါတ် porn စောင့်ကြည့်ပေမယ့်သူကိုယောက်ျားပဲ 10.8% တစျနေ့အဖြစ်ရိုးရိုးခွဲခြားသတ်မှတ် porn အကြိမ်ပေါင်းများစွာကြည့်ရှုသောလူတို့၏ 27.2% ။ (သင်တနေ့လုံးအဝတ်အချည်းစည်းလူတို့သညျမှာရှာနေမယ်ဆိုရင်ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, - ပုံထဲကအမျိုးသမီးတစ်ဦးရှိပါတယ်လျှင်ပင် - ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောင့်လူ့လိင်အကြောင်းကျယ်ပြန့်အတွေးအခေါ်များမှတက်သင်ဖွင့်လှစ်။ )
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ဆက်စပ်မှုသည်အကြောင်းတရားမဟုတ်ကြောင်းအလေးပေးဖော်ပြသင့်သည်။ လိင်ကွဲပြားမှုနှင့်လိင်တူချစ်သူများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်း၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်၎င်းကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်အနိမ့်ဆုံးအမည်းစက်များကိုသတင်းပို့သည်။ (အုပ်စုနှစ်ခုလုံးသည်လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်အလားအလာနည်းပါးသောကြောင့်စောင့်ကြည့်ခြင်းတွင်ပိုမိုလွတ်လပ်ခွင့်ရှိနိုင်သည်။ သို့သော်နောက်တစ်ကြိမ် - ကြည့်ရှုခြင်းကြိမ်နှုန်းနှင့်လိင်တူချစ်သူဖော်ထုတ်ခြင်းအကြားသိသိသာသာဆက်စပ်မှုကိုမတွေ့ရပါ။ ) ……
သုံးဆယ်ခြောက်လေ့လာဖို့: ယင်းအညွှန်းကိန်းပြစ်မှုများ၏အချိန်မှာလိင်ကျူးလွန်သူများအားဖြင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု: စရိုက်လက္ခဏာတွေနဲ့ခန့်မှန်း (2019) - ကောက်နှုတ်ချက်:
သုံးဆယ်ခုနစ်လေ့လာဖို့: ညစ်ညမ်း: သက်ရောက်မှုတစ်ခုစမ်းသပ်လေ့လာမှု (1971) - Abstract:
စာရေးသူလူပျိုတို့အပေါ်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းမှထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ 23 စမ်းသပ်ဘာသာရပ်များညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းဖတ်နေသုံးပတ်ကြာ 90 မိနစ်တစ်နေ့ကုန်s ကို။ ခင်မှာ-and ပြီးနောက်, ဤဘာသာရပ်များအပေါ်တိုင်းတာကိုးယောက်ျားတစ်ဦးကိုထိန်းချုပ်အုပ်စုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်တုံ့ပြန် penile လုံးပတ်အပြောင်းအလဲများနှင့်အက်ဆစ် phosphatase လှုပ်ရှားမှုပါဝင်သည်။ T ကသူက data တွေကိုလျော့နည်းသွားကြောင့်စိတ်ဝင်စားမှုများနှင့်ကတုန့်ပြန်အတွက်ညစ်ညမ်းရလဒ်များကိုမှထိတွေ့မှုအကြိမ်ကြိမ်သောအယူအဆထောက်ခံပါတယ်။ အမျိုးမျိုးသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုနှင့်အကြေးခွံများသည်ဘာသာရပ်များ၏ခံစားချက်နှင့်အပြုအမူကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ငြီးငွေ့ခြင်း မှလွဲ၍ မည်သည့်ကြာရှည်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမှမတွေ့ရှိခဲ့ပါ။
သုံးဆယ်ရှစျလေ့လာ: လူငယ်-oriented ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ (2016) တွင်စိတ်ဝင်စားမှု၏တစ်ဦးကနှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ခြင်း: Lolita ရှာဖွေခြင်း - Abstract:
ညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာ၏အတိမ်အနက်ကိုအနံရှိပါတယ်သကဲ့သို့ငါတို့သည်ညစ်ညမ်းရယူအဆိုပါလမ်းဆက်ဆက်, အချိန်ကျော်ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ သို့သျောလညျး, ညစ်ညမ်း၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်သုတေသနပြုဆယ်စုနှစ်များစွာရှိနေသော်လည်းဝေးလျော့နည်းတိကျတဲ့အမျိုးအစားများ, သုံးစွဲမှုပုံစံများနှင့်အကြောင်းအရာရှိသူများစားသုံးကွဲပြားအမျိုးအစားများကို၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ Google ကရှာဖှေခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ပုံရိပ်ကိုရှာဖွေမှုများကိုအသုံးချဖို့, ဒီသုတေသနအကျိုးစီးပွားနှင့်လူငယ်များ-oriented ညစ်ညမ်း၏နယ်ပယ်အတွင်း၌နိုင်တဲ့ macro level မှာဆက်ဆံရေးကိုစူးစမ်း။ ရလဒ်များအတိုးလိင်, အသက်, ပထဝီဇာစ်မြစ်များနှင့်ဝင်ငွေအပေါ်အခြေခံပြီးကွဲပြားကြောင်းဖော်ပြသည်။
ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိသုတေသနပြုမှသာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထံမှ illuminated သည့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းမှမပြောတတ်နိုင်သကဲ့သို့အနာဂတ်လေ့လာမှုများလူငယ်-oriented ညစ်ညမ်းစားသုံးနှင့်ဆက်စပ်အမှန်တကယ်သဘောထားနှင့်အပြုအမူနှင့်စပ်လျဉ်းသတင်းအချက်အလက်များသိရှိနိုင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်ကောက်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားရလဒ်သုံးခုစလုံးယူဆချက်ထောက်ခံခဲ့ကြသည်ဖော်ပြသည်။ ကျနော်တို့ကဆယ်ကျော်သက်ညစ်ညမ်းအတွင်းအကျိုးစီးပွားနှုန်းသိသိသာသာတိုး, အပျော်တမ်းညစ်ညမ်းခြင်း, Hentai မှုတ်သွင်းညစ်ညမ်းအဲဒီမှာဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုတွေ့ ညစ်ညမ်းမှုဆိုင်ရာအချက်အချာ (Ogas and Gaddam 2011) မှတစ်ဆင့်နယ်ပယ်ကျယ်ပြန့်စွာလူကြိုက်များမှုနှင့်ရရှိနိုင်မှုနှုန်းတို့ကိုကြည့်။ အံ့သြစရာမရှိပါ။
ရှင်းနေသည်မှာလူငယ်များအတွက်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစိတ်ဝင်စားမှုသည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းတိုးပွားလာခဲ့ပြီး Gill (၂၀၀၈၊ ၂၀၁၂) နှင့်အခြားသူများက ဆက်လက်၍ 'ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလိင်မှုကိစ္စ' ဟူသောအဆိုနှင့်တိုက်ဆိုင်ပုံရသည်။ Lolita ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုရှာဖွေခြင်းသည်သာစိတ် ၀ င်စားမှုလျော့နည်းသွားပြီး ပို၍ တိကျသောမေးမြန်းချက်များပေါ်ပေါက်လာသည်နှင့်အမျှခေတ်မမီတော့သောဝေါဟာရများနှင့်လူကြိုက်များမှုလျော့နည်းလာခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သက်သေအထောက်အထားများသည်ဆယ်ကျော်သက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနယ်ပယ်အတွင်းရှိဤခွဲများကိုရှာဖွေသူများသည်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းအုပ်စုထက်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောနေသောလူ ဦး ရေဖြစ်သည်ဟူသောအယူအဆကိုထောက်ခံသည်။ လူငယ် -oriented ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအမျိုးအစားများသည်စိတ် ၀ င်စားမှုကွဲပြားရုံသာမကဤနေရာတွင်လေ့လာနေသည့်အမျိုးမျိုးသောနယ်ပယ်များကိုရှာဖွေနေသောစားသုံးသူများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများလည်းကွဲပြားသည်။
သုံးဆယ်ကိုးလေ့လာဖို့: Impulse နှင့်ဆက်စပ်ရှုထောင့်၏ရှုထောငျ့ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်း (2019) ၏အပန်းဖြေခြင်းနှင့်စည်းကမ်းတအသုံးပြုမှုအကြားခွဲခြား - သက်ဆိုင်ရာကောက်နုတ်ချက် -
တစ်ဦးကထပ်မံစိတ်ဝင်စားဖို့ရလဒ် session တစ်ခုနှုန်းနဲ့မိနစ် Post-hoc စမ်းသပ်မှုကြာချိန်များအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစား, အပန်းဖြေ-မကြာခဏအသုံးပြုသူများနှင့်စည်းကမ်းတ [ပြဿနာ] ​​အသုံးပြုသူများကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ, တစ်ပတ်ကိုကြိမ်နှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် [ပြဿနာသည်အသုံးပြုသူများအတွက်] ပိုမိုမြင့်မားခဲ့သညျ။ ဖြစ်ပါသည် ဤသည်ကိုစည်းကမ်းတအိုင်ပီ [အင်တာနက်ညစ်ညမ်း] နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအထူးသဖြင့်တစ်ဦး session တစ်ခုအတွင်းမှာ IP ကိုစောင့်ကြည့်ရပ်တန့်ဖို့အခက်အခဲရှိသည်သို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အတွက်သည်းခံစိတ်တစ်ပုံစံတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါလိမ့်မယ်သောတပ်မက်လိုချင်သောဆုလာဘ်, အောင်မြင်ရန်ကြာကြာအချိန်မလိုအပ်အသုံးပြုညွှန်ပြပါလိမ့်မယ်။
ဆန်းစစ်ချက်လေးဆယ်: ပိုလန်တက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားများအတွက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု၏ပျံ့နှံ့မှု, ပုံစံများနှင့်ကိုယ်ပိုင်ခံစားသက်ရောက်မှု: တစ်ဦးက Cross-Section လေ့လာမှု (2019). သည်းခံစိတ် / လေ့, အသုံးပြုခြင်း၏တင်းမာမှု, porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ, porn စွဲနှင့်ထို့ထက် ပို. ဖြတ်သောအခါလိင်နှိုးဆွခံရဖို့ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေပိုပြီးအစွန်းရောက်အမျိုးအစားများလိုအပ်နေ: အဆိုပါလေ့လာမှု naysayers မတည်ရှိပါဘူးတောင်းဆိုအရာအားလုံးကဖော်ပြခဲ့သည်။ သည်းခံစိတ် / လေ့ / တင်းမာမှုလျှော့ချဖို့ related အနည်းငယ်ကောက်နှုတ်ချက်:
အသုံးအများဆုံး Self-ရိပ်မိ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများပါဝင်သည်: အပိုရှည်ဆွဘို့အလိုအပ်ချက် (12.0%) နှင့်ပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု (17.6%) အော်ဂဇင်ရောက်ရန်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု (24.5%) အတွက်ကျဆင်းခြင်း ...
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုလည်းပိုရှည်ဆွနှင့်အကဲဆတ်သောပစ္စည်းစားသုံးသည့်အခါအော်ဂဇင်ရောက်ရှိဖို့ရန်လိုအပ်သည်ထက်ပိုသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအတွက်ခြုံငုံကျဆင်းခြင်းများအတွက်လိုအပ်သဖြင့်ညွှန်ပြအဖြစ်အစောပိုင်းကထိတွေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့အလားအလာ desensitization နှင့်ဆက်စပ်စေခြင်းငှါအကြံပြု .....
အဆိုပါထိတွေ့မှုအချိန်ကာလ၏သင်တန်းတွင်ဖြစ်ပေါ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပုံစံအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲမှုများကိုအစီရင်ခံခဲ့သည်: ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်း (46.0%), လိင် (60.9%) ကိုက်ညီနှင့်ပိုပြီးအစွန်းရောက် (အကြမ်းဖက်) ပစ္စည်း (32.0%) သုံးစွဲဖို့မလိုအပ်ပါဘူးကြောင်းပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်း၏ဝတ္ထုအမျိုးအစားမှ switching ။ အဆုံးစွန်သောပိုပြီးမကြာခဏ uninquisitive အဖြစ်သူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့် ပတ်သက်. သူတို့အဖို့နှိုင်းယှဉ်စပ်စုအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုစဉ်းစားအမျိုးသမီးများကသတင်းပေးပို့ခဲ့ပါတယ်
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု တစ်ဦးလိုအပ်ပိုပြီးအစွန်းရောက်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းသုံးကြောင်းတွေ့ရှိ ပိုပြီးမကြာခဏရန်လိုအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဖော်ပြအထီးများကသတင်းပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။
ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်းမှပထမဦးဆုံးထိတွေ့မှု၏အသက်အရွယ်ငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက်ညစ်ညမ်း၏အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုများတိုးမြှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ဖွမြင့်ဆုံးလေးသာမှု 12 နှစ်သို့မဟုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမှာထိတွေ့အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများအဘို့အတွေ့ရှိခဲ့သည်။ cross-section လေ့လာမှု causation တစ်ဦးအကဲဖြတ်ခွင့်ပြုမထားဘူးသော်လည်း, ဒီတွေ့ရှိချက်အမှန်ပင်ညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာနှင့်အတူငယ်စဉ်ကလေးဘဝအသင်းအဖွဲ့ရေရှည်ရလဒ်များရှိစေခြင်းငှါညွှန်ပြစေခြင်းငှါ ... ။
နေ့စဉ်အသုံးပြုခြင်းနှင့် Self-ရိပ်မိစွဲ 10.7% အားဖြင့်အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ပါသည်နှင့် 15.5%အသီးသီး။
လက်ရှိညစ်ညမ်းစားသုံးသူ (ဎ = 4260) ဖြစ်သူတို့ကိုယ်သူတို့ကြေညာသူကိုစစ်တမ်းကောက်ယူသူတွေထဲမှာ, 51.0% မျှ dif အတူကသုံးပြီးအရှုံးပေးဖို့အနည်းဆုံးကြိုးပမ်းမှုအောင်မှဝန်ခံခဲ့သည်? ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကြားကထိုအကြိုးစားမှု၏ကြိမ်နှုန်းအတွက် ference. ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူတို့၏အမျိုးအ 72.2% ffect? ​​အနည်းဆုံးဆက်စပ်အီး၏အတွေ့အကြုံညွှန်ပြလျက်, အများဆုံးမကြာခဏလေ့လာတွေ့ရှိခေါ်ဆောင်သွားအိပ်မက် (53.5%), စိတ်တိုတာတွေ (26.4%), အာရုံစူးစိုက်မှုကိုနှောင့်အယှက် (26.0%), နှင့်အသိပါဝင်သည် အထီးကျန် (22.2%) (ဇယား 2) ။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာစစ်တမ်းကောက်ယူကျောင်းသားများကိုမကြာခဏညစ်ညမ်းထိတွေ့ထားတဲ့လူမှုရေးဆက်ဆံရေးအပေါ်ဆိုးရွားသောရလဒ်, စိတ်ကျန်းမာရေး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ရှိစေခြင်းငှါ, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေခြင်းအလိုငှါညွှန်ပြ။ ဒီနေသော်လည်းသူတို့ထဲကအများစုညစ်ညမ်းလက်လှမ်းဖို့ကန့်သတ်များအတွက်မဆိုလိုအပ်မှုကိုထောကျပံ့မပေးခဲ့ပါဘူး ... ။
Pre-ရှိပြီးသားအခြေအနေများအစစ်အမှန်ပြဿနာမဟုတ်ဘဲညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဖြစ်ကြောင်းတိုင်ကြားချက် Debunking, လေ့လာမှုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်သောမတွေ့ရှိခဲ့:
အချို့သောခြွင်းချက်နှင့်အတူ, ဒီလေ့လာမှုမှာ Self-အစီရင်ခံခဲ့ပြီးသောဥပဓိစရိုက်များ, အဘယ်သူအားမျှ, ညစ်ညမ်းများ၏လေ့လာခဲ့ parameters တွေကိုမတူညီ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် access နှင့်ညစ်ညမ်းထိတွေ့သောအယူအဆကိုထောကျပံ့လက်ရှိယင်း၏အသုံးပြုသူများကိုမဆိုအထူးသဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများကိုသတ်မှတ်ပေးရန်လည်းကျယ်ပြန့်ထုတ်ဝေလျက်ရှိသည်။ သို့သော်တစ်ဦးစိတ်ဝင်စားဖို့လေ့လာရေး ပို. ပို. လွန်ကဲညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာမြင်နိုင်ရန်လိုအပ်နေကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်သူကိုစားသုံးသူများနှင့် ပတ်သက်. ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ပြထားတဲ့အတိုင်းရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်းမကြာခဏအသုံးပြုခြင်းကိုအလားအလာအလားတူလိင်စိတ်နိုးထရောက်ရှိဖို့ပိုပြီးအစွန်းရောက်အကြောင်းအရာမြင်နိုင်ရန်လိုအပ်နေကြောင်းမှဦးဆောင် desensitization နှင့်ဆက်စပ်နိုင်ပါသည်။
လေးဆယ် ONE လေ့လာဖို့: ဂျာမန်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနမူနာအတွက်ပြဿနာအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ပြဌာန်းခွင့် (2019) - လေ့လာမှုအရညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုသည်မတူကွဲပြားသောအမျိုးအစားများနှင့်များစွာဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ စာရေးသူများကဤသည်သည်တူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရရှိရန် ၀ တ္ထုအမျိုးအစားများကိုရှာဖွေခြင်းကို ဦး တည်သည်ကိုသည်းခံခြင်းကိုပြသည်။ ကောက်နုတ်ချက်များ
ကျွန်ုပ်တို့၏ယူဆချက်နှင့်အညီ, ပြဿနာအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းကြည့်ရှုသုံးစွဲအချိန်ပမာဏကိုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ, ခြုံငုံအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကို သာ. ကြီးမြင့် S-IATsex ရမှတ်။ မှတ်စု၏, ထိုဆက်စပ်မှု unexplained အဆိုပါကှဲလှဲ၏ကြီးမားသောရာခိုင်နှုန်းထွက်ခွာဘုံကှဲလှဲသာ 18% ကရှင်းပြသည်။ တချို့ယခင်လေ့လာမှုများလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအဖြစ်ရလဒ်အဖြစ်, (တစ်ပတ်ကိုနာရီ) အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းကြည့်ရှုသုံးစွဲစုစုပေါင်းအချိန်, ပြဿနာအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပမာဏမှာတူညီမရနိုင်ပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာခြုံငုံ, အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းကြည့်ရှုသုံးစွဲအချိန်ပမာဏကိုတစ် signi ကြောင်းပြသပြဿနာအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု ficant ခန့်မှန်း.
ကျနော်တို့ကိုလည်းဖော်ထုတ် ပြဿနာအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကောင်းတစ်ဦးခန့်မှန်းအဖြစ်ညစ်ညမ်းအမျိုးအစားအတွက် သာ. ကွီးမွတျကှဲလှဲသမ္မာကျမ်းစာပိုမိုမြင့်မားသူမ၏ s ကို-IATsex ရမှတ်, စောင့်ကြည့်နေတဲ့ပါဝင်သူပိုမိုကွဲပြားခြားနားပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်မှာပြဿနာအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူအမျိုးသမီးတွေလေ့သက်ရောက်မှုတစ်ခုညွှန်ပြချက်ဖြစ်နိုင်သည့်ပိုပြီးကွဲပြားခြားနားပစ္စည်း, ရှာသောပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်သည်။ အလှည့်အတွက်လေ့သူတို့ပိုင်းတွင်စောင့်ကြည့်စတင်ခဲ့သည့်အခါအဖြစ်ညစ်ညမ်းစေရန်တူညီသောအာရုံခံတုန့်ပြန်ထုတ်ယူနိုင်ရန်အသစ်သောပစ္စည်းစူးစမ်းဖို့စားသုံးသူများဦးဆောင်သည်းခံစိတ်အဆောက်အဦးတည်သွားစေနိုင်ကြောင်း.
ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်ပြဿနာအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်ဆန်းဖွဲ့စည်းစေမည်အကြောင်းအကြံပြုစာပေ၏ကြီးထွားလာခန္ဓာကိုယ်မှထည့်ပါ။ 2013 အတွက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော Diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်၏အယ်ဒီတာများ, ပဉ္စမ Edition ကိုတစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုအဖြစ် "hypersexual ရောဂါ" ကိုထည့်သွင်းဖို့ငြင်းဆန်ပေမယ့်, ပိုမိုမကြာသေးမီကသုတေသန၏လာမည့်တည်းဖြတ်မူအတွက်ရောဂါ "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ" ၏ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ပါဝင်မှဦးဆောင်ထားပါတယ် ရောဂါ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခွဲခြားရေးနှင့်ဆက်စပ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများ။
ဆန်းစစ်ချက်လေးဆယ် TWO: Abstinence သို့မဟုတ်လက်ခံ? ကိုယ်ပိုင်ခံစားပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Addressing အနေနဲ့ကြားဝင်ဖြန်ဖြေရေးနှင့်အတူယောက်ျားရဲ့အတွေ့အကြုံများတဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်စီးရီး (2019) - စာရွက်တွင်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုစွဲကပ်နေသည့်အမျိုးသားခြောက် ဦး အားသတိထားခြင်းအပေါ်အခြေခံသည့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအစီအစဉ် (တရားအားထုတ်ရန်၊ နေ့စဉ်မှတ်တမ်းများနှင့်အပတ်စဉ်စစ်ဆေးမှုများ) ကိုအစီရင်ခံထားသည်။ ဘာသာရပ်အားလုံးသည်တရားအားထုတ်ရန်အကျိုးရရှိပုံရသည်။ ဤလေ့လာမှုများ၏စာရင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည့်အချက်က ၃ အသုံးပြုမှုတိုးပွားလာခြင်း (လေ့ကျင့်မှု) နှင့်တစ်ခုမှာရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအရာ - နောက်ထပ်လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းမဟုတ်သောရောဂါလက္ခဏာနှစ်မျိုးကိုဖော်ပြသည်။ )
ပယ်ရီ (22, P_akeh_a):
ပယ်ရီသည်မိမိညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုကျော်မျှထိန်းချုပ်ခဲ့ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအထူးအမျက်ဒေါသ, သူစိတ်ခံစားမှုကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ထိန်းညှိနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းခဲ့ခံစားခဲ့ရ. သူကရှည်လျားလွန်းဘို့ညစ်ညမ်းထံမှကြားနေလျှင်သူဟာအကြမ်းအားဖြင့် 1 သို့မဟုတ်2ရက်သတ္တပတ်၏အကာလအဖြစ်ဖော်ပြထားရာ, မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုမှာကြိမ်တိုင်တိုင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
တင်းမာမှုလျှော့ချသို့မဟုတ်လေ့သတင်းပို့သည့်3ဖြစ်ပွားမှုကနေကောက်နှုတ်ချက်:
Preston Self-ဖော်ထုတ် SPPPU နှင့်အတူသူစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းအပေါ် ruminating သုံးစွဲအချိန်ပမာဏကိုနှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့လို့ပဲ။ သူ့ကိုရန်, ညစ်ညမ်းတဲ့အသည်းအသန်ဝါသနာထက်ကျော်လွန်ဆိုးရွားလာခဲ့သည်နှင့်ညစ်ညမ်းသူ၏အသက်တာ၏ဗဟိုရှိရာတစ်ဦးအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီခဲ့သည်။ သူအများအပြားနာရီနေ့အဘို့ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်အစီရင်ခံတင်ပြသူ၏ကြည့်ရှုခြင်းအတွက်တိကျသောကြည့်ရှုခြင်းဆိုင်ရာထုံးတမ်းစဉ်လာများကိုဖန်တီးခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း (ဥပမာ၊ ကြည့်ခြင်းမပြုမီသူ၏အခန်း၊ အလင်းရောင်နှင့်ကုလားထိုင်များကိုသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကြည့်ရှုပြီးနောက်ဘရောက်ဇာသမိုင်းအားရှင်းလင်းခြင်းနှင့်သူကြည့်ရှုပြီးသည့်နောက်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း) ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအင်တာနက်အပြာစာပေဝက်ဘ်ဆိုက် PornHub တွင်ထင်ရှားသောအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအသိုင်းအဝိုင်းတွင်သူ၏အွန်လိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်သိသာထင်ရှားသောအချိန်များစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့် ...
ပက်ထရစ် (40, P_akeh_a)
ပက်ထရစ်သည်သူ၏သုတေသနလုပ်ငန်းအတွက်စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းအဖြစ် ၀ န်ခံခဲ့သည်။ နှင့်ပက်ထရစ်ကိုမှန်မှန် ပိုင်ရှင်မဲ့ကသူ့ကလေးငယ်ကိုသားထွက်ခွာနေစဉ်အချိန်တွင်နာရီပေါင်းများစွာအဘို့အညစ်ညမ်း watched ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုရန်နှင့် / သို့မဟုတ်ကြည့်ရှုရန် living ည့်ခန်းထဲတွင်…
ပတေရုသ (29, P_akeh_a)
ပေတရုစားသုံးခဲ့သည်ညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာအမျိုးအစားနှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့သည်။ သူကအဓမ္မပြုကျင့်မှု၏လုပ်ရပ်များနှင့်ဆင်တူစေညစ်ညမ်းစေရန်ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ T ကဒါကြောင့်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာသူကမြင်ကွင်းတစ်ခုပုံဖော်လက်တွေ့ကျကျပိုပြီးအစစ်အမှန်နှင့်ပိုမိုဆွသူတွေ့ကြုံသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ပတေရုသညစ်ညမ်း၌သူ၏တိကျသောအရသာသူသညျမိမိအဘို့ကျင်းပခဲ့သောကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများတစ်ဦးကိုချိုးဖောက်ခဲ့ကြသလိုခံစားရတယ် ...
လေးဆယ်သုံးလေ့လာဖို့: ကိုယ်ပိုင်ခံစားပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုလိင်ကွဲအမျိုးသားများရဲ့အတွေ့အကြုံများ (2019): ရှက်ကြောက်ခြင်း Hidden - 15 အထီး porn အသုံးပြုသူအင်တာဗျူးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာမှု။ လူအများအပြားက porn စွဲ, အသုံးပြုခြင်း၏တင်းမာမှု, လေ့, ဆင်းရဲတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကဖော်ပြခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာပြောင်းလဲအသုံးပြုခြင်းနှင့်လေ့၏တင်းမာမှုလျှော့ချဖို့သက်ဆိုင်ရာကောက်နှုတ်ချက်နှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်း။
သင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းသည့်၎င်းတို့၏လိင်အမျိုးမျိုးရှုထောင့်နှင့်လိင်အတွေ့အကြုံများကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဘယ်လိုပြောခဲ့တယ်။ မိုက်ကယ်ညစ်ညမ်းအထူးသူညစ်ညမ်းအတွက်စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြောင်းမိန်းမနှင့်ထပ်ဖွကြိုးပမ်းမယ်လို့ပြုမူသောအမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးကသူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုသြဇာလွှမ်းမိုးခဲ့ပုံကိုဆွေးနွေးတင်ပြ။ သူကပေါ်ပေါ်ထင်ထင်သူမှန်မှန်အတွက်စေ့စပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုမူဆွေးနွေးနှင့်ဤလုပ်ရပ်များခဲ့ကြသည်ဘယ်လိုသဘာဝကမေးခွန်းထုတ်:
ပါဝင်သူများကပေးသောအချက်အလက်များသည်စာပေများနှင့်ကိုက်ညီသည်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်လိင်ဆိုင်ရာမျှော်လင့်ချက်များ၊ ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်နှစ်ပေါင်းများစွာပြီးနောက်လူတို့သညျအခြို့ကညစ်ညမ်းခြင်းဖြင့်သတ်မှတ်ထားမျှော်လင့်အထိတိုင်းတာဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့နေ့တိုင်းလိင်အတွက်စိတ်မဝင်စားရရှိရန်စတင်:
ဖရန့်: ငါကိုမှန်ကန်လိင်တူခံစားမျှော်လင့်လွန်းမြင့်မားသောကြောင့်အဖြစ်မလျောက်ပတ်။ အဆိုပါပစ္စည်းပစ္စယငါသူမ၏အိပ်ရာထဲမှာလုပ်ဖို့မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်။ porn ပုံမှန်လိင်ဘဝတစ်ခုလက်တွေ့သရုပ်ဖော်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါလက်တွေ့ပုံရိပ်တွေဖို့အသုံးပြုတယ်သောအခါ, သင်သည်သင်၏စစ်မှန်သောလိင်ဘဝပြင်းထန်မှုနှင့်ညစ်ညမ်း၏အပျော်အပါးကိုက်ညီဖို့မြျှောလငျ့။ သို့သော်ဖြစ်ပျက်ပါဘူး, ထိုသို့ဖြစ်ပျက်ခြင်းမရှိပါအခါ, ငါအနည်းငယ်စိတ်ပျက်ရပါတယ်။ (27, အာရှ, ကျောင်းသား)
ဖရန့်နှင့်ဂျော့ခ်ျ "Pornotopia", ", lusty အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့နှင့်အမြဲ orgasm အမြိုးသမီးမြား" ၏တစ်ဦးအဆုံးမဲ့ထောက်ပံ့ရေးအလွယ်တကူအထီးကြည့်ဘို့ရရှိနိုင်ပါသည်ဘယ်မှာစိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာကြီးအဖြစ်ရည်ညွှန်းကြောင်းညစ်ညမ်းတစ်ခုရှုထောင့်ကိုမီးမောင်းထိုးပြ (မုန်, 2012) ။ ဤယောက်ျားများအတွက်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်လိင်သဘာဝစိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာတစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့ပြီး“ အမှန်တရား” တွင်မတွေ့နိုင်ပါ။ ထိုအမျှော်လင့်ချက်များနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်မဟုတ်သည့်အခါလူတို့သညျအခြို့ကိုစိတ်ပျက်ခြင်းနှင့်လျော့နည်းလိင်နှိုးဆွဖြစ်လာသည်ခဲ့ကြသည်:
ဒါဝိဒ်သည်: ပထမဦးဆုံးမှာကအဲဒါလိင်ဆက်ဆံစုံတွဲများတဲ့အထိတိုးတက်, တဖြည်းဖြည်းအဝတ်အချည်းစည်းရတဲ့လူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အတော်လေးအစောပိုင်း မှစ. , ငါနှိမ့်ချလိင်ကွဲစအိုလိင်ဆက်ဆံဖို့ကျဉ်းမြောင်းစတင်ခဲ့သည်။ ဤသည်ငါ့အလိုရှိသမျှ porn ကြည့်ရှု [ စတင်. ၏စုံတွဲတစ်တွဲနှစ်အတွင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ။ ။ ] ထိုအရပ်မှ, ငါ့ကြည့် ပို. ပို. လွန်ကဲတယ်။ ငါကပိုယုံကြည်အသုံးအနှုန်းတွေနာကျင်မှုများနှင့်အဆင်မပြေသူများဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရ, ငါကြည့်ရှုအားပေးဗီဒီယို ပို. ပို. အကြမ်းဖက်ရဖို့စတင်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောမုဒိမ်းမှုတူဖို့လုပ်နေကြတယ်ဗီဒီယိုများ, အဖြစ်။ အဘယ်သို့ငါအဘို့အသွားခဲ့အိမ်လုပ်ပစ္စည်းပစ္စယ, အပျော်တမ်းစတိုင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးအဓမ္မပြုကျင့်မှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်တူသောကြောင့်ယုံကြည်ကြည့်ရှုကြ၏။ (29, Pa¯keha¯, Professional က)
ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုပိုမိုဆိုးရွားစေပြီးအံ့အားသင့်စရာများ၊ အံ့အားသင့်စရာများသို့မဟုတ်မျှော်လင့်ချက်များအားချိုးဖောက်ခြင်းများဖြစ်စေသောအမျိုးအစားအသစ်များကိုကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်ရှာဖွေခြင်းအတွက်အချိန်ပိုပေးသည်ဟုစာပေများကအကြံပြုထားသည်။ 2016) ။ စာပေနှင့်ကိုက်ညီ, ဒါဝိဒ်သည်ညစ်ညမ်းရန်သူ၏နယ်ပယ်ညစ်ညမ်းဦးစားပေးအဖြစ်မှတ်။ အမှန်မှာထို ဗလာကနေလက်တွေ့ရှာဖွေနေမုဒိမ်းကျင့်ရန်တင်းမာမှုလျှော့ချ ဒါဝိဒ်သည်ပြဿနာစေခြင်းငှါမိမိအသုံးပြုမှုကိုရိပ်မိ၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဝိဒ်ကဲ့သို့, ဒံယေလလည်းသူတွေ့ရှိခဲ့သောအရာကိုလိင်နှိုးဆွသောညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်၏နှစ်ကြာပြောင်းလဲခဲ့ကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ဒံယလေကအထူးသယောနိထိုးဖောက် penises ၏, ညစ်ညမ်းမြင်ကွင်းများအားမိမိကျယ်ပြန့်ထိတွေ့ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် နောက်ပိုင်းတွင်လိင်တစ်ဦးလိင်တံ၏ရှေ့တော်၌နေဖြင့်နှိုးဆွပေးခံရမှု:
Daniel: သငျသညျအလုံအလောက် porn စောင့်ကြည့်သည့်အခါ, သငျသညျကိုသူတို့သိပ်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဆိုရင်ကတည်းကအဖြစ်ကောင်းစွာ penises ၏မြင်ကွင်းများအားဖြင့်နှိုးဆွတဲ့စတင်ဖို့။ ထိုအခါလိင်တံဆွနှင့် arousal တစ် conditional နဲ့ automatic အရင်းအမြစ်ဖြစ်လာသည်။ ငါ့အဘို့ငါ့ဆွဲဆောင်မှုလိင်တံနှင့်လူတခြားဘာမျှဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရုံကိုဘယ်လိုဒေသတွင်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ပါပဲ။ ငါကလည်းတူသောဒီတော့ကျနော်လိင်တံထက်အခြားယောက်ျားထံမှဘာမျှမရယူထားခြင်း။ သငျသညျကူးယူနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးပေါ်သို့က paste လျှင်, ကြောင်းအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပါပဲ။ (27, Pasifika, ကျောင်းသား)
၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းဦးစားပေးပြောင်းလဲအဖြစ်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, နှစ်ဦးစလုံးလူတို့သညျကိုမှန်ကန်အသက်တာ၌မိမိတို့၏ဦးစားပေးလေ့လာစူးစမ်းဖို့ဆည်းကပ်။ ဒေးဗစ်သည်သူ၏အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုသူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ အထူးသဖြင့်စအိုလိင်နှင့်ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ဒါဝိဒ်သည်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လိင်ဆန္ဒများကိုလက်ခံသောအခါအလွန်စိတ်သက်သာရာရကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်အမြဲတမ်းမဟုတ်ချေ။ သို့သော်ဒါဝိဒ်သည်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်မုဒိမ်းမှုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုနှစ်သက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ခြင်းမပြုပါ : Daniel, ဒါဝိဒ်ကဲ့သို့လညျးမိမိညစ်ညမ်းဦးစားပေး reenacted နှင့်လိင်မိန်းမနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုမူမြားတှငျပါဝငျခွငျးဖွငျ့စမ်းသပ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအကြောင်းအရာများနှင့်လက်တွေ့ဘဝလိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်စာပေများအရဒေးဗစ်နှင့်ဒံယေလတို့၏အဖြစ်အပျက်များသည်စံသတ်မှတ်ချက်မဟုတ်ပါ။ သမားရိုးကျနည်းပါးသောအလေ့အကျင့်များအကြားဆက်နွယ်မှုရှိသော်လည်းလူတစ် ဦး ချင်းစီ၏သိသာထင်ရှားသောအချိုးအစားသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအထူးသဖြင့်ဓလေ့ထုံးတမ်းဓလေ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုပြန်လည်ပြုလုပ်ရန်စိတ်မ ၀ င်စားကြပါ (Martyniuk, Okolski, & Dekker, 2019) ။
နောက်ဆုံးလူတို့သညျသက်ရောက်မှုညစ်ညမ်းမိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအပေါ်ရှိခဲ့ဖူးအစီရင်ခံ, သာမကြာသေးမီကစာပေအတွင်းလေ့လာခဲ့ပြီးကြောင်းအရာတစ်ခုခု။ ဥပမာအားဖြင့်, ပန်းခြံများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (2016), အင်တာနက်ညစ်ညမ်းကြည့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်စေခြင်းငှါရှာတွေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုလျော့ကျခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်စိတ်လျော့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာပါဝင်သူသူတို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုမှစွပ်စွဲထားတဲ့ဆင်တူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်, သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
လေးဆယ်လေးကိုလေ့လာ: အသက်ကြီးလူကြီးများ (2019) တွင်ကျဘာစွဲ၏လက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာ - စပိန်ဘာသာတွင်၊ ပျမ်းမျှအသက်မှာ ၆၅ နှစ်ဖြစ်သည်။ စွဲခြင်းပုံစံအပါအ ၀ င်လုံး ၀ မပါ ၀ င်သောအံ့သြဖွယ်တွေ့ရှိချက်များပါ ၀ င်သည် 24% သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည် ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေအခါ, porn (စသည်တို့ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှု, ယားယံခြင်း, စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း,) ရယူနိုင်ခြင်း။ ယင်းစိတ္တဇမှ:
ထို့ကြောင့်ဤလုပ်ငန်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာနှစ်ဆခဲ့: 1) ဒီလူဦးရေထဲမှာသွင်ပြင်လက္ခဏာများကြောင်းအရိပ်လက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုပရိုဖိုင်းကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့) ကျဘာအသုံးပြုခြင်းနှင့်2တစ်ဦးရောဂါဗေဒပရိုဖိုင်းကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲသို့မဟုတ်ဖေါ်ပြခြင်း၏အန္တရာယ်မှာအဟောင်းတွေလူကြီးများ၏ပျံ့နှံ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်။ အသက် 538 နှစ်အတွင်း 77 ပါဝင်သူ (60% ယောက်ျား) (M = 65.3) အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြေးခွံတစ်ခုစီးရီးပြီးစီးခဲ့သည်။ ၇၃.၂% ကအင်တာနက်ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အသုံးပြုကြသည်ဟုဆိုသည်။ ၎င်းတို့အနက် ၈၀.၄% သည်အပန်းဖြေမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၂၀% သည်စွန့်စားစားသုံးမှုကိုပြသသည်။ အဓိကရောဂါလက္ခဏာများအနက်မှအများဆုံးပျံ့နှံ့မှုမှာ (ပါဝင်သူ ၅၀%) သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်တစ်ပတ်လျှင် ၅ နာရီ (၅၀%) အသုံးပြုခြင်း၊ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း (၅၁%)၊ ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများ (စိုးရိမ်စိတ်၊ စိတ်တိုခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းစသည်တို့) (၂၄%)။ ဤလုပ်ငန်းကိုတစ်ဦးအသံတိတ်အုပ်စုနှင့်များသောအားဖြင့်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးများ၏မြှင့်တင်ရေးတို့အတွက်တစ်စုံတစ်ရာဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုပြင်ပတွင်အွန်လိုင်းအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနေပုံကိုမြင်ယောင်ကြည့်၏ဆက်စပ်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ။
သင်တန်းငါးဆယ်အတွင်းလေ့လာရန် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအိမ်ထောင်သည်စုံတွဲများ (2019) - ရှားပါးအီဂျစ်လေ့လာမှု။ လေ့လာမှုတွင်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်နှိုးဆွမှုနှုန်းတိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည် porn ၏ကာလတိုသက်ရောက်မှုများနှင့်မကိုက်ညီပါ။ နိဂုံး:
လေ့လာမှုအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းသည်အိမ်ထောင်ရေးနှစ်နှင့်စာရင်းအင်းအပြုသဘောဆောင်သောဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ဒါက Goldberg နဲ့သဘောတူထားတာ et al ။ 14 အဘယ်သူသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအလွန်အမင်းစွဲလမ်းကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Doidge နှင့်လည်းသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့သည် 15 ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုကြည့်နေစဉ်ခန္ဓာကိုယ်မှထုတ်လွှတ်သော dopamine ကိုသည်းခံနိုင်စွမ်းရှိသည်ဟုသူကပြောကြားခဲ့သည်။
လိင်မှုကိစ္စကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုနှင့်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းတို့အကြားအလွန်ဆိုးဝါးသောဆက်စပ်မှုရှိသည်။ အပြုသဘောဆောင်သည့်စောင့်ကြည့်သူများ၏ 68.5% သည်သူတို့၏လိင်ဆိုင်ရာဘဝကိုမကျေနပ်ကြပါ။ ၎င်းသည် Bergner နှင့် Bridges တို့နှင့်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့သည် 17 သူသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုသူများအပေါ်ကျေနပ်မှုလျော့နည်းကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်အလိုဆန္ဒနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုအကြိမ်ရေများပြားစေသော်လည်းလက်ရှိလေ့လာမှုတွင်အသုံးပြုသူသည်အော်ဂဇင်ကိုရောက်ရှိရန်မကူညီနိုင်ပါ။ ဤသည် Zillman နှင့်အတူသဘောတူညီချက်၌ရှိ၏ 24 ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းသည်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောပစ္စည်းများပိုမိုသည်းခံနိုင်မှုကို ဦး တည်စေသောကြောင့် Henderson နှင့်သဘောတူထားသည့်တူညီသောနှိုးဆွမှုနှင့်စိတ် ၀ င်စားမှုများကိုရရှိရန်ဝတ္ထုနှင့်ထူးထူးဆန်းဆန်းပစ္စည်းများပိုမိုလိုအပ်လာသည်ကိုသူတွေ့ရှိခဲ့သည် 25သူကနှိုးဆော်နှိုးဆွခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်ထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသောပစ္စည်းများသည်ထိုသို့မပြုလုပ်တော့ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထပ်မံ၍ ကြည့်ရှုရန်အချိန်နှင့်ကြာချိန်ကိုကြည့်ခြင်းနှင့်ပိုမိုအားနည်းသောပစ္စည်းများသည်တူညီသောအတိုင်းအတာနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိရန်ကြိုးပမ်းကြသည်။
သင်တန်းလေးဆယ့်ခြောက် - ပြProbleနာကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေအသုံးပြုမှုကိုအကဲဖြတ်ခြင်း - နည်းလမ်းသုံးမျိုးနှင့်ရောနှောထားသောနည်းလမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း (၂၀၂၀) - တရုတ်နိုင်ငံ၏လေ့လာမှုအသစ်အရလူကြိုက်များသောညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းမှုမေးခွန်းသုံးခု၏တိကျမှုကိုနှိုင်းယှဉ်ပြသည်။ ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူနှင့်ကုထုံးပညာရှင် ၃၃ ယောက်ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပြီးဘာသာရပ် ၉၇၀ ကိုလေ့လာခဲ့သည်။ သက်ဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်များ:
တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည့် ၃၃ ခုအနက် ၂၇ ခုသည်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည့် ၃၃ ခုအနက် ၁၅ ခုသည်ပိုမိုပြင်းထန်သောအကြောင်းအရာများသို့တိုးမြှင့်ခြင်းကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
မေးခွန်း ၃ ခုအနက်မှအတိကျဆုံးသည် PPCS ဖြစ်ပြီးမူးယစ်ဆေးစွဲစွဲလမ်းမှုမေးခွန်းပုံစံများဖြင့်ပုံစံပြုထားသည်။ အခြားမေးခွန်း ၂ ခုနှင့်ယခင် porn စွဲလမ်းမှုစမ်းသပ်မှုများနှင့်မတူသည် PPCS သည်သည်းခံမှုနှင့်ဆုတ်ခွာခြင်းကိုအကဲဖြတ်သည်။ သည်းခံမှုနှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းကိုအကဲဖြတ်ရန်အရေးကြီးပုံကိုဖော်ပြသောကောက်နှုတ်ချက် -
ပိုမိုခိုင်မာတောင့်တင်းသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများနှင့် PPCS ၏အသိအမှတ်ပြုမှုပိုမိုမြင့်မားမှုသည်၎င်းသည် Griffiths ၏ခြောက်ပိုင်းသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှု (ဥပမာ PPUS နှင့် s-IAT-sex) နှင့်အညီတီထွင်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ PPCS တွင်ခိုင်မာသည့်သီအိုရီဆိုင်ရာမူဘောင်ရှိပြီး၊11]. အထူးသဖြင့်သည်းခံမှုနှင့်ဆုတ်ခွာမှုသည် PPUS နှင့် s-IAT-sex တို့မှအကဲဖြတ်ခြင်းမခံရသည့်ပြproblemနာရှိသော IPU ၏အရေးကြီးသောရှုထောင့်များဖြစ်သည်။;
ဒါဟာအစကနေပေါ်မူတည်ပြီးနိုင်ပါသည် ပုံ 1 စေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့်ကုထုံးပညာရှင်များကပconflictိပက္ခ၊ ဆုတ်ခွာ IPU (ဖော်ပြမှုအကြိမ်ရေကို အခြေခံ၍)၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သူတို့ကစိတ်ခံစားမှုပြုပြင်မွမ်းမံ, relapse နှင့်ချိန်ညှိ ဆုတ်ခွာ ပြproblemနာအသုံးပြုမှု (အရေးကြီးသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အခြေခံပြီး) တွင်ပိုမိုအရေးကြီးသောအင်္ဂါရပ်များအဖြစ်။
သင်တန်းခုနစ်ခု - အမေရိကန်အရွယ်ရောက်ယောက်ျားများအတွက်သက်တမ်းတစ်လျှောက် Deviant Sexual Fantasy ကို attenuation (၂၀၂၀) လေ့လာမှုအရ ၁၈-၃၀ နှစ်အရွယ်အုပ်စုသည်လိင်မှုဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်မှုအမြင့်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပြီး ၃၁ မှ ၅၀၊ ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင် porn အသုံးပြုမှုအမြင့်ဆုံးနှုန်းထားရှိတဲ့အသက်အရွယ်အုပ်စုဟာဘယ်သူတွေသုံးပြီးကြီးပြင်းလာတာလဲ ပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များ) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံစည်မှုအမြင့်ဆုံးနှုန်းထားများ (မုဒိမ်းမှု၊ fetishism၊ ကလေးသူငယ်များနှင့်လိင်) ကိုအစီရင်ခံပါ။ ဆွေးနွေးမှုကဏ္fromမှကောက်နုတ်ချက်အရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းသည်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်နိုင်သည်။
သင်တန်းလေးဆယ်ရှစ်: အင်တာနက်ပေါ်ရှိကလေးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်စတင်ခြင်း၏အခြေခံအကြောင်းရင်းများ (၂၀၂၀) - လေ့လာမှုအသစ်အရကလေး porn (CP) အသုံးပြုသူအများစုသည်ကလေးများအားလိင်ဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုမရှိပါ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြည့်ရှုလေ့လာပြီးနောက်မှသာအသစ်သောအမျိုးအစားများနောက်မျိုးဆက်သစ်များကိုလေ့ကျင့်လာသည်။ နောက်ဆုံးတွင်ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများသည်အစွန်းရောက်ပစ္စည်းများ၊ အမျိုးအစားများကိုပိုမိုရှာဖွေလာကြပြီးနောက်ဆုံးတွင်စီပီသို့တိုးများလာခဲ့သည်။ သုတေသီများကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှု၏သဘောသဘာဝကို (ပြက်ဘ်ဆိုက်များမှတစ်ဆင့်အဆုံးမဲ့အသစ်စက်စက်) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုကို CP ကဲ့သို့သောအလွန်အစွန်းရောက်သောအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ အဓိကအခန်းကဏ္ playing မှပါဝင်သည်ဟုညွှန်ပြကြသည်။ သက်ဆိုင်ရာကောက်နုတ်ချက်များ:
သင်တန်းလေးဆယ့်ကိုးခု - တားမြစ်ထားသောထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပြproblemနာများအင်တာနက် - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း - အင်ဆူလာ၏အရေးပါသောဟန်ချက်ညီမှုအခန်းကဏ္ ((Anton & Brand, 2020) - စာရေးသူကသူတို့၏ရလဒ်သည်သည်းခံမှု၊ စွဲလမ်းမှုဖြစ်စဉ်၏ထူးခြားချက်ကိုဖော်ပြသည်။ သက်ဆိုင်ရာကောက်နုတ်ချက်များ
ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိလေ့လာမှုသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာယန္တရားများ၊ တပ်မက်မှု၏ပြသနာများ၊ အပြုအမူကိုပြောင်းလဲရန်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုထိန်းချုပ်မှုတို့အကြားအနာဂတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကိုလှုံ့ဆော်သည့်ပထမဆုံးချဉ်းကပ်မှုအဖြစ်ရှုမြင်သင့်သည်။
ယခင်လေ့လာမှုများနှင့်ကိုက်ညီ (ဥပမာ, Antons & အမှတ်တံဆိပ်, 2018; ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Snagowski, Laier, & Maderwald, 2016; Gola et al ။ , 2017; Laier et al ။ , 2013), ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြေအနေနှစ်ခုလုံးတွင်ပုဂ္ဂလဒိc္တဏှာစွဲလမ်းမှုနှင့်ပြaticနာရှိသော IP အသုံးပြုမှု၏လက္ခဏာပြင်းထန်မှုအကြားမြင့်မားသောဆက်နွယ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သို့သော် cue-reactivity ကိုတိုင်းတာသည့်အနေဖြင့်တပ်မက်ခြင်းမှာတိုးပွားလာသော IP အသုံးပြုမှု၏လက္ခဏာပြင်းထန်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ ဒီသည်းခံစိတ်မှဆက်စပ်လိမ့်မည် ( cf. Wéry & Billieux, 2017) ဒီလေ့လာမှုမှာအသုံးပြုတဲ့ညစ်ညမ်းပုံရိပ်များပုဂ္ဂလဒိive္ ဦး စားပေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌တစ် ဦး ချင်းမခံခဲ့ရကြောင်းပေးသော။ ထို့ကြောင့်၊ အသုံးပြုထားသောစံသတ်မှတ်ထားသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဆိုင်ရာပစ္စည်းများသည်ထိုးထွင်းသိမြင်မှု၊ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှင့် interoceptive စနစ်များအပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့်ထိတွေ့မှုထိန်းချုပ်မှုစွမ်းရည်နိမ့်ကျခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောမြင့်မားသောလက္ခဏာပြင်းထန်မှုရှိသောလူများအား cue-reactivity ကိုဖြစ်ပေါ်စေရန်လုံလောက်သောအားဖြင့်မစွမ်းနိုင်ပါ။
သည်းခံစိတ်နှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးကြားမှုရှုထောင့်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည် interoceptive နှင့် reflective system ၏ differential activity နှင့်ဆက်စပ်သောမြင့်မားသောလက္ခဏာပြင်းထန်မှုရှိသူများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သော inhibitory control စွမ်းဆောင်ရည်ကိုရှင်းပြနိုင်သည်။ IP အသုံးပြုမှုအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုလျော့နည်းလာခြင်းဟာထကြွလွယ်သော၊ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှင့် interoceptive စနစ်များအကြားအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
အတူတူယူ, အ insula ဟာ interoceptive system ကိုကိုယ်စားပြုသောအဓိကဖွဲ့စည်းပုံအဖြစ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရောက်ရှိသောအခါ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။ ဒေတာအချက်အလက်များအရပြIPနာရှိသော IP အသုံးပြုမှုပိုမိုဆိုးရွားသည့်လက္ခဏာများပြင်းထန်သောပုဂ္ဂိုလ်များသည်ပုံရိပ်အပြောင်းအလဲပြုလုပ်စဉ်အတွင်းအင်ဆူလာလှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွားခြင်းနှင့်တားဆီးထိန်းချုပ်မှုလုပ်ဆောင်မှုတွင်လုပ်ဆောင်မှုပိုမိုမြင့်မားခြင်းတို့ကြောင့်လုပ်ငန်း၌ပိုမိုကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
ဤရွေ့ကားလှုပ်ရှားမှုပုံစံသည်သည်းခံမှု၏သက်ရောက်မှုများပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ impulsive system ၏ hyperactivity နည်းပါးခြင်းကြောင့် interoceptive နှင့် reflective system ၏အရင်းအမြစ်များကိုလျော့နည်းစေသည်။ ထို့ကြောင့်ပြproblemနာဆိုင်ရာ IP အသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှု (ရှောင်ရှားခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော) ရှုထောင့်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်း၏အကျိုးဆက်အဖြစ်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူများသို့ပြောင်းလဲခြင်းသည်သက်ဆိုင်နိုင်သည်။ သို့မှသာအရင်းအမြစ်များအားလုံးသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်လုပ်ငန်းကိုအာရုံစိုက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လေ့လာမှုသည် IP အသုံးပြုမှုအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုလျော့နည်းသွားခြင်းအားပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အထောက်အကူပြုသည်။ ၎င်းသည်စနစ်နှစ်ခုစလုံးအကြားမညီမမျှဖြစ်ခြင်းသာမကလှုံ့ဆော်မှု၊ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှင့် interoceptive စနစ်များအကြားအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင်တန်းငါးဆယ် - အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အသုံးပြုသူများအတွေ့အကြုံအားလေ့လာခြင်း - အရည်အသွေးလေ့လာမှု (၂၀၂၀)
ပါ ၀ င်သူများက IP တွင်စွဲစွဲလမ်းမှုကိုခံစားရသည့်လက္ခဏာများတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ “ စွဲလမ်းခြင်း” ဟူသောအသုံးအနှုန်းကို“ စုပ်ယူ” နှင့်“ အလေ့အထ” တို့ကိုမှီခိုအားထားလေ့ရှိသည်။ ပါဝင်သူများအနေဖြင့်လည်းထိုကဲ့သို့သောစွဲလမ်းစေသောရောဂါများနှင့်ကိုက်ညီသောရောဂါလက္ခဏာများနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုတင်ပြခဲ့သည်။ IP အသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချရန်မတတ်နိုင်ခြင်း၊ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအိုင်ပီအသုံးပြုမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်အလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုရရှိရန်ပိုမိုအစွန်းရောက်သော IP ပုံစံများကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်ခြင်း၊ အဆင်မပြေမှုများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်သို့မဟုတ်စိတ်ကျေနပ်မှုရရန်သို့မဟုတ်“ မြင့်မားသောသဘော” ရရှိရန်နှင့်အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောအကျိုးဆက်များနှင့်ဘ ၀ ရလဒ်များအရအိုင်အက်စ်ကိုဆက်လက်အသုံးပြုခြင်း။ အောက်ပါခေါင်းစဉ်ငယ်များသည်ဤဖြစ်ရပ်များကိုဖော်ပြသည်။
ညစ်ညမ်းမှုမရှိခြင်း (သို့) တကယ့်ဘဝမိတ်ဖက်များနှင့်စိုက်ထူခြင်းကိုရရှိရန်မတတ်စွမ်းနိုင်ခြင်းဟုယူမှတ်ထားသော erectile dysfunction ကဲ့သို့သောရောဂါလက္ခဏာများကိုမကြာခဏဖော်ပြလေ့ရှိသည်။“ ငါဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့မထနိုင်ဘူး။ ငါလုပ်ခဲ့ရင်တောင်သိပ်မကြာပါဘူး။ ဤလက္ခဏာများကိုသင်တန်းသားများကမကြာခဏညည်းညူလေ့ရှိသည်။ အကြိမ်များစွာ! ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါမရပ်နိုင်ဘူး ပြောရလောက်ပြီ
ပါ ၀ င်သူများက IP ကိုကြည့်ရှုခြင်းအတွက်အချိန်ပိုပေးရခြင်းနှင့်အခြားဘဝကဏ္otherများကိုလျစ်လျူရှုခြင်း၊ အခြားသူများနှင့်ဆက်ဆံခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပန်းတိုင်များ၊“ အဓိကအားဖြင့်တော့ငါနဲ့ဝေးတဲ့အချိန်လိုတယ်၊ ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လေ့လာခြင်း၊ အလုပ်ချိန်၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်အချိန်၊ အနားယူချိန်စသည်တို့ကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ အခြားပါဝင်သူတစ် ဦး ကမူ IP ကြည့်ခြင်းဖြင့်အချိန်ယူရခြင်းမှာသူ၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ "ဒါဆိုရင်အပြုသဘောဆောင်တဲ့အရာတွေထက်အင်တာနက် porn ကိုကြည့်ရတာအချိန်ကောင်းပဲ။ " ဆုံးရှုံးသွားသောအချိန်များ၏သက်ရောက်မှုကိုတွက်ချက်ရန်ခက်ခဲသည်၊ ဤသင်တန်းသားက“ ငါဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်ကိုရေတွက်ပြီးအမှန်တကယ်အရေးကြီးတဲ့အခြားအရာတစ်ခုခုလုပ်နေတယ်လို့ထင်နေတယ်။
ONE ငါးဆယ်လေ့လာရန် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများ၏အစောပိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုသူများအကြားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေး (၂၀၂၀) - အဓိကအားဖြင့်အင်တာဗျူးလေ့လာမှု။ အရှိန်မြင့်ခြင်း၊ အေးစက်ခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခြင်းကိုဖော်ပြသောသက်ဆိုင်ရာကောက်နုတ်ချက်များ။
ကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်ထိုင်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်လက်ရှိရှုပ်ထွေးနေသည်။ လွန်ခဲ့သောခြောက်လခန့်က၎င်း၏အသုံးပြုမှု၏ဆိုးကျိုးများကိုကျွန်ုပ်မစဉ်းစားခဲ့ပေ။ ၄ င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ချစ်သူနှင့်လေးနှစ်ကွဲရန်အထောက်အကူပြုသောအချက်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်သည်။ အပြာအပြာစွဲစွဲခြင်းအတွက်စိတ်ပညာရှင်တစ်ယောက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးကိုအတူတကွထိန်းသိမ်းရန်ကြိုးစားခြင်းကိုအထောက်အကူပြုသည်ကိုတွေ့ခဲ့ရသော်လည်းဤအရာသည်မကူညီဟုထင်ရသည်။ [စစ်တမ်းတုံ့ပြန်မှု 194, Q2] ။
မီဒီယာကကျွန်ုပ်အပေါ်အနည်းငယ်သြဇာညောင်းသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ၌ကျွန်ုပ်သည် porn အလွန်အကျွံသုံးစွဲနေသည်ဟုခံစားရလေ့ရှိသည်။ ဒါကကျွန်တော့်ကိုဘဝရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံတွေကနေအာရုံလွဲသွားသလိုခံစားရတယ်။ ငါ porn ကနေချိုးခဲ့ကြသောအခါငါ့အစစ်အမှန်ဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများအမြဲပိုကောင်းဖြစ်ကြသည်။ ငါကြည့်ရှုသည့်ညစ်ညမ်းမှုအမျိုးအစားသည် vanilla လိင်ဆက်ဆံလိုသောဆန္ဒအပေါ်သြဇာညောင်းသည်ကိုလည်းကျွန်ုပ်စိုးရိမ်မိသည်။ [စစ်တမ်းတုံ့ပြန်မှု 186, Q2] ။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သူသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုစွဲလမ်းခြင်းရှိ၊ မရှိကြည့်ရှုသူနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းသည်၎င်းကိုကြည့်ရှုရန်အချိန်များစွာဖြုန်းတီးခြင်းကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုသည်အကြောင်းအရာများပိုမိုများပြားလာခြင်း၏ပြproblemနာဖြစ်သည်ဟူသောအယူအဆကိုရှင်းလင်းစွာငြင်းပယ်ခြင်းကိုဖော်ပြသည်။ အနည်းဆုံး:
C: ကောင်းပြီ၊ မင်းသိတယ်၊ ငါ့မြင်ကွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးခြားတဲ့အရာဘာမှမရှိဘူးလို့မထင်ဘူး၊ ငါဟာငါ့ရဲ့အသက်အရွယ်အားလုံးနဲ့ငါကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ယောက်ျားတွေနဲ့ဆက်စပ်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်၊ နင်ကနူးညံ့တဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုမကြည့်ပဲနေတာလား၊
တွေ့ဆုံမေးမြန်းသူ: Penthouse လိုမျိုး၊
C: ဟုတ်တယ်၊ ဒါထက်တောင်နည်းနည်းလေးပဲပြီးတော့တက်လိုက်၊ တက်သွားတယ်။ သငျသညျ Playboy ကနေ Penthouse သို့သွား။ ငါ dunno uurgh, ပြီးတော့သူက vids umm သို့လှည့်, ကပိုမိုအားကောင်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာဗျူးသူ။ ။ Mmm ဒါပေမယ့်မင်းရပ်တန့်မယ့်အချက်ရှိတယ်မဟုတ်လား။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ -
C: ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါငါ့အတွက်ရွေးချယ်တာ umm ပဲ
တွေ့ဆုံမေးမြန်းသူ။ ။ အခြားလူများကထိုအရာကိုလုပ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုစိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိပါသလား။
C: ငါ - ကောင်းကောင်းငါထင်တယ်၊ ဒီဆိုဒ်တွေမှာအနှောင်အဖွဲ့နဲ့အလွဲသုံးစားမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကဈေးကွက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ ငါမသိဘူး - အဲဒီလူတွေဟာငါလိုမျိုးအစပြုလာကြပြီးမိန်းကလေးတွေရဲ့ရုပ်မြင်သံတွေကိုကြည့်ပြီးအဲဒီကနေထွက်သွားကြတာပါ။
အင်တာဗျူး: ဟုတ်တယ်၊ ပြီးတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာမင်းအဆုံးသတ်လိုက်တယ်၊
ဤတွင် C ၏ပိုမိုအားကောင်းသောနှင့်ပိုမိုအားကောင်းသောအကြောင်းအရာများမှတိုးတက်မှုကိုရပ်တန့်ရန် 'ရွေးချယ်မှု' သည်သူ၌ရှိခဲ့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သော်လည်း 'တကယ့်အမာခံ' တွင်အဆုံးသတ်ခဲ့သောသူများနှင့်ခြားနားနေသည်။ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအင်တာနက်မည်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်နှင့်လူငယ်များ၏အတွေ့အကြုံများသည်စပီကာ၏အခြေအနေနှင့်မည်သို့ကွာခြားမည်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းစွာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
ဤတွင်အီးသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပတ်သက်သောသူ၏အစောပိုင်းအတွေ့အကြုံများကိုအကျွမ်းတဝင်ရှိသောညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအညွှန်းကိန်း (ဥပမာသူငယ်ချင်း၏ဖခင်) မှဖော်ပြခဲ့သည်၊ ၎င်းအစောပိုင်းတွေ့ရှိချက်သည်သူအသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှအရာရာကို“ ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်” သို့သော်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း၏နောက်အဆင့်တစ်ခုတွင်အီးသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစောစီးစွာထိတွေ့ခြင်းသည် 'အခြား' လူငယ်များကိုအမှန်တကယ်ထိခိုက်စေနိုင်သည်ဟုလည်းအကြံပြုထားသည်
တွေ့ဆုံမေးမြန်းသူ - အကြမ်းဖက်မှုနဲ့တူတူလား။
E: ဟုတ်ကဲ့၊ အတူတူပါပဲ။ မင်းသိတဲ့အတိုင်းကလေးငယ်တစ်ယောက်မှာအကြမ်းဖက်မှုဟာမင်းကိုမြင်တဲ့အခါမှားတယ်၊ မင်းကဂျီကိုမထိနဲ့၊ မင်းကိုမင်းဒါကိုမပေးခဲ့တာမင်းသိတယ်။ မင်းမှားတယ်ဆိုတာမင်းသိတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးအပြုအမူမျိုးလိုမျိုး - မင်းဖြစ်သင့်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ခက်ခဲတဲ့အပိုင်းကလူငယ်တွေပါ။ သူတို့ဟာ ၂၃၊ ၂၄ နှစ်မတိုင်ခင်သိမြင်မှုဆိုင်ရာ ဦး နှောက်ကိုမရခင်မှာလက်ခံနိုင်ဖွယ်အပြုအမူနဲ့ခွဲခြားရန်မကြာခဏရုန်းကန်နေကြရတယ်။ လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသောအပြုအမူများနှင့်သူတို့၏အပြုအမူအတွက်အကျိုးဆက်များ။ ဒါကြောင့်သူတို့ကယောက်ျားသုံးယောက်ဟာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုယူပြီးကားနောက်ဘက်မှာရိုက်နှက်တာအဆင်ပြေတယ်လို့သူတို့ထင်ကောင်းထင်ကြလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအင်တာနက်ပေါ်မှာလိုခင်ဗျားသိတဲ့ဗွီဒီယိုဖိုင်မှာသူတို့တွေ့ခဲ့တာပဲ။ ဒီမိန်းကလေးကိုသူတို့ဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာအတွက်အမှန်တကယ်ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကိုတကယ်သဘောပေါက်ခဲ့တယ် ဒါပေါ်နှင့်ဒါပေါ်။
အင်တာဗျူးသူ။ ။ ဒါဆိုမင်းရဲ့အတွေ့အကြုံမှာ ၁၃ နှစ်အရွယ်မှာမင်းကမိတ်ဖက်များစွာနဲ့တူတယ်လို့မင်းပြောခဲ့တာဆိုပါစို့။ ဒါကြောင့် - ဒါပေမယ့်သင်ဟာသွေးဆောင်လိုစိတ်ရှိခဲ့ရင်၊ မင်းပြောသလိုသင်သူငယ်ချင်းတွေစုမိခဲ့သလိုသင်လည်းသိခဲ့တယ်။
E: အိုး။ နောက်လိုက်။
အင်တာဗျူးသူ။ ။ ဆိုလိုတာကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေထဲမှာမင်းတွေ့ခဲ့တာရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအရပြောတာလား။
E: ဟင့်အင်း၊ မင်းသိတဲ့အတိုင်းအေးအေးဆေးဆေးပဲနေမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ် [ရယ်သံများ]
တွေ့ဆုံမေးမြန်းသူ။ ဒါပေမယ့်မင်းက 'ယောက်ျားတွေကိုလာစမ်းပါ' လို့မင်းသိမှာမဟုတ်ဘူး။
E: ဟုတ်တယ်။ နံပါတ်
E: မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ် - ကျွန်ုပ်ထင်သည် - ၎င်းသည် - ကျွန်ုပ် - ဖြစ်သည် - ငါအရင်ကပြောခဲ့သလိုမျိုး၊ ဆိုလိုတာက၊ လူတွေထင်တယ်၊ လူတွေရဲ့အပြုအမူ၊ သူတို့ရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးကျဆင်းတယ်၊ သင်သိတယ်၊ ကုသခံခဲ့ရတယ် မင်းမှာ wro - မှားယွင်းတဲ့ပြုစုပျိုးထောင်မှုမျိုးရှိရင်မင်းအဲဒီလိုလုပ်နိုင်မှာပါ၊ 'လာကြစို့၊ ဒီကြက်ကိုယူကြ' 'လို့သင်သိလိမ့်မယ်။ သင်သိ, blah blah blah 'အကြောင်းမှာသင်သည်အခြားဒုတိယအပိုင်းအစ မှလွဲ၍ အခြားအရာများနှင့်ဆက်နွှယ်မှုမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အချို့လူများကထိုအပင်မှကြီးထွားလာခြင်းမရှိပါ။
ထို့ကြောင့် ထပ်မံ၍ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေပြproblemနာသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကြားခံပြောင်းလဲမှုနှင့်လူငယ်များ၏ (ကြား) စွမ်းရည်အသစ်ကိုနားလည်ရန်စွမ်းရည်နှစ်မျိုးစလုံးဖြစ်သည်။ ပထမဥပမာအနေဖြင့်အီးသည်မဂ္ဂဇင်းပုံစံဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်များစွာအထောက်အကူပြုကြောင်းအကြံပြုသည်။ ထို့နောက်အလားတူအပြာစာပေနှင့်အထူးသဖြင့်အုပ်စုလိုက်လိင်မြင်ကွင်းများသည်လူငယ်များကိုမိန်းကလေးငယ်အချို့အားခေါ်ဆောင်။ နောက်ကျောတွင်ထိုးနှက်နိုင်သည်ဟုအကြံပြုသည် ကား'' ။
နှစ်ဆယ်လေ့လာရန် - အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများ - အမျိုးအစားများ၊ အကဲဖြတ်ခြင်း၊ ကုသခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်း (၂၀၂၀) - စိတ္တဇသည် pedophiles မဟုတ်သောကလေးသူငယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအသွင်သို့ကူးပြောင်းသွားသည်ဟုဆိုနေပါသည်။
သင်တန်းငါးဆယ်လေ့လာမှု အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်းပြofနာ၏အယူအဆများကို အခြေခံ၍ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လူမှုကွန်ယက် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုပြproblemနာများအသုံးပြုခြင်းကိုအကဲဖြတ်ရန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှု (၂၀၂၀) - Sညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုမေးခွန်းများအတွက်ပြင်ဆင်ထားသော Gaming Addiction Assessment ကိုအတည်ပြုခြင်း။ သိသိသာသာရာခိုင်နှုန်း ဘာသာရပ်များသည်သည်းခံမှုနှင့်တင်းမာမှုများအပါအ ၀ င်စွဲလမ်းမှုအတွက်စံသတ်မှတ်ချက်များစွာကိုထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ ၇၀၀ မှ ၁၆၁ သည်သည်းခံစိတ်ကိုခံစားခဲ့ရသည် - တူညီသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုရရှိရန်အတွက် porn သို့မဟုတ်“ ပိုမိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်” porn လိုအပ်သည်။
ငါးဆယ်လေ့လာရန် အမျိုးသားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု - တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း (2003) - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများဟုခေါ်သည့်အမျိုးသားများအတွက်လေ့လာမှုအဟောင်း (ED, DE၊ အစစ်အမှန်မိတ်ဖက်များကနှိုးဆွနိုင်ခြင်းမရှိခြင်း) ။ ဒေတာသည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်ထက် ပို၍ အသက်ကြီးသော်လည်းအင်တာဗျူးများမှ“ erotica” အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သတ်၍ သည်းခံစိတ်နှင့်တင်းမာမှုများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
သင်တန်းသားများကိုယ်တိုင်သူတို့ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်သူတို့ကြုံတွေ့ရသောအခက်အခဲများအကြားဆက်နွယ်မှုရှိမရှိမေးခွန်းထုတ်လာကြသည်။ ဂျေမိမိအပြproblemနာစတင်မတိုင်မီ ၂ နှစ်တာအရိပ်လက္ခဏာနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုမှီခိုအားထားနေခြင်းက၎င်းကိုဖြစ်စေသောအကြောင်းရင်းကိုဖြစ်စေသည်ဟုကျွန်ုပ်တွေးမိသည်။
J: ။ ။ ။ အဲဒီနှစ်နှစ်တာကာလမှာကျွန်တော်ဟာပုံမှန်ဆက်ဆံရေးမှာမရှိခဲ့ဘူး၊ အမေဖြစ်ခဲ့ပြီးရုပ်မြင်သံကြားမှာပုံရိပ်တွေပိုများနေတဲ့အတွက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခဲ့တာဖြစ်ပြီးသင်မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ဝယ်ဖို့မလိုချင်ဘူး၊
သူတို့၏အတွေ့အကြုံများမှလှုံ့ဆော်မှုများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော်လည်းသင်တန်းသားအများစုသည်သူတို့၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်နှိုးဆွမှုတိုးပွားစေရန်အမြင်အာရုံသို့မဟုတ်စာပေ erotica ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ 'စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြင်အာရုံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်မကောင်းသောသူ' ဂျင်မ်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အချိန်တွင်မိမိကိုယ်ကိုနှိုးဆွမှုကိုအားဖြည့်ခြင်းဖြင့်မည်သို့နှိုးဆွပေးသည်ကိုရှင်းပြသည်။
J: အချိန်အတော်များများရှိမယ်လို့ငါဆိုလိုတယ် ငါကိုယ့်ကိုကိုယ်လှုံ့ဆော်နေတယ်၊ တီဗွီအစီအစဉ်တစ်ခုကိုကြည့်တယ်၊ မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ဖတ်တယ်.
B: တခါတရံအခြားသူများနှင့်အတူနေခြင်း၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုသည်လုံလောက်သည် ဒါပေမယ့်နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှမင်းစာအုပ်တစ်အုပ်လိုချင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ရုပ်ရှင်တစ်ကားကိုတွေ့တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်မင်းအဲဒီညစ်ပတ်မဂ္ဂဇင်းတွေထဲကတစ်ခုရှိတယ်၊ \_ t ဒါကြောင့်သင်မျက်စိကိုပိတ်ပြီးဒီအရာတွေကိုစိတ်ကူးယဉ်နေတယ်။
လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကိုဖန်တီးရာတွင်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှု၏ထိရောက်မှုကို Gillan (၁၉၇၇) ကမှတ်သားထားသည်။ ဤသင်တန်းသားများမှ erotica ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုကန့်သတ်ထားသည်။ ဂျင်မ်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အချိန်တွင်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မြင့်တက်လာခြင်းကိုသတိထားမိသည်။
လက်တွဲဖော်နှင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ်ဂျင်မ်သည်အော်ဂဇင်စတင်ရန်လုံလောက်သောလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအဆင့်ကိုမအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အနေဖြင့် erotica ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအဆင့်ကိုသိသိသာသာတိုးပွားစေပြီးအော်ဂဇင်ကိုလည်းရရှိသည်။။ Fantasy နှင့် erotica တို့သည်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကိုတိုးမြှင့်ခဲ့ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အချိန်တွင်လွတ်လပ်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။
သင်တန်းသားများစွာသည်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်နှင့် erotica မပါဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုစိတ်ကူး။ မရနိုင်ကြပါ။ (Slosarz, 1992) သည်နှိုးဆွမှုအဆင့်များကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် 'ပျင်းခြင်း' ကိုကာကွယ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုများတွင်များပြားလှသောလိုအပ်ချက်များကိုအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ ဂျက်ကသူ၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများအပေါ်အယုံအကြည်ကင်းမဲ့လာပုံကိုဖော်ပြသည်။
J: လွန်ခဲ့သောငါးနှစ်၊ ၁၀ နှစ်အတွင်းနောက်ဆုံး၊ ကျွန်ုပ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖန်တီးနိုင်မည့်စိတ်ကူးယဉ်များကလုံလုံလောက်လောက်လှုံ့ဆော်ခံရရန်ကျွန်ုပ်ကိုတွန်းပို့လိမ့်မည်။
erotica ကိုအခြေခံပြီးဂျက်၏စိတ်ကူးယဉ်မှုများသည်အလွန်အမင်းပုံစံကျလာသည်။ လှုံ့ဆော်မှု၏အထူးသဖြင့် 'ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစား' နှင့်အတူအမျိုးသမီးများနှင့်ပတ်သက်။ ကး။ ဂျက်၏အခြေအနေနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ဖြစ်ရပ်မှန်မှာအလွန်ကွဲပြားခြားနားပြီး porno အမြင်အပေါ် အခြေခံ၍ ဖန်တီးထားသောသူ၏စံနမူနာနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိပါ (Slosarz, 1992); အစစ်အမှန်မိတ်ဖက် erotically အလုံအလောက်နှိုးဆော်ခြင်းမည်မဟုတ်ပါ။
ရှင်ပေါလုသည်သူ၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းများ၏တိုးတက်သောတိုးချဲ့မှုကိုတူညီသောတုန့်ပြန်မှုရရှိရန်တဖြည်းဖြည်း“ အားကြီးသော” erotica လိုအပ်သည်နှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်:
P: သငျသညျပျင်းရ, ထိုအပြာရုပ်ရှင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ ခင်ဗျားကိုအားတက်အောင်လုပ်ဖို့၊ မင်းကအားကောင်းတဲ့၊ အားကောင်းတဲ့အရာတွေကိုတစ်ချိန်လုံးရယူရမယ်။
အကြောင်းအရာကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်ပေါလု၏စိတ်ကူးယဉ်မှုများသည်သူတို့၏ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းစေသည်။ တစ်နေ့လျှင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်တိုင်သူကဤသို့ရှင်းပြသည် -
P: သငျသညျတူညီသောအရာလုပ်နေတာဆက်လက်မလုပ်ကိုင်နိုင်ပါ, သင်တစ် ဦး ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်နှင့်အတူငြီးငွေ့ဒါကြောင့်သင် (အကြောင်းရင်းမှာငါအမြဲတမ်းကောင်းသောခဲ့သော) ကို (ပြောင်းလဲမှု) ရတယ်။ ။ ။ ငါအိပ်မက်တစ်ခုကိုပြည်မှာနေထိုင်ခဲ့တယ်။
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်လက်တွဲဖော်လိင်နှစ် ဦး စလုံးတွင်ပါ ၀ င်သူများ၏အတွေ့အကြုံများကိုဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုမရှိခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အချိန်တွင်အလုပ်လုပ်သောလိင်ဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်သောသီအိုရီနှစ်ခုပေါ်ထွက်လာပြီးဤတွင်အကျဉ်းချုံးထားသည်။ မိတ်ဖက်လိင်ဆက်ဆံစဉ်ကာလအတွင်းအလုပ်မဖြစ်သောပါဝင်သူများသည်သက်ဆိုင်ရာမဟုတ်သောသိမှတ်မှုများကိုအာရုံစိုက်သည်။ သိမြင်မှုဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဟာခေါ်ဆောင်သွားတွေကိုအာရုံစိုက်နိုင်စွမ်းကနေအာရုံပျံ့လွင့်စေတယ်။ အာရုံခံစားမှုအသိပညာအားနည်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုသံသရာပျက်ပြားသွားခြင်းကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အလုပ်လုပ်သောမိတ်ဖက်လိင်မရှိခြင်းသည်ဤသင်တန်းသားများသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုမှီခိုလာသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုခြွင်းချက်ဖြစ်လာသည်; သင်ယူမှုသီအိုရီသည်တိကျသောအခြေအနေများကိုဖော်ပြခြင်းမရှိပါ။ ဤလေ့လာမှုတွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်နည်းစနစ်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောခြွင်းချက်အချက်များအဖြစ် (တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းကာလအတွင်းစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်အန္တာတိကကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ထောက်ပံ့ထားသော) အလုပ်သက်ဆိုင်ရာသိမှတ်ခံစားမှုများကိုအာရုံစိုက်နိုင်စွမ်းကိုမီးမောင်းထိုးပြထားသည်။
ဤလေ့လာမှုကအဓိကမေးခွန်း ၂ ခုတွင်အသေးစိတ်မေးမြန်းခြင်း၏ဆက်စပ်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ အပြုအမူနှင့်သိမှတ်ခံစားမှု။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေကြိမ်နှုန်း၏အထူးသဖြင့်သဘာ ၀ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ နှင့်အတူလိုက်ပါ erotica နှင့်စိတ်ကူးယဉ်တစ် ဦး ချင်းစီရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုကျဉ်းမြောင်းသောအစုအပေါ်အခြေခံပြီးဖြစ်လာသည်ဘယ်လိုနားလည်မှုပေး; ထိုကဲ့သို့သောအေးစက်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး နှင့်အတူလိင်စဉ်အတွင်းအခက်အခဲပိုမိုဆိုးရွားပုံရသည်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့ရေးဆွဲရေး၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်, ယောဂီပုံမှန်တစ် ဦး ချင်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းရှိမရှိမေးမြန်း: ဤလေ့လာမှုကိုလည်းတစ် ဦး ချင်းစီ၏ idiosyncratic တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပုံစံကိုတီထွင်ခဲ့ပုံကိုအတိအကျမေးမြန်းခြင်းသက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ပေးကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသည်။
ငါးဆယ်လေ့လာမှု - မစဉ်းစားမဆင်ခြင်သောအမျိုးသားများ၊ ကုသမှုနမူနာတစ်ခုတွင်ပြmနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၏လက္ခဏာများ - ကွန်ရက်ချဉ်းကပ်မှု (၂၀၂၀) - ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများကိုလေ့လာမှုအစီရင်ခံစာများရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့်သည်းခံနိုင်ခြင်း။ စင်စစ်အားဖြင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့်သည်းခံနိုင်ခြင်းသည်ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။
၄,၂၅၃ ယောက်သောအကြီးစားအွန်လိုင်းနမူနာ ( M အသက်အရွယ် = 38.33 နှစ်, SD က = 12.40) ကွဲပြားခြားနားသောအုပ်စုများအတွက်2PPU လက္ခဏာတွေ၏ဖွဲ့စည်းပုံစူးစမ်းဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်: စဉ်းစားကုသမှုအုပ်စု ( n = 509) နှင့်မစဉ်းစားကုသမှုအုပ်စု (n = 3,684) ။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိရောဂါလက္ခဏာများ၏ဖွဲ့စည်းပုံသည်ကုသမှုနှင့်မစဉ်းစားထားသောကုသမှုအုပ်စုများအကြားသိသိသာသာကွာခြားမှုမရှိပါ။ ရောဂါလက္ခဏာ ၂ ခုကိုအုပ်စုနှစ်ခုလုံးတွင်အတူတွေ့ရသည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများပါဝင်သောပထမအစုအဝေးသည်ကြိမ်နှုန်းနှင့်ပconflictိပက္ခ၊ ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ အုပ်စုနှစ်ခုလုံး၏ကွန်ယက်များတွင်အပြန့်ဆုံးလက္ခဏာများမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်း၊။ သို့သော်စိတ်ကိုပြုပြင်ခြင်းသည်စဉ်းစားသည့်ကုသမှုအဖွဲ့၏ကွန်ယက်တွင် ပို၍ အရေးပါသောနေရာနှင့်မစဉ်းစားထားသောကုသမှုအဖွဲ့၏ကွန်ယက်တွင်ပိုအရံအနေအထားရှိခဲ့သည်။
ငါးဆယ့်ခြောက်လေ့လာရန် တရုတ်နှင့်ဟန်ဂေရီရှိလူထုနှင့်နမူနာခွဲများတွင်ပြProbleနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုပမာဏ (PPCS-18) ၏ဂုဏ်သတ္တိများ (၂၀၂၀)
နမူနာသုံးကွန်ရက်များတွင်ဆုတ်ခွာခြင်းသည်ဗဟိုအချက်အချာဖြစ်သော်လည်းသည်းခံမှုသည် subclinical တစ် ဦး ချင်းစီ၏ကွန်ယက်တွင်ဗဟို node တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤခန့်မှန်းချက်များကိုထောက်ခံသည့်အနေဖြင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းသည်ကွန်ရက်အားလုံးတွင်မြင့်မားသောကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်မှုအားဖြင့်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည် (တရုတ်ရပ်ကွက်အမျိုးသား ၇၆.၈%၊ တရုတ်ခွဲစိတ်အမျိုးသား ၆၈.၈% နှင့်ဟန်ဂေရီလူမျိုးအမျိုးသား ၆၄.၂%) ။
Centrality ခန့်မှန်းချက်အရ subclinical နမူနာ၏အဓိကလက္ခဏာများသည်ရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့်သည်းခံစိတ်ရှိခြင်းဖြစ်သည်၊ သို့သော်ရုပ်သိမ်းခြင်းဒိုမိန်းသည်အသိုင်းအဝိုင်းနမူနာနှစ်ခုလုံးတွင်ဗဟိုအချက်အချာဖြစ်သည်။
ယခင်လေ့လာမှုများနှင့်ကိုက်ညီသည် (Gola & Potenza, 2016; Young et al ။ , 2000)၊ ပိုမိုဆိုးရွားသည့်စိတ်ကျန်းမာရေးရမှတ်များနှင့်ပိုမိုများပြားသောလိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများသည်ပိုမိုမြင့်မားသော PPCS ရမှတ်များနှင့်ဆက်နွယ်နေသည်။ ဤရလဒ်သည် PPU ကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်းတွင်တဏှာ၊ စိတ်ကျန်းမာရေးအကြောင်းအချက်များနှင့်အတင်းအကျပ်အသုံးပြုခြင်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အကြံပြုလိုကြောင်းဖြစ်နိုင်သည် (Brand, Rumpf et al ။ , 2020) ။
ထို့အပြင် PPCS-18 ၏အချက် (၆) ချက်တွင်ဗဟိုအချက်အခြာကျမှုကနမူနာသုံးခုစလုံးတွင်အရေးကြီးဆုံးအချက်အဖြစ်ရုပ်သိမ်းခြင်းကိုပြသခဲ့သည်။ subclinical သင်တန်းသားများအကြားအားသာချက်, ရငျးနှီးမှုနှင့်အပြန်အလှန်ဗဟိုပြုမှုရလဒ်အရသည်းခံမှုသည်လည်းအရေးကြီးသည်ကိုထောက်ကူပေးခဲ့ပြီးရုပ်သိမ်းခြင်းကိုဒုတိယလိုက်သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များအရဆုတ်ခွာခြင်းနှင့်သည်းခံမှုသည် subclinical တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အထူးအရေးကြီးကြောင်းဖော်ပြသည်။ သည်းခံမှုနှင့်ဆုတ်ခွာခြင်းကိုစွဲလမ်းမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာစံနှုန်းများအဖြစ်သတ်မှတ်သည် (Himmelsbach, 1941) ။ သည်းခံခြင်းနှင့်ဆုတ်ခွာခြင်းကဲ့သို့သောအယူအဆများသည် PPU ရှိအနာဂတ်သုတေသန၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သင့်သည် (de Alarcón et al, 2019; ။ Fernandez & Griffiths, 2019 ။ ) မည်သည့်အပြုအမူကိုစွဲလမ်းစေနိုင်သည်ဟုသည်းခံခြင်းနှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများသည်လက်ရှိဖြစ်သင့်ကြောင်း Griffiths က (2005) ကတင်ပြခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းသည် PPU အတွက်ဆေးကုသမှုသည်အရေးကြီးသည်ဟူသောအယူအဆကိုထောက်ခံသည်။ Reid ၏အမြင် (Reid, 2016) နှင့်အညီ၊ မလိုက်နာသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများရှိသည့်လူနာများကိုသည်းခံခြင်းနှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်း၏သက်သေအထောက်အထားသည်အလုပ်မဖြစ်သောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုစွဲလမ်းစေသည့်အရာအဖြစ်အရေးပါသောထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ငါးဆယ့်ခုနစ်ခုလေ့လာရန် - ပြProbleနာ Hypersexuality များအတွက်သုံးရောဂါ; မည်သည့်စံသတ်မှတ်ချက်များကအကူအညီရှာနေသည့်အပြုအမူကိုဟောကိန်းထုတ်သနည်း။ (၂၀၂၀) - နိဂုံးမှ:
ဖော်ပြထားသောကန့်သတ်ချက်များရှိနေသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်ဤသုတေသနသည် PH သုတေသန၏နယ်ပယ်နှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း (ပြproblemနာရှိသည့်) hypersexual အပြုအမူအပေါ်ရှုထောင့်အသစ်များကိုရှာဖွေရန်အထောက်အကူပြုသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်။ ကျနော်တို့ကအလေးပေး ကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသနက“ နှုတ်ထွက်ခြင်း” နှင့်“ အန L တရာယ်ကျဆင်းခြင်း” သည်“ ဆိုးကျိုးများ” အချက်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် PH ၏အရေးကြီးသောညွှန်းကိန်းများ (ပြproblemနာဖြစ်သည့် hypersexuality) ဖြစ်နိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ“ လိင်မှုဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ” (အမျိုးသမီးများအတွက်) အချက်အလက် (သို့) ယောက်ျားများအတွက် (ယောက်ျားများအတွက်)“ Orgasm frequency” သည် PH ကိုအခြားအခြေအနေများနှင့်ခွဲခြားရန်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုစွမ်းအားကိုပြသခြင်းမရှိပါ။ ဤရလဒ်များအရ hypersexuality ပြproblemsနာများအတွက်၊ အာရုံစူးစိုက်မှုသည်“ ထုတ်ယူခြင်း”၊ “ ပျော်ရွှင်မှုဆုံးရှုံးခြင်း” နှင့်အခြားလိင်ဆက်ဆံခြင်း၏“ ဆိုးကျိုးများ” အပေါ်တွင်ပိုမိုအာရုံစိုက်သင့်ပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိမ်နှုန်းသို့မဟုတ်“ အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမောင်းနှင်မှု” အပေါ်တွင်သာအာရုံမစိုက်သင့်ကြောင်းဖော်ပြသည်။60] အဓိကအားဖြင့် hypersexuality ကိုပြproblemနာအဖြစ်ကြုံတွေ့ရသော“ Negative Effects” များကြောင့်ဖြစ်သည်။
ငါးဆယ်လေ့လာမှု - အမျိုးမျိုးသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာပါဝင်သောအကြောင်းအရာများနှင့်ကုသမှုရှာဖွေခြင်းနှင့်ပြaticနာရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူလက္ခဏာများ (၂၀၂၀) နှင့်ဆက်စပ်သည့်အပြာရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုအကြာဆုံးတွေ့ဆုံခြင်း - ကောက်နှုတ်ချက်:
မူးယစ်ဆေးစွဲစွဲမူဘောင်အရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခြင်းသည်သည်းခံမှုကို ဦး တည်စေနိုင်သည်ဟုယူဆရသည်။33,34,39 စွဲလမ်းစေသည့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူပုံစံများနှင့်အညီသည်းခံခြင်းကိုနည်းလမ်း ၂ ခုအနက်မှဖော်ပြနိုင်သည်။ (၁) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုမြှုပ်နှံထားသောပိုမိုမြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းသို့မဟုတ်အချိန်၊ (၂) ပိုမိုလှုံ့ဆော်မှုကိုပိုမိုရှာဖွေခြင်းနှင့်စားသုံးခြင်း။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမဆင်ခြင်ဘဲပိုမိုနှိုးဆွသောလှုံ့ဆော်မှုများကိုရှာဖွေသည်။33,34,40 ပထမသည်းခံမှု၏သရုပ်သကန်သည်ကြာချိန်နှင့်အသုံးပြုမှုအကြိမ်များနှင့်အလွန်နီးကပ်စွာဆက်နွယ်နေသော်လည်းဒုတိယမှာမူမဟုတ္လား။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာရွက်များပါ ၀ င်သည့်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာအသုံးချနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်ဤအပြောင်းအလဲသည်အကြမ်းဖက်မှု၊ အဆိုးရွားဆုံးသို့မဟုတ်ဥပဒေအရတားမြစ်ထားသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအမျိုးအစားများ (ဥပမာအရွယ်မရောက်သေးသူများအပါအဝင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ) ကိုသုံးစွဲခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအခါဖြစ်သည်။ သို့သော်ဖော်ပြထားသောသီအိုရီဆိုင်ရာအခိုင်အမာပြောဆိုမှုများရှိနေသော်လည်းပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အတင်းအဓမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာရွက်များ၏ပါဝင်မှု၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲမှုကိုလေ့လာခဲသည်။
ယေဘူယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းနှင့်ကြာရှည်စွာထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်း၏အရေးကြီးပုံနှင့်ကုသမှုကိုရှာဖွေရန်အတွက်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများပါဝင်မှုနှင့်ပြproblemနာရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူလက္ခဏာများပြင်းထန်မှု၏အရေးကြီးပုံကိုဖော်ပြသည်။ ဤအရေးပါမှုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းအတွက်အသုံးပြုသောအချိန်ကာလအတိုင်းအတာကိုဖမ်းဆီးခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ဖော်ပြပါညွှန်းကိန်းများသည်ပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ကုသမှုရှာဖွေခြင်းကိုရှင်းပြရာတွင်အထောက်အကူပြုကြောင်းအကြံပြုခြင်းဖြစ်သည်။
...ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာရွက်များပါ ၀ င်သည့်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲခြင်း (ယခုလေ့လာမှုတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုနှင့်ဆန့်ကျင်။ လိင်တူဆက်ဆံခြင်း၊ အကြမ်းဖက်မှု၊ အုပ်စုလိုက်လိင်မြင်ကွင်းများ၊ အရွယ်မရောက်သေးသူများနှင့်လိင်မြင်ကွင်းများပါဝင်သောမြင်ကွင်းများ) သည်ကုသမှုခံယူရန်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ပြင်းထန်မှုကိုသိသိသာသာကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှုသင်တန်းသားများအကြားရောဂါလက္ခဏာများ၏။
ဤရလဒ်အတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောရှင်းပြချက်တစ်ခုမှာအပြောင်းအလဲအမျိုးမျိုးသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းအတွက်အချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ဤလှုပ်ရှားမှုအတွက်အချိန်ပိုပေးသူများသည်ပိုမိုများပြားသောညစ်ညမ်းသောအကြောင်းအရာအမျိုးအစားများ၊ အမျိုးအစားများသို့မဟုတ်အမျိုးအစားများကိုစားသုံးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကဤရှင်းပြချက်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်မှီခိုသောကိန်းဂဏန်းများအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲမှုအကြားဆက်နွယ်မှုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုအတွက်အချိန်ပေးအပ်သည့်တိုင်သိသာထင်ရှားကြောင်းပြသသည်။ ထို့အပြင်တစ်ခုလုံးကိုနမူနာ၌ဤစားသုံးမှုမှမြှုပ်နှံရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပါဝင်သောအကြောင်းအရာများနှင့်အချိန်ကွာခြားမှုအကြား bivariate ဆက်စပ်မှုသည်အံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင်အားနည်းနေသည်။ ၎င်းသည်ဤညွှန်ကိန်း (၂) ခု၏ကွဲပြားခြားနားမှုနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းအလေ့အထများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာရုပ်ပုံလွှာရရှိစေရန်၎င်းတို့ကိုလေ့လာရန်လိုအပ်သည်။
ဖော်ပြပါရလဒ်သည်သီးခြားဝိသေသလက္ခဏာများဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာရွက်များကိုစားသုံးရန်စိတ်အားထက်သန်မှုသည်ပိုမိုအခြေခံကျသောကန ဦး ဦး စားပေးမှုကိုထင်ဟပ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ပိုမိုသည်းခံနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ပျက်အားလျော့ခြင်းများကိုတိုက်ရိုက်မဆိုလိုပေ။ ။33,34 အနာဂတ်သုတေသနသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှု၏လမ်းကြောင်းကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသောအကြောင်းအရာ၏လက္ခဏာများပေါ် မူတည်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးသင့်ပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင်အတိအလင်းအကြောင်းအရာများနှင့်ထိတွေ့ခံရခြင်း၏ရလဒ်အဖြစ် ၀ ယ်ယူလျှင်သို့မဟုတ်ကန ဦး ဦး စားပေးချက်များဖြင့်ပိုမိုရှင်းလင်းစွာရှင်းပြခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးသင့်သည်။ ဤပြissueနာသည်လက်တွေ့ကျကျအရေးကြီးပြီးသိပ္ပံနည်းကျစိတ်ဝင်စားမှုရှိပုံရပြီးသုတေသနအာရုံစူးစိုက်မှုကိုပိုမိုဆွဲဆောင်သင့်သည်။
လေ့လာချက် ငါးဆယ့်ကိုး: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်ခြင်း“ ပြန်လည်စတင်ခြင်း” အတွေ့အကြုံ - အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲဆိုခြင်းဖိုရမ် (၂၀၂၁) တွင် Abstinence ဂျာနယ်များ၏အရည်အသွေးဆန်းစစ်ချက်) - အလွန်ကောင်းမွန်သောစက္ကူသည် rebooting အတွေ့အကြုံ ၁၀၀ ကျော်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးဖိုရမ်များတွင်လူများကြုံတွေ့နေရသောအရာများကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ ပြန်လည်နာလန်ထူရေးဖိုရမ်များနှင့်ပတ်သက်သောဝါဒဖြန့်ချိမှုအများစုနှင့်ဆန့်ကျင်သည် (ဥပမာအားဖြင့်၎င်းတို့အားလုံးသည်ဘာသာရေး၊ သုတ်ရည်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းအစွန်းရောက်သူများကဲ့သို့) ။ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုစွန့်ခွာရန်ကြိုးစားသည့်အမျိုးသားများတွင်စက္ကူတွင်သည်းခံခြင်းနှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများကိုဖော်ပြထားသည်။ သက်ဆိုင်ရာကောက်နုတ်ချက်များ
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောမူလကိုယ်တိုင်ပြproblemနာတစ်ခုမှာစွဲခြင်းနှင့်ဆိုင်သောလက္ခဏာများဖြစ်သည်။ ဤလက္ခဏာများတွင်ယေဘုယျအားဖြင့်အားနည်းသောထိန်းချုပ်မှု၊ ဆုတ်ခွာ, သည်းခံစိတ်, အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးဆက်များရှိသော်လည်းအသုံးပြုမှု၊ လည်ပတ်မှုချို့ယွင်းခြင်းနှင့်ဆက်လက်သုံးစွဲခြင်းတို့အတွက်စိတ်သောကရောက်သည် (ဥပမာBőthe et al ။ , 2018; Kor et al ။ , 2014).
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အခြေအနေနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများနှင့်စွဲလမ်းမှုကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်များပေါ်ပေါက်လာခြင်းတို့ကြောင့်ခက်ခဲသည်ဟုယူဆခဲ့ကြသည်။ (ဆိုလိုသည်မှာဆုတ်ခွာခြင်းကဲ့သို့သောလက္ခဏာများ၊ တဏှာနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်း / ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းဆုံးရှုံးခြင်း) (ကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al ။ , 2019; ဖာနန်ဒက်စ et al ။ , 2020).
အချို့အသင်းဝင်များမှ၎င်းတို့သည်ဆိုးဆိုးရွားရွားဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုခံစားခဲ့ရကြောင်း၊ အချို့သူများကဤဆိုးကျိုးသက်ရောက်သည့်ပြည်နယ်များကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းအားရုပ်သိမ်းခြင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူကြသည်. (ဖြစ်နိုင်သော) အဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူသောအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးသက်ရောက်မှုသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများတွင်“ ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများ” တွင်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ “ ဦး နှောက်မြူ၊ ” ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ အခြားအဖွဲ့ဝင်များသည်အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုကိုရုပ်သိမ်းခြင်းအားအလိုအလျောက်မသတ်မှတ်သော်လည်းအပျက်သဘောဆောင်သောဘဝအဖြစ်အပျက်များ (ဥပမာ -“ လွန်ခဲ့သောသုံးရက်ကကျွန်ုပ်သည်အလွယ်တကူစိတ်လှုပ်ရှားမှုရနေကြောင်းတွေ့ရှိရပြီး၎င်းသည်အလုပ်ဖြစ်မလားမသိ) စိတ်ပျက်သို့မဟုတ်ဆုတ်ခွာ "[046, 30]] ။ အချို့အဖွဲ့ဝင်များက၎င်းတို့သည်ယခင်ကညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကို အသုံးပြု၍ အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများကိုရေတွက်ရန်အတွက်ကြောင့်ဤစိတ်ခံစားမှုများသည်ရှောင်ကြဉ်ခြင်းကာလအတွင်းပိုမိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်ကြသည်။ "ပြန်လည်တွန်းအားကြောင့်ဤစိတ်ခံစားမှုများသည်အလွန်ပြင်းထန်သလားကျွန်ုပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကတွေးမိသည်" [032, 28 နှစ်]) ။ မှတ်သားစရာမှာအသက် ၁၈ နှစ်မှ ၂၉ နှစ်အတွင်းရှိသူများသည်အခြားအသက်နှစ်အုပ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် astinin တွင်အခြားဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းဖော်ပြနိုင်ပြီး၊ အသက် ၄၀ နှင့်အထက်သည် abstinence အတွင်းရှိ“ ဆုတ်ခွာခြင်းနှင့်တူသော” လက္ခဏာများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်လျော့နည်းစေသည်။ အခြားအသက်အရွယ်အုပ်စုနှစ်စု။ ဤအပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုများ (ဥပမာ၊ ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ အပျက်သဘောဆောင်သောဘဝဖြစ်ရပ်များသို့မဟုတ်တိုးပွားလာပြီးဖြစ်သောလက်ရှိစိတ်ခံစားမှုအခြေအနေများ) မည်သို့ပင်ဖြစ်စေအသင်းသားများအနေဖြင့်အပျက်သဘောဆောင်သောဆိုးကျိုးများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမိမိကိုယ်ကိုဆေးဝါးမသောက်သုံးဘဲဖြေရှင်းရန်ခက်ခဲသည်။ ။
သည်းခံစိတ် / အလေ့အကျင့်:
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအလွန်အကျွံအသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအဓိကအကျိုးဆက်သုံးခုကိုအဖွဲ့ဝင်များကရှောင်ကြဉ်ခြင်းကိုစတင်ရန်လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ပထမ ဦး စွာအဖွဲ့ဝင်များစွာအတွက် (n ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းပုံစံကိုကျော်လွှားလိုသောဆန္ဒရှိခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်လှည့်စားခြင်း (ဥပမာ၊ "အခုအသက် ၄၃ နှစ်ရှိပြီ။ ဒီကြောက်မက်ဘွယ်သောစွဲလမ်းမှုမှလွတ်မြောက်ရန်ယခုအချိန်တွင်ရောက်ရှိလာပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်" [098, 43 နှစ်] ။ စွဲစွဲလမ်းမှုကိုအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းဆုံးရှုံးခြင်းတို့၏အတွေ့အကြုံ (ဥပမာ - "ငါရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားနေတာ၊ ဒါပေမယ့်အရမ်းခက်တယ်၊ ငါဟာ porn ကိုတွန်းအားပေးတဲ့အရာတစ်ခုခုရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်" [005, 18 နှစ်]), ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဆိုးကျိုးများကိုစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်စေခြင်းနှင့်သည်းခံခြင်းတို့ဖြစ်သည် (ဥပမာ, "ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်တဲ့အခါဘာမှမခံစားရတော့ဘူး။ ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းတယ်၊" [045, 34 နှစ်]) နှင့်စိတ်ပျက်နှင့် disempowerment ၏ခံစားချက်များကိုစိတ်ပျက်ဖွယ် ("ကိုယ့်ရပ်တန့်ဖို့ခွန်အားမရှိဘူးဆိုတာမုန်းတယ်။ ငါဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုဆန့်ကျင်နိုင်တဲ့အစွမ်းမရှိဘူး။" [087, 42 နှစ်] ။
ဒါဟာဝိရောဓိသတိပြုပါရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်, အသင်း ၀ င်သုံးပုံတစ်ပုံနီးပါးကလိင်ဆန္ဒပြင်းပြမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းထက်လိင်ဆန္ဒကိုလျော့နည်းသွားစေသည်ဟုခံစားခဲ့ရကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါ "Flatline" ဟူသောဝေါဟာရကိုအဖွဲ့ဝင်များ abstinence စဉ်အတွင်းလိင်စိတ်သိသိသာသာကျဆင်းခြင်းသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသောအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ် (အချို့သည်ဤအချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပုံရသော်လည်းစိတ် ၀ င်စားမှုနိမ့်ခြင်းနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်စိတ်ပျက်အားလျော့ခြင်းဟူသောခံစားချက်တို့ပါ ၀ င်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု [056, 30]) နီးပါးမရှိခဲ့ပါဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်းခြောက်ဆယ် - ပြProbleနာ Hypersexuality များအတွက်သုံးရောဂါ; မည်သည့်စံသတ်မှတ်ချက်များကအကူအညီရှာနေသည့်အပြုအမူကိုဟောကိန်းထုတ်သနည်း။ (၂၀၂၀) - သည်းခံစိတ်နှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများသည်“ ပြproblemနာရှိသော hypersexuality” (လိင် / ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု) နှင့်ဆက်နွယ်သော်လည်းလိင်ဆန္ဒသည်အနည်းငယ်သာသက်ရောက်ခဲ့သည်။
အကြောင်းရင်းများ အပျက်သဘောဆောင်သောဆိုးကျိုးများနှင့်အစွန်းရောက်မှုများကအကူအညီလိုအပ်နေခြင်းကိုအပြုသဘောဖြင့်ဟောကိန်းထုတ်သည်။ အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်အရေးကြီးဆုံးခန့်မှန်းချက်အနေဖြင့် Negative Effects များကိုအသုံးပြုခြင်း။ ဤအချက်သည်အခြားသူများအကြားဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ပျော်ရွှင်မှုဆုံးရှုံးခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
ဖော်ပြထားသောကန့်သတ်ချက်များရှိနေသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်ဤသုတေသနသည် PH သုတေသန၏နယ်ပယ်နှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း (ပြproblemနာရှိသည့်) hypersexual အပြုအမူအပေါ်ရှုထောင့်အသစ်များကိုရှာဖွေရန်အထောက်အကူပြုသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသနက“ နှုတ်ထွက်ခြင်း” နှင့်“ အန, တရာယ်ကျဆင်းခြင်း” သည်“ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်ခြင်း” အချက်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် PH ၏အရေးကြီးသောညွှန်းကိန်းများဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ“ Orgasm frequency” သည်“ လိင်ဆိုင်ရာဆန္ဒ” (အမျိုးသမီးများအတွက်) အချက်အနေဖြင့်သို့မဟုတ် covariate (အမျိုးသားများအတွက်) အနေဖြင့် PH အားအခြားအခြေအနေများနှင့်ခွဲခြားရန်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုစွမ်းအားကိုပြသခြင်းမရှိပါ။ ဤရလဒ်များအရလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောပြproblemsနာများအတွက်၊ အာရုံစူးစိုက်မှုသည်“ နုတ်ထွက်ခြင်း”၊ “ ပျော်ရွှင်မှုဆုံးရှုံးခြင်း” နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာအခြား“ အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ” ကိုပိုမိုအာရုံစိုက်သင့်ပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိမ်နှုန်းသို့မဟုတ်“ အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမောင်းနှင်မှု” အပေါ်တွင်သာအာရုံမစိုက်သင့်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်" အဓိကအားဖြင့် hypersexuality ကိုပြproblemနာအဖြစ်ကြုံတွေ့ရသော“ Negative Effects” များကြောင့်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိသုတေသနကို အခြေခံ၍ PH အတွက်တိုင်းတာမှုကိရိယာတွင်ဤဝိသေသလက္ခဏာများကိုကိုင်တွယ်သောပစ္စည်းများထည့်သွင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သည်းခံစိတ်ဆိုင်ရာနောက်ထပ်အထောက်အထားများ - ပိုမိုပြင်းထန်သောလိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများကျဆင်းခြင်းသည်“ ပြproblemနာရှိသောလိင်ဆက်ဆံခြင်း” အတွက်အကူအညီလိုအပ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။
porn / လိင်စွဲ? ဤစာမျက်နှာကိုစာရင်း 5o neuroscience-based လေ့လာမှုများ (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, ဟော်မုန်း) ။ ၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလေ့လာမှုများအစီရင်ခံသည့်အာရုံကြောတွေ့ရှိချက် mirror အဖြစ်အားလုံးသည်စွဲမော်ဒယ်ခိုင်မာသောထောက်ခံမှုပေး။
နောက်ထပ်စာမျက်နှာ porn အသုံးပြုသူများအတွက်ရုပ်သိမ်းရေးလက္ခဏာတွေအစီရင်ခံ 15 လေ့လာမှုများ.
အပေါ်အတွေး ၁၂၂ ခုတွေ့ရှိချက်များကိုညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှု (သည်းခံမှု)၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများနှင့်ကိုက်ညီသောလေ့လာမှုများကိုလေ့လာခြင်း"
Pingback: Porn သည် အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးများကို ထိခိုက်စေသည် - Radicailín
Pingback: လူတစ်ယောက်မှာ သမာဓိဆိုတာ ဘာလဲ။ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် စကားလုံးများထက် ပို၍ကျယ်လောင်သည်။
Pingback: ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းမှုအန္တရာယ်များ- သင်သိထားရမည့်အရာ - innerfuel.net